အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): ခင်
အားလုံးပဲ ပျော်ရွင်နိုင်မဲ့ နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ ခင် ဆန္ဒပြုပါတယ်။
နာမည်ကတော့ ခင်ဖုန်းရွှေပါ ညီအမနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ ခင်နဲ့ မမ တင်ဖုန်းရွှေပေါ့…။ ဖေဖေကတော့မရှိတော့ဘူး ။ မေမေကတော့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပဲ မမတင်တို့ မိသားစုနဲ့အတူနေတယ်။ ခင်လဲ အိမ်ထောင်နဲ့ပါ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ… ခစ်.ခစ်..အခုလောလောဆယ်တော့ အပျိုကြီးပြန်လုပ်နေတယ်လို့..ပြောရမလား..ဟင်..ဟင်။ ခင့်ရဲ့ အမအကြီး ခင့်စီဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ရန်ကုန်ကို ကုမ္မဏီကိစ္စ အစည်းအဝေး တခုသွားစရာ ရှိတဲ့ ခင့် ကို ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ တူတော်မောင် သူ့သားစီ အိမ်ကနေ ပစ္စည်းလေးတချို့ ထည့်ပေးလိုက်ချုင်လို့တဲ့ ။ပြီးတော့ အိမ်တလုံးထဲမှာ သူ့သားတယောက်ထဲ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလဲ သိချင်လို့ ခင့်ကိုကုမ္မဏီကစီစဉ်ပေးတဲ့ ဟိုတယ်မှာမနေပဲ သူ့သားနဲ့ အတူ တပတ်လောက်သွားနေပေးဖို့ ပြောလာတယ်။ အိမ်ကိုလွမ်းနာကျလို့ အိမ်ကိုလဲ အတော်လွမ်းနေပါတတဲ့…ဒါနဲ့ ခရီးမထွတ်ခင် မမတင်အိမ်ရှိရာကို အရင်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်လုပ်စားစရာတွေ အကြော်အလှော်တွေ အိင်္ကျီအ၀တ်အစားတချို့ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်တလုံး ကို ခင်နဲ့ လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သားက ကျောင်းကိစ္စတွေ သူ့အားကစားကိစ္စတွေနဲ့ အခုတလော အိမ်သိပ်မကပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ …ဒါကြောင်တင် သူ့ တိုက်ခန်းသွားရင် သား ၀သန်နဲ့မတွေ့မှာစိုးလို့ ဆိုပြီး သားရဲ့ အိမ်ခန်းသော့တချောင်းကိုပါ တခါထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး ခင်လဲ ခရီးစထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကားကတော့ ခင် ကိုတိုင်ပဲမောင်းတယ်…ဒရိုက်ပါမထားဘူး အခုလိုရန်ကုန်-မန္တလေး ဟိုက်ဝေးလဲ ကိုကိုယ်တိုင်ပဲမောင်းနေကျလေ…ကားပျက်မှာဘာညာ ဘာမှမကြောက်ဘူး …ခင် တို့ ငယ်ငယ်ကတဲ့က ကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သိထိုက် ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် ဖေဖေကတင်ပေးထားတယ်လေး…ကို့ကိုယ်လဲ ယုံကြည်မူတော့ အပြည့်ရှိပြီးသားပဲ။ ကားလေးမောင်းနေရင်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကို သွားပြီးတွေးမိ နေပါတယ်။ ခင့် ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအကွဲအပြဲ တွေ၊ ၃၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့ …အထူးခြားဆုံးကတော့ ခင်တူတော်မောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူလေးတွေ အကြောင်းပေါ့….။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ကုမ္မဏီရုံးပိတ်ရက် တရက်က မမတင်တို့အိမ်မှာ ခင်ရယ် မမရယ် ၀သန်ရယ် မေမေရယ် ၄ယောက် မုန့်ဟင်းခါးလုပ်စားကျပါတယ် တင့် ယောကျာ်းကိုသန်းဝင်းကတော့မရှိဘူး နယ်ဘက်ခရီးထွတ်နေတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ၀သန်တယောက်ထူးခြားနေတယ်..ခင့်ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ ပထမတော့ သာမန်ပဲကြည့်ထယ်ထင်ထားတာ ။ အဲလိုလဲမဟုတ်ဘူး သူကြည့်ရင်လဲ ခင့်ရဲ့ရင်သားတွေ တင်ပါးတွေကိုပဲ မျက်စိကျွတ်ကျမတတ်ကိုကြည့်တာ။
အဲလိုတွေကြည့်ကြည့်ပြီးရင် အိမ်သာထဲကို ခဏခဏ ၀င်ဝင်သွားပါရော…အဲဒါဘာအဓိပါယ်လဲဆိုတာ ခင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ မမ တင်ကတော့ ဘယ်လိုမှ သတိထားမိတဲ့ ပုံမပေါက်ဘူး။ သူလုပ်စရာရှိတာတွေကိုပဲလုပ်လို့ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်လို့ ..ဘာမှသတိထားမိပုံ မပေါ်ဘူး။ ဒီလို ဆယ်ကျော်သက်လေးများ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သဘာဝကို ခင်ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ပါတယ်… သူတို့အသက်အရွယ်လို အချိန်အခါမျိုးဟာ လေပြေလေး ဖြည်းဖြည်းဖြတ်တိုက်သွားတာတောင် လိုက်ခံစားပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ခံစားလွယ်တဲ့ အသက်အရွယ်ဆိုတာ။
ခင့်ကို ၀သန်အဲလိုတွေကြည့်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ မှန်ရှေ့ ရပ်လို့ ခင့် တကိုလုံးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ပြန်ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ခင့် အသက်က အခု ၃၅နှစ်ထဲမှာ အသားဖြူတယ် အရပ်၅ပေ၅ရှိတယ် ကိုခန္ဓောအလေးချိန် ၁၂၅ပေါင်ရှိတယ်။ ရင်တို့ တင်တို့ကတော့ အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘူး သူ့ကောက်ကြောင်းနဲ့သူတော့ တင့်တင့်တယ်တယ်ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ကျဖူးတယ် …ဒါပေမဲ့အဲဒီယောကျာ်းနဲ့ ၁နှစ်ကျော်ကျော်သာပေါင်းပြီး တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့တယ်။ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာလား ဘာလားတော့မသိဘူး ခင်သူနဲ့ ဆက်ပေါင်းလို့ မရတော့တာသေချာသလောက်ရှိနေလို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကျတာပေါ့။ ဒီလို အိမ်ထောင်ကွဲပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ခင့်ကို လက်ထပ်ချင်လို့ နိုင်ငံခြားရှိမေမေ့ အမျိုးဘက်က လူတယောက် လာပြီးတောင်းရမ်းဖူးတယ်.။ခင် အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ အချိန်လဲဖြစ် စိတ်တွေလဲ အရမ်းရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့် ခင် ညင်းပယ်ခဲ့လိုက်မိတယ်။ မေမေနဲ့ မမတင်ကတော့ အဲလို ငြင်းလိုက်လို့ ခင့်ကို တပါတ်လောက် စကားတောင်မပြောကျဘူးလေ။ ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ် ခင့်ကို လက်ထပ်ချင်တယ့် ပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်ငံခြားက စတော့တွေအများကြီးပိုင်တယ်ိလို့ ပြောတယ် ..ဘောစိကြီးပေါ့…မေမေတို့ ဆွေမျိုးအတိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာဆိုရင် မျက်နှာတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောတာပဲ…ခင်လဲသေချာမသိဘူး..။ ကိုမြင့် အသုံးမကျလို့သာ ကွာရှင်းလိုက်ရတာ အရင်ချစ်သူသံယော်ဇဉ်ကမကုန်သေးတော့ ခင် စိတ်ရှုပ်လို့ ကို့ကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့လဲတိုးသွားတော့ ခင် ငြင်းပယ်ခဲ့ရတယ်လေး။ သူတို့ဘက်က ဘယ်လောက်ချမ်းသာလို့ ဘယ်လောက်မျက်နှာကြီးတယ်ဆိုတာလဲ ခင် သေချာတောပမသိပါဘူး။
ဒါနဲ့ ၀သန်တယောက် မမတို့အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါလုပ်စားတဲ့နေ့က
သူ ခင့်ကိုအဲလိုတွေ ချောင်းချောင်းကြည့်နေတာတွေကို မသိသလိုပဲနေပေးလိုက်မိတယ်။ခင် တခုပြောချင်တာက ၀သန်တယောက် ဘာကြောင့် သူ့အဒေါ်အရင်းကိုမှ ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ ခံစားနေရတာလဲ ဘာလို့ အဒေါ်အရင်းကို စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲ….သူ့ရုပ်ရည်ကအစိုးကြီး မဟုတ်တဲ့အပြင် အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပြီး ယောကျာ်းပီသတဲ့ လူချောလေးတယောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ အားကစားအရမ်းလုပ်ထားလို့ အရွှယ်နဲ့ မလိုက်အောင် တောင့်တင်းလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုအချိုးအစားရှိတဲ့ သူတယောက်…သူ့လိုပုံမျိုးနဲ့ မိန်းမချောလေးတွေကို ခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးလို့ရနေရဲ့သားနဲ့ ကျမလို့ အသက် ၃၀ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ တလင်ကွာ တခုလပ် သူ့အဒေါ်အရင်းခေါက်ခေါက်ကိုမှ ဒီလို ဖိုမစိတ်မျိုးနဲ့ စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲ…မစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲ ဖြစ်ရပါတယ်။ သား ၀သန်အသက်က ဒီနှစ်ထဲမှာဆို ၂၁နှစ်ကျော်သွားပြီလေး။ ခင်ကလဲ သူအဲလိုအပြုအမူမျိုးတွေ လုပ်ပြလာရင် အခန်းထဲဝင်ပြီးကို့ကိုယ်ကို မှန်ထဲချေဆုံးခေါင်းဆုံး ပြေးပြေးကြည့်မိတယ်…ကိုလဲ ဘာတွေလုပ်လို့လုပ်မိလဲမသိတော့ပါဘူး။
ခင့် စိတ်တွေ ဟာလဲ အနယ်မကျသေးဘူး …ယောကျာ်းနဲ့ကွာရှင်းထားတာလဲ သိပ်မကြာသေးတော့ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတဲ့ အတွက် …စိတ်တွေကသိပ်ပြီးနေသာထိုင်သာ မရှိသေးတဲ့ သဘောလို့ပဲပြောရမလား…သိပ်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့။ အဲလိုကွာရှင်းထားတုန်းက မမတင် တို့အိမ်မှာ တော်တော်ကြာနေခဲ့တယ်။ ခင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တလုံး မ၀ယ်ဖြစ်ခင်ထိလို့ ပြောရမှာပေါ့။ တနေ့ ၀သန် ရန်ကုန်ကနေ ကျောင်းခဏပိတ်လို့ ပြန်လာပါတယ်…သူပြန်လာတော့ ခင်က သူ့အခန်းမှာနေနေတာလေ။
သူ့အတွက် ဘုံပျောက်သွားတာပေါ့…၀သန်အခန်းထဲမှာပဲ ခင်နဲ့ အတူအိပ်ဖို့ ၀သန့်ကို ပြောသေးတယ်…ကောင်လေးက အိပ်ချင်နေတဲ့ပုံပဲ …ဒါပေမဲ့ ၀သန် ခင်နဲ့အတူအိပ်ခွင့်မရလိုက်ပါဘူး မမတင်က မအိပ်ခိုင်းဘူးလေ “အို ..မင်းတို့ တူဝရီးနှစ်ယောက် ကုတင်တလုံးထဲ ကျပ်ကကျပ်နဲ့ ဘယ်လိုအိပ်လို့ရမလဲ အိပ်နေရင်း ကုတင်ပေါ်က ပြုတ်ကျမှဖြစ် အကွဲကွဲအပြဲပြဲတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ …သား ကလာတုန်းခဏ အိမ်ရှေ့ ဆိုဖာပေါ် အိပ်လိုက်ပါကွယ် နော်..သားလေး”
လို့မမတင်က ပြောလာတော့မှ သူ့ ပျော်နေရာကနေ စိတ်အိုက်သွားသလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတာ ခင် သတိထားလိုက်မိတယ်။ ခင် လဲ ဘာမှမပြောတော့ပဲ သူတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ကြား ပြုံးစိစိသာလုပ်နေမိတော့တယ်။ မမတင် ကလဲသူ့သား အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတာကို သဘောပေါက်တဲ့ ပုံရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ခင် နဲ့ ပေးမအိပ်ရဲတာလဲဖြစ်မှာပါ။ ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ် သား ၀သန်ရဲ့ ကုတင်က နဲနဲမြင့်တယ်… တယောက်အိပ်ကုတင်ဆိုတော့ နဲနဲလဲကျင်းတယ်လေး။
“ တီတီခင် သားအခန်းမှာပဲ အိပ်လိုက်ပါ …သား ဆိုဖာပေါ်မှာပဲ အိပ်လိုက်မယ်”ဆိုတော့
အဲဒီည ခင်လဲ ၀သန့်အခန်းမှာပဲ ဆက်အိပ်လိုက်တယ်… ညတခေါင်ကျော်လောက် ၁နာရီထိုးလောက်လဲရောက်ရော ခင်တရေးနိုးပြီး မျက်လုံးဖွင့်အကြည့် .. “အမလေး”်ခင် ကျက်သီးတွေ ထပြီး လှန့်ဖြန့် သွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့။ ခင့် ည၀တ် ဂါဝန်လေးက ခင့် ဗိုက်သားအထိလှန်တက်နေတယ်သိလာ…ခင့် အတွင်းခန်အဖြူလေးကပေါ်လို့ အတွင်းခံက အရမ်းပါးတော့ ခင့် ပစ္စည်အကွဲကြောင်းရာလေးက သစ်သစ်ရစ်ရစ်လေးပေါ်လို့ ။ ခင် အရမ်းလှန့်သွားတယ် …ခင့် ည၀တ် ဂါဝန်ဇာပါလေးတွေ ၀တ်အိပ်တတ်တယ်…တခါတလေတော့ ထမီနဲ့ပဲအိပ်တယ်။ အခုလိုတော့ အပေါ်ထိ လှန်တက်နေရလောက်အောင် ခင် အအိပ်မကျန်းဘူးဆိုတာ ခင့် ကိုခင်သိတယ်။အိပ်ရာပေါ်ကဆင်းပြီး တံခါးသွားကြည့်တော့ တံခါးက ခပ်ဟဟလေး ပွင့်နေတယ်။ ခင်ညက တံခါဂျတ်မထိုးခဲ့မိဘူးဆိုတာ အခုမှစဉ်းစာမိတော့တယ်။ ခင် သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ ဒါဘယ်သူ့လက်ချက်လဲဆိုတာ။ အဲဒီညခင် အိပ်လို့မရတော့လို့ စဉ်းစားနေရင်းက ရေစာသလိုဖြစ်လာတာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာရှိရာ မီးဖိုခန်းဘက်ကို ထွတ်လာခဲ့မိတယ်။ မီးဖိုခန်းထဲရောက်တော့ ၀သန်တယောက် ရေဖန်ခွက်လေးကိုင်လို့ ထိုင်ခုံတလုံးပေါ်ထိုင်နေလေရဲ့…ခင်လဲ အိပ်ချင်မူးတူးပုံစံနဲ့ ၀သန့်ကို ဘာမှမပြောပဲ ရေခဲသေတ္တာရှိရာကို လာခဲ့လိုက်ပြီး သေတ္တာထဲက ရေဗူးကိုထုတ် ဖန်ခွက်တလုံးထဲထည့်ပြီးသောက်ချလိုက်တယ်။ ရေဗူးပြန်ထည့်ရင်း ၀သန်ဘက်ကို ခင်လည့်လိုက်တယ်…
“ သား ၀သန် မအိပ်သေးဘူးလာ ညနက်နေပြီလေး သားရဲ့”
“ ဟုတ်တယ် တီတီ … သား သိပ်အိပ်မရတာနဲ့ ထထိုင်နေမိတာ”
“ဟင်…ဘာလို့လဲသားရဲ့ …ကြိုးစားပြီး အိပ်လိုက်ပါ သားရယ် မိုးလဲ တော်တော်ချုပ်နေပြီ”
သား ၀သန် အိပ်မရတဲ့အကြောင်းကို ခင် လဲသိနေတယ်ဆိုတာကို ၀သန်တယောက်ရိတ်မိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး…
ဒါနဲ့ ၀သန် ဖန်ခွက်လေးချလို့ ဧည့်ခန်းရှိရာကို ထွတ်သွားတော့တယ်။
အဲနောက် ခင်လဲ အခန်းထဲပြန်လာ တံခါဂျက်ထိုးလို အိပ်ရာပေါ်တက် ဟိုဟာစဉ်းစား ဒီဟာစဉ်းစားနဲ့ ခင် လဲ အိပ်မရတော့ဘူး ..သိပ်မကြာပါဘူး သား ၀သန် အိပ်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကနေ ညည်းညူသံ သဲသဲ လေးထွက်လာတယ်… ဘာများလဲ ဆိုပြီး အိပ်ရာပေါ်က ထ ပြီး တံခါးအသာဖွင့်လို့ ဧည့်ခန်းထဲကို တိုးတိုးလေးလမ်းလျှောက်သွားရင်း ၀င်သွားမိတာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ခင် တညလုံး အိပ်ရာပေါ်တယောက်ထဲ နေမထိထိုင်မသာကိုဖြစ်လို့။ ဘာများထင်လဲ ..အမလေး သား ၀သန်တယောက် သူ့ ငယ်ပါလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အားရပါးရပွတ်နေလိုက်တာ။ ကိုမြင့်၇ှိစဉ်က ခင် ကိုလုပ်လို့ ခင်ကစိတ်မပါဘူး ပင်လဲပင်ပန်းနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ကိုမြင့်တယောက် သူ့လိင်တံကြီးကို ခင့် ပစ္စည်းထဲကထုတ်လိုက်တယ် နောက်ပြီး… ၀သန်အခုလုပ်သလိုပဲ သူ့ပစ္စည်းကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်အောက်ပွတ်ပေးနေတတ်တယ်။ ခင်က ကိုမြင့်အဲလိုလုပ်တာကို ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့ ကိုမြင့်က ဒါယောကျာ်းလေးတွေမိန်းမနဲ့ မဆက်ဆံပဲ ကို့ကိုယ်ကို အာသာဖြေတာ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် ဂွင်းတိုက်တယ်ခေါ်တယ်ခင့်ရဲ့လို့ ကိုမြင့် ပြောပြဖူးတယ်။ ဒါဆို သား ၀သန် ဂွင်းတိုက်လို့ အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်နေတာပါလာ ဆိုပြီး ခင်လဲ မျက်လုံးလေးအပြူးသားနဲ့ ကြည့်နေမိရော..။
သူငယ်ငယ်တုန်းက တွေ့ဖူးတဲ့ ၀သန့်ငယ်ပါလေးက အခုတော့ရှည်ပြီး အလုံး ကလဲကြီးလိုက်တာမှ…ခင့်ယောကျာ်း ကိုမြင့် ထက်နှဆနီးပါးလောက်တောင်ကြီးမယ်..
ကို့မျက်လုံးတွေကိုယ်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး …ပါစပ်အဟောင်းသား မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ ကြည့်နေတုန်…သားဝသန် တယောက် ပါစပ်က နေ “
အား…အားးး…အ.”်ဆိုတဲ့ အသံတွေထွက်လာပြီး သူ့ငယ်ပါထဲကနေ သုတ်ရည်တွေ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ လေပေါ် ပြန်တက်လို့ သွားကုန်ပါရော… သူ့ဗိုက်က အရစ်အရစ် ကြွက်သားတွေ ပေါ် သုတ်ရည်တွေ ဖြန်းပတ်ထားသလိုက်သလိုပဲ သုတ်ရည်တွေ ပြန်ကျလာတယ်…သူ့တကိုလုံးလဲတဆတ်ဆတ်တုန်လို့။ ခင်လဲ တအံ့တသြနဲ့ မျက်တောင်မခက်ပဲကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရင်း မှင်တက်မိနေမိတယ်…. ထွားလာလိုက်တဲ့ကောင်လေး ကြည့်ပါအုံ သူ့ငယ်ပါလေးက အခုတော့ တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ ယောကျာ်း တန်ဆာကြီးကို ဖြစ်လို့။
ခင်လဲ သတိပြန်ဝင်လာပြီး ကို့အခန်းထဲကို အသာလေး ပြန်ဝင် တံခါးဂျက်ထိုးလို့ …အိပ်ရာပေါ်တက်လဲနေလိုက်ပါတယ်။ မျက်စိထဲမှာလဲ သား ၀သန်ရဲ့ လိင်တံကြီးက ပြန်ကိုဖျောက်လို့ မရတော့ဘူး…ကြိုးစားပြီးဘယ်လောက် အိပ်အိပ် အိပ်လို့မရတာ မိုးလင်းထိပဲ။ အမေလေး ဘုရားဘုရား
…လို့ စိတ်ထဲမှာလဲ ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။
နောက်တခေါက်က ၀သန် သင်္ကြန်ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ခဏပြန်အလာ …မမတင် ယောကျာ်း ..၀သန့် အဖေဘက်က အမျိုးတွေလာလည်ကျတယ်လေ။ အိမ်မှာ ဧည့်သည်တွေတည်းတော့ အိပ်ခန်းများများစားစား မရှိတဲ့ မမတင်တို့အိမ်မှာ ၀သန် အဖို့ အိပ်စရာမရှိဖြစ်သွားပါရောလား…ဒါနဲ ၀သန်ကို မမတင်က ခင့် အိမ်မှာညအိပ်ဖို့လွှတ်လိုက်တော့တာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်မှာတော့ ခင် ကိုပိုင်အိမ်တလုံးဝဲပြီးသွားပြီလေး။
အဲဒီည ခင် ကုမ္မဏီမှာ စိတ်ရှုပ် အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ သမျှ အိမ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ခင့် အခန်းထဲကို အမြန်ဝင် ကိုပေါ်က အ၀တ်အစားတွေအားလုံးချွတ် အတွင်းပစ္စည် အပြင်ပစ္စည်း တခုမှမကျန်အောင် ချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင် ရေကိုအဆုံးထိဖွင့်လို့ရေပန်းလေးနဲ့ ရေစချိုးတော့တယ်။ ရေချိုးနေရင်းက ပိုက်ပေါ်သွယ်ထားတဲ့ ရေပန်းလေးကိုဖြုတ် ခင့် ကိုယ်ခန္ဓာအနံ့ ရေပန်းနဲ့လိုက်ပန်းလို့ တိုက်ချွတ်စေးကျောနေမိတာပေါ့… နို့တွေ ဟိုကြားဒီကြား ကြားမှန်သမျှ နိုက်ပြီး အားရှိပါးရှိ ပွတ်သပ်ချိုးနေရင်းက ဖီလင်ယူနေတဲ့အချိန် …မျက်လုံးလေး ဟဟ ဖွင့်အမိမှာ …အမလေး ၀သန်တယောက် ရေချိုးခန်းတံခါး ခပ်ဟဟလေးကြားကနေ ရပ်လို့ ခင့်ကို ၀ါးစားတော့မတက် ကြည့်နေလေရဲ့….ခင် တာထအော်လိုက်ရင် တူနဲ့ အဒေါ်ကြား တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ရဲပဲ မကောင်းမကောင်းတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ မသိသလို မျက်လုံးလေးပြန်မေးပြီး ဆက်ချိုးနေမိတယ်။ ခင် ကလဲခင်ပဲ ၀သန်အိမ်မှာရှိနေတာကို သတိမထားပဲ အရင်လို တယောက်ထဲ လွှတ်လွှတ်လပ်လပ် အခန်းတံခါးတွေဘာတွေ ပိတ်မနေပဲ ဒီတိုင်လုပ်နေမိတာပေါ့။ တော်တော်ကြာ ခင်လဲ ချိုးနေရင်းက ရေပန်းလေးကိုပိတ် တပါတ်လေးကို လှန်းယူလို့ ရေချိုးခန်းအ၀ကို မျက်နှာမူလိုက်တဲ့ အချိန် ၀သန်မရှိတော့ဘူး …သူထွက်သွားပါပြီ ။
ရေချိုးပြီး တပါတ်လေးနဲ့ ရေသုတ်နေရင်းက စဉ်းစားရင်းရှက်စိတ်တွေ ၀င်လာမိတယ်။ အဲဒီညလဲ ၀သန့် အခန်းထဲက နေ … အာသာဖြေရင်းက ထွက်လာတဲ့ အသံ သဲသဲကို ကြားနေရတယ်…အသံတွေကို နားစွန့်ရင် ဆောင်အောက် က ပစ္စည်းလေးကို လက်နိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အကွဲကြောင်းလေး တခုလုံး အရည်တွေရွဲလို့။ ခင့် ကို့ကိုယ်ကို ရှက်လဲရှက် …ငါကပါ ဒီလိုစိတ်တွေဘာလို့လိုက်ဖြစ်နေရတာလဲ ကို့တူက ကို့အပေါ်အဲလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာကို ဆုံးမရမယ့် အစား ကိုကိုယ်တိုင်ကပါ အရသာလိုက်ခံနေတော့ ကို့ကိုယ်ကိုလဲရှက် အံလဲအံသြမိတယ်သိလာ စိတ်လဲတိုမိတယ်။
အဲဒီညအဖြစ်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှန်မသိတာနဲ့ ခင်လဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ခင့် စိတ်ထဲပဲထားလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တမျှတွေကို ပြန်တွေးလို့ ကားလေးမောင်းလာရင် တောင်ငူမြို့လေးကိုတောင် ရောက်လို့လာပါပြီရှင်။ တောင်ငူမှာ ခဏနားပြီး ဆက်ထွတ်လာခဲ့လိုက်တယ်။
နောက်တနေ့ မနက်အရောက်မှာတော့ ရန်ကုန်ကို ခင်ချောမောစွာပဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၀သန်ရှိတဲ့ ကွန်ဒိုရှိရာကို အရင်မောင်းသွားလိုက်တယ်။ ရောက်တော့ ကားကို တိုက်ခန်းအောက် ပါကင်မှာထိုးပြီး ဓာတ်လေကားကတဆင့် ၀သန့်အခန်းနံပါတ် အတိုင်းအပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ၀သန့် အခန်းတံခါးရှေ့လဲရောက်ရော လူခေါ် ဘဲလ်ကို ၂ချက်ဆင့်နိပ်ပြီးခေါ်ကြည့်ပါသေးတယ်…လာမဖွင့်ပေးပါဘူး..နောက်တချက်ထပ်နိပ်ပြီးခေါ်ကြည့်တာ လာမဖွင့်တာနဲ့ မမတင်ပေးလိုက်တဲ့ သော့ထုတ်ပြီး ၀သန့် အခန်းထဲကို ၀င်လိုက်ပါတယ်.။ ..ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ တူတော်မောင် မောင်ဝသန်တယောက်မရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ ခင်လဲ ခရီးကလဲ ပန်းပန်းနဲ့ဆိုတော့ …ရေချိုးမိုးချိုးပြီး တရေးလောက်အိပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး…ပါလာတဲ့ အိပ်ကိုချ အ၀တ်စားရှိသမျှချွတ်ပြီး တပါတ်လေးထုတ်လို့ ရေချိုးခန်း ရှိရာဘက်ကို ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ ၀သန်တယောက် ယောကျာ်းလေးလို့သာပြောသာ တယောက်ထဲအတော့ကို နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ကောင်းလေးပဲလို့ …သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတဲ့ သူ့ဧည့်ခန်း လေးကိုကြည့်လို့ စိတ်ထဲ တူတော်မောင်ကို ချီးကျူးနေမိတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့အ်ိပ်ခန်းထဲကို လဲဝင်လိုက်ရော အိပ်ရာတွေကလဲ သပ်သပ်ရက်ရက်နဲ့ အ၀တ်အစားဗီရိုတွေ စာအုပ်စင်တွေ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ သူ့အားကစားပစ္စည်းတွေ နံရံကပ် ပိုစတာတွေ အားလုံး သူ့နေရာနဲ့ သူနေသားတကျပါပဲ။ အရင်က အိမ်မှာနေတုန်းကဆို ၀သန်တယောက် သူ့အခန်းကို အမေလုပ်သူရှင်းရင်ရှင်းမဟုတ်ရင် ခင့်မေမေ သူ့အဖွားကိုတိုင် ၀င်ဝင်ရှင်းပေးရတာပေါ့။ အခုတော့ ကြည့်ပါအုံး တော်လိုက်တဲ့ တူလေးဆိုပြီး ၀သန့်ကို ချီးကျူးနေမိတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့အခန်းလေးကိုဖြတ်လို့ ရေချိုးခန်းထဲရှိရာကို ၀င်လိုက်ပါတယ်။ တညလုံးလဲ ကားမောင်းထားတာဆိုတော့ ပင်ကလဲပင်ပန်းနဲ့ ဆိုတော့ ရေမိုးချိုးပြီး တရေးလောက်အိပ်ဖို့ စဉ်းစာမိတယ်။
ရေးပန်းလေးဖွင့်လို့ တကိုလုံးကို နေရာမကျန် တိုက်ချွတ်စေးကျောပြီး ရေချိုးနေလိုက်မိရော…ရေချိုးပြီးလို့ ရေချိုးခန်းကအထွတ် …တပါတ်လေးတထယ်တာ ခင့် ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတယ် သိလား…
“အမလေး…..အော်..ငါ့နဲ့ အသံမပေးဘာမပေးနဲ့ ၀သန်ရယ်…တီခင်ကို လှန့်ဖျန့်သွားတာပဲ…ဘယ်တုန်းကတဲ့ကအိမ်ပြန်ရောက်နေတာတုန်းဟဲ့…”
ကိုတော်ချော တူတော်မောင် ၀သန်တယောက် ရေချိုးခန်းဝ ကိုရောက်လို့နေတယ်လေ
၀သန် ၊ “ခုနမှရောက်နေတာ တီတီရဲ့ …ဒီအချိန်ဆို တီခင် အိမ်ရောက်နေလောက်ပြီဆိုတာ သိလို့ ကျောင်းကပြန်ခဲ့တာ။”
တီခင်၊ “ ဟုတ်လား တီလဲ ရောက်တာမကြာသေးဘူး…ရောက်ရောက်ချင်းမင်းစီ အရင်လာတာပဲ ..ကုမ္မဏီကလူတွေနဲ့ တောင် မဆက်သွယ်ရသေးဘူး….မမတင် ကသားနဲ့ အတူ တပတ်လောက်နေဖို့ မှာလိုက်တယ်…အဲဒါကောသိလာ”
၀သန် ၊ “သိပါတယ်..တီခင်ရယ် သားမေမေနဲ့ ဖုန်းရပြီးပါပြီ…တီခင်ရန်ကုန်လာမယ်ဆိုတာ မေမေကပြောလို့သိပြီးသား…တီဒီမှာနေဖို့လဲ မေမေ့ကို သားပြောလိုက်တာ ..တီရဲ့”
ကြည့်စမ်းဒီကောင်လေး သူနဲ့ တပတ်လောက် အတူတူနေဖို့ သူကိုတိုင် မမတင်ကိုပြောလို့ …စီစဉ်ထားတာကိုး တော်တော်မလွယ်တဲ့ တူတော်မောင်ပဲ လို့ ခင့် စိတ်ထဲရေရွတ်နေမိပါတယ်။ သူနဲ့များတပတ်လောက် ဘယ်လို အတူတူ အိမ်တလုံးထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုနေရမလဲ…ခင်နဲ့တပတ်နီးနီး အတူနေမယ့် ယောကျာ်းတယောက်ဟာ တူတော်မောင်ဖြစ်ပေမဲ့လဲ ခင့်ကို ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တယောက်လိုသဘောအမြင်မျိုးနဲ့ သဘောကျနေတဲ့ သူဆိုတော့ တပတ်တောင် ဘယ်လိုနေရမလဲလို့ ခင်လဲစဉ်းစားနေမိတယ်။ အခုမှတော့လဲ မထူးတော့ပါဘူး…နေရုံပဲရှိတာပေါ့ …
“ ဟုတ်ပါပြီ ကိုတော်ချောရယ် နေပေးပမယ်” လို့ ခင်သူ့ကို ပြုံးလို့ပြောလိုက်မိတယ်။ အဲလိုပြောလိုက်တော့ ၀သန်တယောက် မိုရတဲ့ မျက်နာနဲ့ ခင့်ကို ကျေနပ်ပြုံး ပြန်ပြုံးပြနေလေရဲ့ …လူတယောက်က တယောက်ကို ပြုံးပြတယ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်…လူတွေပြုံးပြုံးပြတယ်ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်အများကြီးရှိတယ်….လူတယောက်က ကို့ကိုလိုလို့လား၊မလိုလို့ ပြုံးတာလား၊ မချိပြုံး ရွဲ့ပြုံး စောင်းပြုံး လူတွေကဘယ်လိုစိတ်ရှိလို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ ထွတ်လာတဲ့ မျက်နှာဘေးနဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကိုကြည့်လို့ လူအကဲခက် ပညာကို ခင်က တဖက်ကမ်းခပ် တတ်မြှောက်ထားတာ နော်..ဟဲဟဲ ..အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့…အခု ၀သန်ပြုံးတဲ့ အပြုံးက ခင် သိတယ် သူဘာကိုသဘောကျနေလဲ ဘာကိုတော့ဖြစ်လုပ်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတာကို တွေးလို့ ပျော်နေတဲ့ အပြုံး။ စကားတွေ ပြောရင်း ၀သန်နဲ့ ခင် တယောက်ကိုတယောက် မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့် ပြီး ၁မိနစ်လောက် ငြိမ်းသွားကျတယ် ..သိလာ။
၀သန်နဲ့ အတူတူနေရမယ်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ ကြောက်မိတယ်…ဟုတ်တယ်လေး သူက ခင့်ကို အဒေါ်တယောက်လို သဘောထားပြီး ချစ်နေတာမှမဟုတ်တာ….ပြီးရင် ခင်ကလဲ ခင့်တူလေးလို ယောကျာ်းပီသတဲ့ လူချောလေးကို နဲနဲတော့ ရင်ခုန်မိခဲဖူတဲ့သူ ….ဒါပေမဲ့ ဒီလို မတင့်သော်တဲ့ ကိစ္စကို ခင့်ခေါင်းထဲကနေ ဘယ်လိုမှလဲ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး ဘာအခွင့်အရေးမှလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲကနေတော့ ပြောနေမိတာပေါ့။ သား ၀သန်ကလဲ အခွင့်အရေးကို အလွတ်ယူတတ်တဲ့ လူစားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်ရေးရရင်တော့ လက်လွတ်ခံတတ်တဲ့ သူတယောက်လဲ မဟုတ်တာတော့သေချာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင့် သဘောပါ ခင်အနေအထိုင် ဆင်ခြေပြီး နေလို့ရှိရင် ဘာမှဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ထဲတီးလို့မမီဘူး နှစ်ဖက်တီးမှမီတဲအမျိုးပဲလေ။
ပြီးရင် ဒီလောက် ကြီးမားကျယ်ဝန်းတဲ့ ကွန်ဒို တိုက်ခံထဲမှာ ဖိုနဲ့မနှစ်ယောက်ထဲ ။ သူကျိတ်ကျွေနေတဲ့ သူ့အဒေါ်နဲ့ တပတ်ကြီးများတောင် အတူတူနေရမှာဆိုတော့ ….ခင့် အတွက် စဉ်းစားရမယ်။ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ရမယ်လေး..ကိုကအကြီးပဲ မဟုတ်လား….
မျက်လုံးချင်းစုံရပ်လို့ ပြောနေကျရင်းက …ခင်လဲ မျက်နာကို တဖက်လွဲလိုက်ပြီး .. ဒါနဲ့ ခင့် ကိုယ်ပေါ်မှာ တပါတ်လေးတထည်သာပတ်ထားတာကို အခုမှသတိထားမိတော့တယ်…
“ သားဝသန် တီတီခင်အခန်းထဲမှာ ခဏအနားယူလိုက်အုံးမယ်နော်” လို့ ပါစပ်ကပြောရင်း ခက်မြန်မြန်လျှောက်လို့ ၀သန့်ကို လည့်ကြည့်မနေတော့ပဲ ခင်အိပ်ရမယ့် အခန်းထဲကို သုတ်ခြေသင် ခဲ့မိတယ်…
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ တံခါးလေးကိုပိတ် ပတ်ထားတဲ့ တပါတ်လေးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး ခင့်အိပ်ထဲက အတွင်းခံ ပင်တီလေးကို ယူပြီး ၀တ်မယ်ရှိသေးတယ်…
“ တီတီ နေ့လည်စာဘာစားချင်လဲ …ကျနော် စီစဉ်ပေးထားမယ်…တီတီ နိုးတာနဲ့ တခါထဲစားလို့ ရအောင်”
ဒါနဲ့ ခင်လဲ ပင်တီလေးကို ခင့်တင်ပါသစ်သစ်ရစ်ရစ်လေးပေါ အသာလေး ဆွဲဝတ်လို့
“ ရပါတယ် သားရယ် သားစားသလိုပဲ တီတီအတွက် လုပ်ထားလိုက်ပါ…တီတီအတွက် အရေးမကြီးပါဘူး”
“ ဒါဆိုလဲ ….သား စီစဉ်ထားလိုက်မယ်.. တီတီအနားယူလိုက်အုံးနော်..”
“ဟုတ်ပါပြီ ရှင့်…” လိုခင် ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
သား ၀သန်တယောက် အဲလိုပြောပြီး ထွက်သွားပါရော..ခင်လဲ ဘော်လီဝတ် တီရှပ်ပါးပါးလေးတထည် နဲ့ လုံခြည်ကောက်စွတ်ပြီး ဆံပင်တွေ ကို ခြောက်အောင် တံပါတ်နဲ့ နာနာလေးသုတ်နေမိတယ်။ ဆံပင်ရေခြောက်အောင် သုတ်နေရင်း အခန်းဝရန်တာကနေ ထွက်ကြည့်လိုက်တာ သားရဲ့ ကွန်ဒိုခန်းကနေ ရန်ကုန်တမြို့လုံးကို တွေ့ရတယ် သိလာ။ ဒီကောင်လေး အိမ်ဝယ်တာ တော်တော်နေရာရှာတတ်တာပဲလို့ စိတ်ကချီးကျူးမိသေးတယ်။ ဆံပင်တော်တော် ခြောက်သွားတော့မှ အိပ်ရာပေါ် အသာလဲပြီး မျက်လုံးလေး တချက်မိတ်လိုက်တာနဲ့ ခရီးပန်းလို့လားမသိ အိပ်ပျော်သွားပါရော။
“ဒုံ …ဒုံ….တီခင်…ဒုံ…ဒုံ….တီ ..ထတော့လေ ညနေ ၅နာရီတောင်ခွဲနေပြီ..”
၀သန်လာနိုးသံကြားလို့ ခေါင်းရင်းက နာရီလေးလှန်းယူလို့ ကြည့်မိတယ်…ဟုတ်ပါ့တော် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ညနေ ၅နာရီတောင်ထိုးနေပါရောလာ…ဆက်အိပ်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး ထအုံးမပဲ ဆိုပြီး အိပ်ရာက လူလဲထလိုက်မိတယ်။
“သား ၀သန် …တီတီအခုလာခဲမယ်..စောင့်နေနော်…မျက်နှာသစ်သွားတိုက်လိုက်အုံးမယ် ..”
“ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့ တီတီ …တီခင် စားဖို့ ၀ဲထားပြီးပြီနော်”
ခင်လဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲ ထွက်လာလိုက်တယ်…
မီးဖိုခန်းထဲ ရောက်တော့ သားဝသန် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်…ဟင်းတွေ ပန်းကန်တွေထဲထည့် ဟိုဟာယူ ဒီဟာယူနဲ့ပေါ့
သား ၀သန်က တယောက်ထဲနေတော့ အပြင်မှာပဲ ထမင်းစားတာလေး…တခါတလေ အိမ်ကို ပါဆယ်ဆွဲလာပြီးသူ့အခန်းထဲမှာပဲစားတယ်။ ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ ပဲအလုပ်များနေတဲ့ ၀သန်တယောက် ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖြစ်သလို တွေ့တဲ့နေရာဝင်စားမယ် အစားအသောက်အတွက် အစီအစဉ်စနစ်တကျ စားချိန်သောက်ချိန် ဇယားဆွဲထားပုံမပေါ်ဘူး။ အခု သူ့ အဒေါ် ခင့်ကို ထမင်းဟင်းချကျွေးနေတဲ့ ပုံကိုပဲကြည့် ပြာယာကိုခက်နေတာပဲ။ ဒါနဲ့ ခင်ချောင်းတချက်ဟန့်လိုက်ပြီး
“ ဟာတီတီလာပြီ …အဆင်သင့်တော့ဖြစ်နေပြီ တီခင် …လာစားရအောင်”
ခင်လဲခုံတလုံးပေါ် ထိုင်လိုက်ပြီး ၀သန့်ကိုပြုံးလို့ကြည့်နေမိတယ်
အော်..ငါ့တူတယောက် မိဘအိမ်မှာတုန်းက လက်ဆေးစားခဲ့ပြီး အခုသူတယောက်ထဲနေတော့မှ အမလေး…ထမင်းစားဖို့အရေးအလုပ်တွေရှုပ်လို့ ဆိုပြီး ခင်တွေးရင်းသဘောကျ ပြုံးကြည့်မိနေတာပေါ့။
“ တီတီ …ကျနော့ကို ဘာလို့ ရီနေတာလဲ..”
“ ဘာမှ ဟုတ်ပါဘူးကွယ် ငါ့တူလေးကို သဘောကျနေလို့ပါ ..တီဗိုက်စာပြီကွား စားကျရအောင် ”
“ အင်..စားမယ် တီတီ ..” လို့ပြောပြီး ထိုင်ခုံတလုံးဆွဲယူပြီး ခင့်အနားမှာ သူထိုင်လိုက်တယ်…လာထိုင်တာကလဲ အရမ်းကပ်နေလို့…ခင်က
“ အော်..သားရယ် အဲလောက်ကပ်ထားမှတော့ တီဘယ်လို ထမင်းစားမလဲကွဲ့ …ခစ်..ခစ်”
“ ဟုတ်သားပဲ ..အရမ်းကပ်နေတာကြီးကို ..ဟီဟီ..စောတီ..စောတီး….တီတီ…” ဆိုပြီး ခင့်ကို စပ်ဖြဲဖြဲ အပြုံးနဲ့
ပြန်ပြောလို့ …၀သန်ခင့်ကို ဟင်းတွေထည့်ပေးတော့တာပဲ
“စား တီတီ…သားက အခုလိုအိမ်မာတကူးတက ၀ယ်စားတာမဟုတ်ဘူး …တီတီရှိလို့သာ။ သားတယောက်ထဲဆို ကျောင်းသွားရင်း မြို့ထဲ သွားရင်း အဲလိုပဲ ..ကြုံရာထိုင်စားလိုက်တာ”
“ သားရတယ်..တီ့ကို ဟင်းတွေခွထည့်ပေးမနေနဲ့ ..တီစားနိုင်ဘူး…”လို့ပြောရင်း ထမင်းစားကျတော့တယ်
“သား ၀သန် မင်းအဲလိုတွေ အပြင်မှာ လျှောက်ဝယ်စားနေတယ်…သန့်လားမသိ မသန့်လားမသိကွယ်…”
“ အော်..တီတီကလဲ သားက သန့်ရှင်းတဲ့ဆိုင်ပဲစားတာပေါ့…မသန့်ရှင်းရင်မစားပါဘူး…သားအသန့်ကြိုက်တာလဲ တီတီသိရဲ့သားနဲ့ ..”
“ ဟုတ်ပါတယ်..မောင်သန့်ရှင်းလေးရယ်…ဒီက စိတ်ပူလို့ပြောတာကို “ ခင်လဲ တူတော်မောင်ကို မျက်စောင်းလေးတချက်ပြစ်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်
“သားက ..ကျောင်းဘယ်လောက်ထိ တက်ရအုံးမှာလဲ ..ဟင်”
“ “ဟုတ်လား…ဒါဆိုသိပ်မလိုတော့ ဘူးပဲ …ကျောင်းပြီးရင်ကော ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ?”
“သားကျောင်းပြီးရင် …အမေရိကတော့ သွားချင်တယ်..အဲမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ် တီတီ”
“ကောင်းပါတယ် သားရယ် …ဒါဆို စာများများကြိုးစားနော်…အခုကော တင်နစ်ရိုက်သေးလာ ?”
“ ရိုက်တာပေါ့ တီတီရဲ့ အဲဒါကတော့ …training ပြတ်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ…ကိုယ်လက်လုပ်ရှားမှုတခုခုရှိမှပဲ…
ဟုတ်လဲ ဟုတ်ပါတယ်လေ …သား ၀သန်ကိုကြည့်ပါအုံး တကယ့် athletic ဘောဒီမျိုး …အရင် ယောကျာ်းကိုမြင့်နဲ့များဘာမှ မဆိုင် …ကိုမြင့်က ငပိန် ဒီကြားထဲ ဆေးလိပ်ကသောက်သေးတယ်…ဘာမှသုံးမရဘူး …ခင်လဲ မစီမဆိုင် ခင့်အရင်ယောကျာ်းနဲ့ ၀သန့်ကို နှိုင်းရှင်ကြည့်မိနေတယ်…ဒါနဲ
“ ကောင်းတာပေါ့ သားရယ် အဲလိုအားကစားလဲလုပ် …ပညာလဲထူးချွန်အောင်လုပ်မှ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ ယောကျာ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာ သိလာ… တီတီတို့ကတော့ အားကစားလဲမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး”
“တီတီကလဲ ..အားကစားမလုပ်ဘူးသာဆိုတယ် ..တီတီကိုယ်ခန္ဓာက တကယ့် အနစ်ဗျ…ဟဲဟဲ”
“ ဟင်..ကောင်လေး ကို့အဒေါါ်ကိုနော်..ငါထုလိုက်ရ ခွေးစုတ်လေး”
“ ဟုတ်လို့ပြောတာပေါ့တီတီရယ်..တီခင်က ယောကျာ်းတာရတာ ကလေးမယူရသေးဘူးဆိုတော့ …တကယ့် လုံးကြီးပေါက်လှ အပျိုလေးတယောက်လိုပဲ…သိလာ…၀သန်က အမှန်ပြောတာ…စိတ်ဆိုးလား”
ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါတယ်လေး…ခစ်..ခစ် …သား ၀သန် ကို့အဒေါ်ကို အဲလိုပြောလို့ စိတ်စိုးဟန်သာဆောင်ရတာ…ရင်ထဲမှာတော့ သဘောတွေကျ လို့ ပီတိတွေဖြာလို့ ..ကျေနပ်မိနေတာ…မျက်နှာကလဲ သူအဲဒီလိုပြောလို စိတ်စိုးဟန်ဆောင်နေတဲ့ ကြားထဲက … ပြုံးဖီးဖီးလေးလုပ်မိတယ်။
“ အမလေး….ကို့အဒေါ်ကို လာမြှောက်နေတယ်…တခုခုလိုချင်လဲပြောပါနော် ..မြှောက်နေစရာမလိုဘူး…ချက်ချင်း ၀ယ်ပေးလိုက်မယ် သိလာ”
“သားကလဲ …တခုခုလိုချင်တာများ တီတီ့ကို မြှောက်ပြောမှရမှာလာ …
သား တီခင့်စီကဘားမှမလိုချင်ပါဘူးဗျာ…သား လိုချင်တာလဲတီ ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါဘူး”
“သားက ဘာလိုချင်လို့လဲ …တီတက်နိုင်တာဆိုရင် ကျိုက်တာပြော ချက်ချင်းဝယ်ပေးလိုက်မယ် ငါ့တူလေးကို”
လို့ပြောပြီး ၀သန့်မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်တယ်
ခုနက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့ ၀သန့် မျက်နှာလေး ညိုးသွားပြီး ခင့် ကို
စိုက်ကြည့်နေလေရဲ့…ခင်လဲ သူနောက်နေတယ်ထင်ပြီး ပြုံးစိစိလုပ်ပြောနေရင်းက …၀သန်တယောက်ခင့်ကို ပြန်မပြုံးပြဘူး…စိုက်လို့ပဲကြည့်နေတယ်
ခင်လဲ သူ့ကို တချက်အကဲခက်ပြီး …ဒီကောင်လေးတော့ ဒီလိုမတော်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ သူ့အဒေါ်ကို ကြည့်နေပြန်ပါပြီဆိုပြီး စိတ်ထဲပြောလို့ ခေါင်းလေးငုတ်ထားလိုက်မိတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ ခင့်လက်ကလေးကို ၀သန်လာကိုင်လိုက်ပါရော…ခင်လန့်သွားတယ် ခဏတော့ အကိုင်ခံနေပြီး သတိဝင်လာမှ လက်ကို ပြန်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ပြီးအရည်ရွမ်းတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတာပဲသိလာ …ခင့်ကိုကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေကလေ…ခင်လဲ ခဏတော့ စိုက်ကြည့်မိနေလိုက်သေးတယ်…ပြီးမှ
“ သား ၀သန် မင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကွာ…ခုပဲ ပျော်ရွှင်နေရာကနေ ဘာလို့ အဲလိုမျက်နှာကြီးညိုးသွားရတာလဲ…တီဘာပြောမှားသွားလို့လဲ”
“ မဟုတ်ပါဘူးတီခင်…သားဘာမှမဖြစ်ပါဘူး…ဒီလိုပါပဲ …ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး”
၀သန် ခင့်ကိုညာနေပေမဲ့ သူ့အမူအရာတွေက အရမ်းသိသာလွန်းနေတယ်…ခင့်ကိုလဲ မကြည့်တော့ပဲ ခေါင်းလေးကို ငုတ်လို့ထမင်းပြန်စားနေတယ်..ခင် လဲမနေတတ်တော့တာနဲ့
“သား ၀သန်ရယ် သားဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တီသိတယ်နော်..အဲလိုမနေနဲ့ကွာ တီမကြိုက်ဘူး…တီက သားနဲ့ အတူ တပါတ်လောက်နေအုံးမှာနော်…အဲလိုတွေ မလုပ်ပါနဲ့ …တီတီမနေတတ်ဘူး…အဲလိုတွေ ဖြစ်နေရင် တီတီသားနဲ့မနေတော့ဘူးနော်…တီတီ ကုမ္မဏီကပေးတဲ့ ဟိုတယ်မှာ သွားနေလိုက်မယ်လို့”
ခင်ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်….ဒါနဲ့ ၀သန် ခေါင်းလေးငုံသွားပြီး ..
“သားဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး တီခင်ကလဲ … ဒီလိုပါပဲ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတခုကို သွားစဉ်းစားမိလိုက်လို့ပါ…တီခင် တခြားမှာတော့ သွားမနေပါနဲ့နော်…တီခင်မကြိုက်ရင် ၀သန်မလုပ်တော့ဘူး…တီခင်နားမှာ ပျော်ပျော်ရွင်ရွှင်နဲ့ နေပါ့မယ်..နော်…တီခင်…နော်လို့”
အဲလို သား ၀သန်ကပြောလာတော့ ခင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်…စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ၀သန့် လက်ကလေးကို ခင့် လက်ကရုတ်တရက် သွားအုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်…၀သန်လဲခေါင်းလေးမော့လာပြီး ခင့်ကို တောင်းပန်တဲ့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကြည့်နေတာပေါ့ ….ခင်ရင်ထဲမှာလဲ တမျိုးကြီးပဲ …သူ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်တာ သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင်…ချစ်စရာလဲအရမ်းကောင်းတာပဲသိလာ။ သား ကို အရမ်းသနားမိသွားတယ်။ အစကတည်းက ဒီမှာလာမနေရင် အကောင်းသားလို့ စိတ်ထဲမှာလဲ တွေးနေမိတယ်…
“သား ၀သန် တီတီနဲ့ သားရဲ့ ကြားမှာ တချို့ကိစ္စတွေက မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ
လို့ ခင်လဲ ၀သန့်ကိုချော့ပြောရတာပေါ့….၀သန်ကလဲ
“သား သိပါတယ် တီခင် …စိတ်မပူပါနဲ့ သားနဲ့အသူရှိနေတဲ့ အချိန်တွေ တီ့အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ သားကတိပေးတယ်…တီလဲဘယ်မှသွားမနေပါနဲ့နော်”
ခင်လဲ ခေါင်းကို ညိတ်ပြရင်း
“စိတ်ချ တီ ဒီတပတ်လုံး သားနဲ့ပဲနေမယ်..နော်…၀သန်”
လို့ပြောရင်း သူ့လက်ကလေးကို စုပ်ကိုင်ရင်းက အနည်းငယ်ဖိညစ်မိလိုက်တယ်။
“တီ..သား အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတာရှိသေးတယ်…တီအိမ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါ…လိုအပ်တာရှိရင်သားကို ဖုန်းဆက်နော်…ပြီးတော့ ကုမ္မဏီကိစ္စ တခုခုသွားစရာရှိရင်လဲ သားကိုပြော …သားကားနဲ့ပဲ လိုက်ပို့ပေးမယ် သိလာ”
“ အင်…ဒီနေ့တော့ တီဘယ်မှမသွားချင်ဘူး …ရုံးကိစ္စလဲ တီဖုန်းဆက်ထားလိုက်မယ်…အစည်းအဝေးကလဲ မနက်ဖြန်မှဆိုတော့လေ…သား သွားစရာရှိတာသွား..တီတီအိမ်မှာပဲရှိမယ်…နော်”
“ ဒါဆိုသားသွားမယ်နော်” လို့ပြောပြီး ကျောပိုးအ်ိတ်နဲ့ ကားသော့ကို ယူပြီး ၀သန်ထွတ်သွားတာပေါ့..
ခင်မှာလဲ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိပဲ ၀သန်ထွတ်သွားတာကို ငေးကြည့်ရင်း ခင် တယောက်ထဲ ထမင်းစား စားပွဲမှာ တယောက်ထဲထိုင်လို့ အတွေးပင်လယ်ဝေနေမိတယ်..
အော်…၀သန်တောင် တကဲ့ ယောကျာ်းကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါပေါ့လား…အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာတောင် ခင် စိတ်တွေမနဲ့ ထိန်းထားရတယ်…၀သန့်မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး ခင်အရမ်းသနားသွားမိတယ်။ လူတယောက်က ခင့်ရဲ့အချစ်မေတ္တာတွေ ကိုပေးပါ သနားပါလို့ အသနားခံ တောင်းနေသလိုပဲ …သနားလဲအရမ်းသနားသွားတယ် သိလာ။သားလာ…သားနောက်ထပ် ၂နှစ်လောက်တော့ တက်ရအုံးမယ် …တီတီရဲ့” မယ်မင်းကြီးမ ခင်ဖုန်းရွှေ ညည်းမကြံကောင်းမစီရာတွေ တွေးမနေနဲ့နော် …လို့ ကို့ကိုကိုပြောရင်း စားသောက်ထားတဲ့ ပန်းကန်တွေကို ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့ ထရပ်လိုက်တယ်။ ပန်းကန်တွေ ကို ဆေးစရာရှိဆေး လဲစရာရှိလဲကျင်းပြီး ခင့်အခန်းဘက်ထွတ်လာလိုက်တယ်။ ခင့်အခန်းဘက်ထွတ်လာတော့ ဘေးက ၀သန့်အခန်းလေးက ပွင့်နေတယ်…ဒါနဲ့ ၀သန်မရှိတုံး သူ့အမေ မမတင်မှာထားတဲ့အတိုင်း ၀သန့်အခန်းကို မွေအုံးမှပဲဆိုပြီး ၀သန့်အခန်းထဲ ၀င်လိုက်မိတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ အရင်ဆုံး ကွန်ပျူတာစာပွဲ ရှိရာကို သွားပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်….ကွန်ပျူတာစာပွဲပေါ်မှာလဲ သူ့ကျောင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက် စာတန်းတွေနဲ့ ရှုပ်လို့….ဟိုလန်ဒီလော်လုပ်လိုက်တာ….ဟော်တွေ့ပါပြီ…ခွေတွေထားတဲ့ ကွန်ပျူတာစင်အောက်အန်ဆွဲ ထဲမှာ …အပြာဇာတ်လမ်းတွေ…အမလေး ကြောက်စရာကြီးတွေရှင် ယောကျာ်းသားများရဲ့လိင်တံကြီးများကလဲ လေကားလက်ကိုင်လောက်နီးနီးရှိတဲ့ ဟာကြီးတွေ။ မိန်းမသားများ ရဲ့ နို့တွေ အဖုတ်တွေဟာလဲ အကြီးကြီး ပြဲပြဲလန်လန်ကြီးတွေနဲ့ ခင် ခွေတွေတချပ်ပြီးတချပ်ကြည့်ရင်း တံတွေးတွေ တအွန့်အွန့်နဲ့ မျိုချနေမိတယ်။ တခုထူးဆန်းတာက မိန်းမပုံတွေက အသက်ခက်ငယ်ငယ် ၀သန့်လို အသက်အရွယ်မျိုး sexyလေးတွေမဟုတ်ပဲ …ခင်တို့လို အသက်သုံးဆယ်ကျော် လေးဆယ်ဝင်းကျင် မိန်းမပုံတွေ …ခင် တော်တော်အံသြနေမိတယ်…ရေးထားသေးတယ် ဘာတဲ့ MILFS တဲ့ ဘာလဲ MILFs မသိဘူး …အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းမပြည့်တန်ဆာတွေ ဆိုတာတော့ ခင် သေချာပြောနိုင်တယ်…ဒါနဲ့ ခင်လဲ ခွေတွေကို အံဆွဲထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်…ဒါကိုတော့သူ့အမေကို တိုင်ပြောလဲအပိုပဲ ဒါတွေက အခုခေတ်လူငယ်တိုင်း ယောကျာ်းလေးတိုင်းရဲ့ အခန်းထဲမှာရှိတယ်လေ….ခင် ကိုမြင့်နဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ ရီစားဖြစ်တုန်းကတောင် ကိုမြင့်က ဒါမျိုးကားတွေ ခင့် ကိုလာလာပြလို့ ရန်ခဏခဏဖြစ်ရဖူးတယ်လေး…ဒါကတော့မဆန်းဘူး ခင် ခွတ်လွတ်နိုင်တယ်…ဒါပေမဲ့ တခုရှိတာက အပြာခွေတွေအားလုံးက အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းမပုံတွေကြီးပဲ…ဒါကို ခင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…အို ..လျှောက်စဉ်းစားနေ တာကို့နဲ့မ မဆိုင်တာပဲ ..ဆိုပြီး ခွေတွေသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားလိုက်တယ်…ခွေတွေထားတဲ့ အံဆွဲလေးထဲမှာပဲ ရွှေဗူးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ Diary စာအုပ်တအုပ်ကို ထပ်တွေ့ပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ ..ဗူးလေးကို ယူပြီးဖွင့်ကြည့်မိတယ်..ဗူးထဲမှာစာအုပ်တအုပ် diary စာအုပ်လေး…ဖွင့်ဖတ်ရကောင်းမလား ဖွင့်မဖတ်ရကောင်းမလား ခင် စဉ်းစားသေးတယ်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ခင် ကသူ့အဒေါ်ပဲ ကို့တူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုတော့ အဒေါ်တယောက်အနေနဲ့ သိခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ဖတ်ပြစ်လိုက်တယ်.
ဘာတွေများရေးထားတယ်ထင်လဲ…သူထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရီစားအကြောင်းတွေရှင့်…ဒီကတော့ တူတော်မောင်လေး ရီးစာလဲမထား ဘာမထားနဲ့ သူ့အဒေါ်ကိုပဲ သဘောကျနေတယ်ထင်ခဲ့တာ…အမလေး ငါမှားပါပေါ့လားလို့ ကို့ကိုယ်ကို စိတ်တိုမိတယ် သိလာ…သူ့ကိုလဲ အရမ်းကို စိတ်တိုမိတယ်…တူလေးရီးစားထားတာ သူများအဒေါ်တွေ အတွက်တော့ စိတ်တိုစရာမဟုတ်ပေမဲ့ ခင် ကတော့ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ကိုဆူသွားတာပဲ…
၀သန်နှင့်ကိုငါ အရမ်းမုန်းတယ် သိလားလို့ စိတ်ထဲမှာလဲ ၀သန့်ကို ပြောလိုက်မိတယ်။
စာအုပ်ကို တရွက်ချင်းလှန်၇င်းက သူ့ရီးစားတွေအကြောင်းရေးထားတာ စာမျက်နှာ ၁၅မျက်နှာလောက်ရှိတယ် ..သူတို့အရပ်အမောင်းတွေ ဘယ်လိုသူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရရင် အရသာရှိတာတွေ ဘယ်တယောက်ကဘယ်လို အပြုအစုတော်တာတွေ အဲဒါတွေကို ရေးထားတာရှင်း …ဘယ်တယောက်ကိုတော့ ဘယ်လောက်အထိ ချစ်မိတယ် ဆိုတာမျိုးကိုတော့ တရွက်မှာမှ မရေးထားဘူး….။ လှန်ဖတ်ရင်းနဲ့ သူ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ စာမျက်နှာကုန်သွားတယ်…လှန်ရင်းလှန်ရင်း အမလေး….တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံကြောင့် ခင် အရမ်းကို အံသြသွားမိတယ် …ဘယ်သူ့ပုံများ မှတ်သလဲ ခင့်ပုံပါရှင်း ခင့်ပုံမ …ခင့်ပုံအစစ် ပုံလေးက ကွဲသွားတဲ့ ယောကျာ်းကိုမြင့်နဲ့ ယူပြီး ဟန်းနီးမွန်းထွတ်တုန်းက ပုံလေးပါ ..အဲတုန်းက ၀တ်ထားတာက ပင်တီအဖြူ ဘော်လီအဖြူလေးနဲ့ အိပ်ရာပေါ် မောက်ရပ်အနေအထားနဲ့ ကိုမြင့် လက်ဆော့ပြီး ရိုက်ထားတာ …အဲဒီပုံက အယ်ဘန်ထဲက ပျောက်သွားတာ တနှစ်လောက်ရှိနေပြီ တအိမ်လုံးနံနေအောင်ရှာတာလဲမတွေ့ဘူး …အခုတော့ တရားခံ ပေါ်ပြီ ဒင်းလေးက ခိုးထားတာကို သူ့အဒေါ်ပုံကို။ သူများတွေ့မှာစိုးလို့ အဲလိုတွေပျောက်မှာစိုးလို့ ဘယ်မှာမှမထားဘူးခင့် အခန်းထဲက သီးသန့် အဲဘန်ထဲမှာထည့်ထားတာ….အခုမှတွေ့တော့တယ်၇ှင်…၀သန် …၀သန်သူခိုးလေး…ဟင်..ဒင်းတော့ တွေ့မယ်ဆိုပြီး ပုံကိုကြည့်ရင် ပုံအောက်က စာကို ဖတ်ကြည့် မိလိုက်တယ်…
“ တလောကလုံးမှာ ဒီမိန်းမကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်နိုင်ဘူး”
ခင် ပျော်ပဲပျော်ရမလား စိတ်ပဲညစ်ရမလား ဟင်… ဒီစာသားလေးကြောင့် ခင် ရင်ထဲမှာအရမ်းဝမ်းသာသွားတာတော့သေချာတယ်… ဦးဏှောက်ကတော့ လက်မခံနိုင်ဖြစ်လို့ ၀သန့်ကို စိတ်တိုရမလား …ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခင် မသိတော့ပါဘူးရှင်… ခင် ပျော်နေတာကတော့အမှန်ပဲ
အဲဒီစာလေး ကိုလဲတွေ့ရော ခင်ပြုံးလိုက်မိတယ်..ခုနကတော့ သူ့ရီးစားတွေ အကြောင်းရေးထားတာတွေဖတ်နေတုန်းကတော့ ခင် ၀သန့်ကို အရမ်းဒေါသထွက်နေမိတယ်….ဒါပေမဲ့ ဒီစာသားလေးတွေ့မှ ခင် အရမ်းကိုပျော်သွားတယ် သိလာ…
“ တလောကလုံးမှာ ဒီမ်ိန်းမကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်နိုင်ဘူးတဲ့ “
ခင် ရင်တွေခုန်လို့ ပျော်နေမိတယ် သိလာ…မပျော်ပဲနေမလား ကြည့်အုံးလေ…သူထားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတွေက ခင့် ထပ်အသက် ထက်ဝက်လောက်ကွာတဲ့ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ…အဲလို ကောင်မလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိနေတာတောင် ဒီက အဒေါ်အအိုကြီးကို ချစ်နေရှာတဲ့ တူကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မုန်းလို့ရနိုင်တော့မှာလဲ…ဟုတ်တယ်မလာ…..ခစ်..ခစ်။
အော်…သား ၀သန်ရယ် မင်းတီတီ့ကို အဲလောက်တောင်ပဲလားကွယ်ဆိုပြီး ပီတိတွေပြစ်လို့ ခင် အရမ်းပျော်နေမိတယ် သိလာ။ ခင်လဲ ခြေရာလက်ရာမပျက် စာအုပ်ကို ပြန်ထားပြီး ခင့် အခန်းထဲ ထွက်လာလိုက်မိတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ..အိပ်ရာပေါ်တက် နဖူးပေါ်လက်တင်ရင်း အတွေးပင်လယ် ဝေနေမိပါရော။…အော် ဒီကောင်လေး ငါ့ကို ဘာလို့ အဲလောက်တောင် ရူးသွပ်နေရတာလဲ …ဘာလို့လဲ …သူ့မှာ ငယ်ငယ်ချောချောရီးစားတွေဆိုတာလဲ တပုံကြီးနဲ့ ခင့်လို တခုလပ် အဒေါ်အရင်းကိုမှ ဘာလို့ အရမ်းချစ်နေရတာလဲ ၀သန်ရယ်။…..ဒါနဲ့ နေပါအုံး ခင် ကကော ၀သန့်ကို မချစ်ဘူးလား ချစ်ရင်လဲ တူလေးတယောက်ကို အဒေါ်တယောက်က သာမန်ထားတဲ့ အချစ်မေတ္တာသန့်သန့်နဲ့ပဲချစ်တာလာ သေကောသေချာလို့လား ဆိုပြီး ….ခင့် ကိုခင်ပြန်ဆန်းစစ်မိနေတယ်။
ဘာပဲပြောပြော …ခင် သူ့အကြည့်တွေကို မခံနိုင်တာကတော့ အမှန်ပဲ ..အဲလိုရီးစားတွေထားတယ်ဆိုတာကိုလဲ ခင့်ရင်ထဲမှာ မကျေနပ်သလို ဖြစ်နေမိတယ်…အဲဒါတွေက ဘာကြောင့်လဲ ကို့ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်နေမိတယ်ရှင်။ ခင်တို့ နှစ်ယောက် ဒီထပ်ပိုပြီး ဘာမှလဲ ထပ်ဖြစ်မလာပါစေနဲ့ လို့လဲ ဆုတောင်းမိတယ်။ နာရီဝက်တနာရီလောက်လဲကြာရော..အိမ်ရှေ့အခန်းတံခါးကို သော့နဲဖွင့်ဝင်လာတဲ့ အသံကို အခန်းထဲက ကြားနေရတယ်…ဒါနဲ့ ဘယ်သူများလဲ သူခိုးများလားဆိုပြီး အခန်းတံခါးဖွင့် ကြည့်လိုက်မှ ၀သန်ပြန်ရောက်နေပြီ…
“သား ၀သန် ပြန်ရောက်နေပြီလား …အသံမပေးဘာမပေးနဲ့ ..တီတီဖြစ်သူခိုးထင်လို့ လန့်သွားတာပဲ”
“ တီတီကလဲ ဒီရပ်ကွက်သူခိုးမရှိဘူး …လူခိုးပဲရှိတာ…ဟဲ..ဟဲ”
၀သန်က ခင့် ကိုစနေသေးတယ် ..မျက်နှာကလဲ ပြုံးဖီးဖီးနဲ့ မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ကောင်လေးလိုစိတ်ထဲက ပြောရင်း …သူ့ကို
“ အမလေး ..တီခင် တို့က လူမပြောနဲ့ ဂေါ်ဇီလာတောင်မကြောက်ဘူးနော်..သိလာ”
လို့ မျက်စောင်းလေးတချက်ခဲပြီး ၀သန့်ကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။
“ တီ ဒီည ဘယ်မှမသွားဘူးလာ ဟင်…ဘယ်မှလျှောက်မလယ်ချင်ဘူးလား…လယ်ချင်ရင် ၀သန်လိုက်ပို့မယ်နော်”
“ရပါတယ် ၀သန်ရယ် တီခင် ဒီညဘယ်မှမသွားဘူး …ကို့တူလေးနားမှာပဲ နေမယ် ..စကားတွေအများကြီးပြောရင်းနဲ့ ပေါ့” လို့ ကြာပါတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ကိုလူချောလေးကို ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်
၀သန် ခင့် အနားကပ်လာပြီး တကယ်ပြောတာလား တီခင်…တီခင်က ၀သန်နဲ့ ဘာအကြောင်းတွေများပြောချင်တာလဲ…” လို့ ခင့်အနားကပ်ပြောတော့ ခင်ကလဲ
“ခစ်..ခစ် ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ့လို” ပြောလိုက်တယ်
“ ဒါဆိုရင် တီခဏစောင့် ကျနော် ရေမိုးချိုးလိုက်အုံးမယ်နော်”“ အင်”
၀သန် သူ့အခန်းထဲ ၀င်သွားပါလေရော။
၀သန် အခန်းထဲ ၀င်နေတုံး ခင်လဲ ကုမ္မဏီက ဒါရိုက်တာကို ဒီနေ့ သူရန်ကုန်ရောက်ကြောင်း ..မနက်ဖြန် အစည်းအဝေးကျမှပဲ စုံကျမယ်လို့ လှန်းဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ဒါရိုက်တာကလဲ ခင် ခရီးပန်းလာရင် ဟိုတယ်မှာပဲအနားယူလိုက်ပါ …ဒီနေ့တော့ လာမတွေ့တော့ပါနဲ့လို့တဖက်ကပြန်ပြောတယ်…ခင်က အခုဟိုတယ်မှာ ခင် မနေတဲ့ အကြောင်း ခင့်အမတိုက်ခန်းမှာ တူတယောက်နဲ့ နေနေတာကြောင့် ဟိုတယ်မှာမနေဖြစ်တော့ ကြောင်းပြန်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်…ဒါရိုက်တာကလဲ အဲဒါလဲရတာပဲ ဒါဆို မနက်ဖြန်အစည်းအဝေးတော့ အမီလာခဲ့နော် ခင်ဆိုပြီး တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန် အကြောင်းကြားအသိပေးရင်းဖုန်းချလိုက်ကျတယ်။ဖုန်းပြောပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ တီဗွီဖွင့်ပြီး ဟိုလိုင်းပြောင်းကြည့် ဒီလိုင်းပြောင်းကြည့်နဲ့ လုပ်နေလိုက်တယ်။
၀သန်သူ့အခန်းထဲကနေ ပြန်ထွတ်လာပါပြီရှင်… အားကစားဘောင်းဘီတို တီရှပ်အဖြူနဲ့ … တကယ့် အားကစားသမားကြီးပုံစံကိုပေါက်နေတာ…ရင်အုပ်တွေကလဲကားကား လက်မောင်းတွေကလဲ ကြွက်သား လုံးကြီးတွေနဲ့ တော့ …သူကြည့်ရတာ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ၄လကနဲ့ မတူပဲ အရမ်းကို ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကောင်းလေးပဲလို့ ၀သန် ဧည့်ခန်းထဲ လမ်းလျှောက်လာတာကို ငေးကြည့်နေရင်း ခင် သူ့ကို အားကျနေမိတယ် သိလာ… ပြီးတော့ အရမ်းယောကျာ်းကောင်းပြီသပြီး ချောတာလဲ မပြောပါနဲ့တော့ လို့ ခင် ၀သန့်ကို စိတ်ထဲကနေလဲ ချီးမွမ်းနေမိတယ်…ခင်ကချောတယ်လို့ ပြောတဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ တော်တော်ရှားတာနော်…ကျောင်းတုန်းကဆို သူငယ်ချင်းတွေက ခင့်ကို အပျိုကြီးဖြစ်မယ်လို့ တောင်ထင်ထားကျတာ သိလာ…ခင် ကဇီဇာအရမ်းကြောင်ပြီး လူလဲအရမ်းရွေးလို့တဲ့…ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သိလာ…ခင် ကျောင်းတုန်းကဆို အရမ်းမာနကြီးတာ …ကိုတိုင်ကားမောင်းပြီး ကျောင်းတတ်တယ်လေ…အဲဒီခေတ်က မန္တလေးတမြို့လုံး ကားဘယ်နှစီးရှိလဲ လိုက်ရေလို့ရတဲ့ခေတ်မျိုး….ကျောင်းကို ကားနဲ့လာတက်တယ်ဆိုတာ အတော်ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ ကားစီးနိုင်တာ..အခုခေတ်လို မျက်စိနှောက် ပလူပျံနေအောင် ကားတွေက မများသေးဘူး…ရုပ်ကလဲ အသင့်သင့်ချော ပိုက်ဆံလဲရှိ ကားကြီးနဲ့ ဆိုတော့ …ကျောင်းထဲက ဘဲတွေများ ခင့် ကိုလိုချင်လိုက်တာများ မပြောနဲ့ ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလာ…တကယ်…ခင် ကလဲ အဲလိုအနေအထားတွေ သိတော့ …မာနကြီးတခွဲသားနဲ့ တော်ယုံယောကျာ်းဆို စကားလာပြောရင်ပြန်ဟောက်လွှတ်တာ…ဘယ်သူမှ မကပ်ရဲဘူး …ကိုမြင့်တယောက်သာ ခင် ကလက်ခံခဲ့တာလေး…ကိုမြင့်က အဲဒီအချိန် မန္တလေးမိန်းထဲမှာ ကင်းနော်…ဒီလိုနဲ့ ကိုမြင့်နဲ့ပဲယူဖြစ်ခဲတာလေ…လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချီးနင်း ဆိုသလို ကိုမြင့်ဆိုတဲ့လူဟာ ခင့်အတွက်တော့ ရုပ်ချောတာတခုပဲ မက်မောစရာရှိတယ်…ကျန်တာ ဘာမှသုံးစားမရတဲ့ လူကြီးပါ…ဒါကြောင့်လဲ ကိုမြင့်နဲ့ခင် မနှစ် တနှစ်ကပဲ ကွဲခဲ့ကျတာပေါ့..။ ဒါကြောင့် ၀သန့်ကို ခင် ကချောတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောနေမိတာ ၀သန်တကယ်လဲချောလို့ပေါ့…ခင် သူ့ကိုကြည့်နေရင် တချက်တချက်လွှတ်လွှတ်သွားတယ်…အဲဒါဘာလဲသိလာ…
၀သန့်ကို ကို့တူလေးတယောက်လိုမမြင်မိပဲ တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အစင်လေး ဆိုပြီးပေါ့။
ဒီလိုစိတ်ထဲ မှာဖြစ်နေတာကို ၀သန် သတိထားမိမှာစိုးလို့ မနဲ ပြန်ပြန် ထိန်းယူရတယ်…ကိုကအကြီးနော် ဆိုတာကို ခေါင်းထဲ အမြဲတမ်းပြန်သတိရပြီး ကို့ကိုယ်ကို ပြန်ထိန်ထ်ိန်းပြစ်ရတယ်…တခါတလေ ကို့ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး မထိန်းနိုင်မှာတောင် ခင် ကြောက်နေမိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၀သန် ခင့် အနားမှာလာထိုင်တယ်.. ဆိုဖာနှစ်ယောက်ထိုင်ခုံမှာ ခင်ကတဖက် ၀သန်ကတဖက်ပေါ့။
သူလာထိုင်ပြီး နှစ်ယောက်သား ဘာမှစကားမှမပြောဖြစ်ကျပဲ တီဗွီကိုသာ ဆိုက်ကြည့်နေမိကျတယ်… ဒါနဲ့ ၀သန်က ခင့်ဖက်လည့်ပြီး စကားစတယ်…
“ တီခင် …တီခင် ညဘာမှ မစားတော့ဘူးလာ ..ဟင် …တီခင်..ဗိုက်စာတယ်ဆို သား အောက်ဆင်းပြီး တခုခုဝယ်ပေးမယ်လေး..”
“ တော်ပါပြီ သားရယ်…တီတီ ဘာမှမစားချင်တော့ပါဘူး ၅နာရီလောက်ကပဲ သားနဲ့ စားထားတဲ့ဥစ္စာကို ..ရပြီ တီခင်ညဘာမှမစားတော့ဘူးနော်သား”
“ အင်…အဲဒါဆိုသားလဲ ဘာမှသွားမ၀ယ်တော့ဘူး…ရေခဲသေတ္တာထဲမှာလဲ ကိတ်တွေ ဒိးုနပ်တွေရှိတယ်…ထမင်းမှစားချင်တယ်ဆိုရင်လဲ …ကြက်ဥနဲ့ ၀က်အူချောင်းတွေရှိတယ်..တီတီ”
“ရေခဲသေတ္တာထဲ ကို သားကအစုံထည့်ထားတာပဲ…အမလေး အစားပုပ်လိုက်တာ ငါ့တူလေးကလဲ…”
“မဟုတ်ဘူးတီတီရဲ့…သားက တခါတလေ ညတော်တော်နက်တဲ့ အထိ စာဖတ်နေတတ်တယ် …အဲလိုစာဖတ်နေရင်း ဗိုက်စာစာလာတတ်လို့ ရေခဲသေတ္တာထဲ …ရိက္ခာတွေဖြည့်ထားတာ…ညကြီးမင်းကြီးကျတော့ ဘယ်မှသွားဝယ်စားလို့မရတော့ဘူးလေ…ဒါကြောင့်ပါတီခင်ရဲ့”
“ဟုတ်တော့…ဟုတ်တာပဲ…အဲလှိုဗိုက်စာရင် ညကြီးဘယ်မှလျှောက်မသွားနဲ့နော် သား ၀သန်…လူစိုးသူခိုးနဲ့ တွေ့နေမှဖြင့် ဒုက္ခများနေမယ်”
“အင်ပါ တီခင်ရဲ့ ..အဲလိုတွေ သိလို့ကို ရိက္ခာအပြည့် ဖြည့်ထားတာ..ဟဲ..ဟဲ”
ခင့်ကို ပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ် ပြန်ဖြေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဘာမှ ထပ်မပြောဖြစ်ပဲ တီဗွီကိုသာ ဆက်ပြီးကြည့်နေကျတာပေါ့ ..နဲနဲကြာတော့ ခင်ကပဲ စကားစလို့
“သား ၀သန် မင်းမှာ ချစ်သူရီးစားများရှိနေပြီလား…ရှိရင်လဲ တီတီ့ကိုပြောပြလေ…သူကချောလား…ဘယ်လိုလေးလဲ ဆိုတာ ..တီတီလဲသိချင်တယ်…ပြောပြပါလား…”
လို့ ၀သန့်မျက်နှာတချက်ကြည့်ပြီး မသိချင်ယောက်ဆောင်ကာမေးလိုက်မိတယ်…ဒါနဲ့ ၀သန်ကလဲ တီဗွီကို မျက်နှာမူထားလျက်နဲ့ ခင့်ကို ပြန်ဖြေတယ်…
“တီကလဲဗျာ…ကျတော်က ရီးစားဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲ …ကျောင်းနဲ့အိမ် အိမ်နဲ့ တဲနစ်ကွင်း ဒါတွေနဲ့ပဲ ပတ်ရှုပ်နေတဲ့ ဥစ္စာ ဘယ်သူကသားကို လာကြိုက်မှာလဲ…မရှိသေးပါဘူး တီတီရယ် ..”ဆိုပြီး ခင့်ကို ခပ်ယဲ့ယဲ့အပြုံးနဲ့ ပြန်ပြောတဲ့ သူ့ပုံစံကို ခင်လေး သိလာ နာရွက်ဆွဲပြီး ..ဗိုက်ခေါက်တွေဆွဲလိမ်ပြစ်ချင်တယ်…သူ့အဒေါ်ကိုများဘာမှတ်နေလဲမသိဘူး လာလိမ်နေသေးတယ်…။
ခင်လဲ သူ့အကြောင်းမသိသလိုပဲ နေပြီး ပြန်ပြုံးပြလို့ …တခုမေးလိုက်မိတယ်
“ သားမှာရီးစားမရှိဘူးဆိုတာကို တီယုံပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လား..”
လို့ ခပ်ယဲ့ယဲ့အပြုံးနဲ့ ပဲဝသန့်ကို ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်…သူမှာရီးစား မရှိဘူးဆိုတာ ခင် မယုံမှန်းသူရိပ်မိတဲ့ပုံပဲ…
သွားတွေပေါ်အောင်ဖီးပြီး ခင့် ကိုပြန်ရီပြနေတယ်လေ…
“ဟီ..ဟီ…ဟုတ်တယ်တီရဲ့ သား မှာမရှိဘူး…”
ဟင်..ဟင် ကောင်လေးနော် ငါအကုန်သိတယ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ သူ့ကို မျက်လုံးတချက်ပြူးပြလိုက်တယ်..အဲတော့ သူက
“တီကလဲ..အဟုတ်ပြောတာ …သားမှာလုံးဝရီးစားမရှိသေးဘူး…ယုံ” ဆိုပြီး မျက်နှာပိုး အချိုးသတ်လို့ ခင့် ကို အတည်ပေါက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်…ဒါကြောင်ခင်လဲ ထပ်မမေးတော့ပါဘူး မေးလဲ ဒါပဲဖြေမယ်. ခွေးကောင်လေးဆိုပြီး ထပ်မမေးပဲ…ပြုံးစိစိလုပ်ကာ တီဗွီဖက်ခေါင်းလည့်လို့ တီဗွီဖန်သားပြင်ကြီးကို ဆက်ငေးနေလိုက်တယ်…
ဒီလိုတီဗွီကို စိမပါပဲကြည့်နေရင်းက မေးစရာ တခုခေါင်းထဲထပ်ပေါ်လာတယ်…
ခင် သူ့ကိုမကြည့်ပဲ လေသံခပ်တိုးတိုးနဲ့ ခေါ်လိုက်တယ်… “တီပြော”
သူကလဲ လဲ့မကြည့်ပဲ ပြန်ဖြေတယ်…
“သား ၀သန်မှာ ချစ်သူရီးစားမရှိဘူးဆိုတော့ သားရင်ထဲကနေ တဖက်သတ်ချစ်နေတာမျိုးကောမရှိဘူးလား..ဟင်…”
လို့ နှစ်ယောက်ထဲကြားနိုင်တဲ့ လေသံတိုးတိုးနဲ့ပဲ ထပ်မေးလိုက်မိတယ်…
၀သန် ခင့်ကို ဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး တီဗွီကိုပဲ ဆိုက်ကြည့်နေတယ်…ညကလဲ တဖြည်းဖြည်းနက်လာရင်းက လမ်းထဲ ကားတွေ ဖြတ်သွားဖြတ်လားလုပ်တဲ့ အသံတွေတောင် ခပ်ကျဲကျဲသာကြားရတော့တယ်…တီဗွီက သရုပ်ဆောင်များရဲ့ စကားတွေကတော့ အတိုင်းသာကြားနေရပေမဲ့ ဘာတွေဆိုလို နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ ၀သန်ကော ခင်ပါ လုံးဝနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး…အနေထားတခုအတွက်သာ စိတ်မပါပဲ ကြည့်နေကျရတာပေါ့…
၀သန် အတော်နဲ့ ခင့် မေခွန်းကို မဖြေဘူး …ခဏကြာတော့
လို့သာ ခေါ်ပြီး ပြန်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်….
၀သန်က ဆက်ပြီး …
“ သား အရမ်းချစ်ရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်တော့ ရှိတယ် သိလာ တီခင်”
“အင်..ပြောလေသား သူကဘယ်သူလဲ ..ဟင်” သိလိုဇောအားကြီးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ၀သန့်ဖက်လည့်ပြီး ခင် ထပ်မေးလိုက်တယ်…
“ သား အရမ်းချစ်ရတဲ့ မိန်းမတယောက်တော့ ရှိတယ် သိလား တီ….သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဘယ်လောက်ပဲမြတ်နိုးနိုး …သား ရင်ထဲကစကားတွေကို သူ့ကို ပြောပြလို့ လုံးဝမဖြစ်ဘူးတီ…တသက်လုံးလဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျတော်သိတယ်….ဒါပေမဲ့ ကျတော် သူ့ကလွဲပြီး တခြားမိန်းကလေးတွေကို ပြောင်းချစ်ကြည့်တယ်….လုံးဝပြောင်းလဲလို့မရဘူး…သူကသား အတွက်တော့ နတ်သမီတပါးပါပဲ …တီတီ”
ခင် ဘာဆက်ပြောရမှန်မသိ ဖြစ်သွားတယ်..ရုတ်တရက်မို့ သူ့စကားတွေက ခင့် ရင်ထဲစူးဝင်သွားသလိုပဲ ဒါကြောင့် ခင့် မျက်နှာရဲကနဲဖြစ်သွားတာကို ၀သန်မသိစေချင်လို့ အရှေ့ကို ပဲ ဆိုက်ကြည့်နေလိုက်မိတယ် အတွေးထဲမှာလဲ “….အော်..၀သန်ရယ် တီခင်မင်းရင်ထဲမှာ ဘာတွေရှိတယ် ဆိုတာကို တီခင် တိတိကျကျကိုသိပါတယ်ကွယ်…မင်းရင်ထဲက အချစ်ဆိုတာကြီးက ဘယ်သူ့အတွက် သိမ်းစီးထားသလဲ ဆိုတာတီခင် အသိဆုံးပါ…ဒါပေမဲ့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတခုဆိုတာလဲ မင်းနားလည်ထားစမ်းပါ ၀သန်…ဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် ..မင်းရော မင်းရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သူပါ …တသက်လုံး အမှောင်ကမ္ဘာထဲမှာနေသွားကျရမယ်ဆိုတာ…မင်းသိထားသင့်တယ် ၀သန်…”
လို့ စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်နေမိတယ်…မျက်လုံးထဲမှာလဲ မျက်ရည်ပူတွေဝဲလို့ စုပြုံလာတယ်…ခင် မငိုမိအောင် မျက်ရည်မကျမိအောင် မနဲစိတ်ထိန်းထားနေရတယ်။
ဒါနဲ့ သူမရိတ်မိအောင် စီရီထားချင်မရှိတဲ့ ကပေါက်တီကပေါက်ချာစကားလုံးတွေကို အမြန်ပြောလိုက်မိတယ်…
“အော်..ဟုတ်လာ…၀သန်….အင်….ဒါဆို…ဒါဆို သား ချစ်နေတဲ့ သူက သားနဲ့ အဆင့်အတန်းခြင်းလုံးဝကွာခြားနေလို့လားကွာ…ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးမလို့လဲ…တီတီကိုပြ …တီတီတို့ကလဲ အခြေအနေမဲ့တွေမှ မဟုတ်တာ….ဘယ်သူလဲ သား” လို့ ၀သန်ကို မေးလိုက်မိတယ်
၀သန်…ခင့်ဖက်ကို လည့်လို့ စူးစူးရဲရဲကြည့်နေတယ် ဆိုတာကိုခင်သိတယ် ဒါကြောင့် သူ့ဖက်ကို မလည့်ပဲ စကားတွေ ပြောနေမိတာပေါ့…သူနဲ့ ခင်အကြည့်ချင်းဆုံလို့ မဖြစ် ခင်မျက်လုံးတွေကို သူတွေ့သွားလို့ လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ သူ တီဗွီဖက် မျက်နှာလဲ့သွားမှပဲ ခင် သူ့ဖက်ကို လဲ့ကြည့်မိလိုက်တယ်…၀သန်မျက်လုံးတွေထဲမှာ အရည်တွေလဲ့နေလေရဲ့ တီဗွီဖန်သားပြင်က ပို့လွှတ်တဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် မျက်လုံးထဲ မျက်ရည်တွေ ၀ိုင်းနေတယ်ဆိုတာ ပိုသိသာတယ်။
ခင့်ရင်ထဲမှာလဲ အရမ်းကို ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်….
၀သန် တီဗွီကို ငေးနေရင်းမှ
“ အဲလိုမျိုးကြီးလဲမဟုတ်ပါဘူးတီတီရယ်….သားပြောတဲ့ ကွာခြားမှုတွေ ..ဘယ်လိုမ မဖြစ်နိုင်မှုတွေဆိုတာ တီပြောသလိုမျိုးတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး …တီခင်ရယ်…အဲတာကို ကျနော်တယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှလဲ ..နှိုင်းယှဉ်ပြလို့ အဖြေထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး…”
ခင် ၀သန့် ကိုကြည့်ရင်း ရင်ထဲစို့လာတယ်…ခင် စိတ်တွေကို မနဲထိန်းချုပ်ထားရတယ်…
“သား ၀သန်ရယ် ..လောကကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး…သား အဲလိုတယူတန်တော့ မတွေးပါနဲ့ သားရယ်”
လို့ ခင် ၀သန့်ကို နှစ်သိမ့်ရင်း သူအနှားကို တိုးသွားလိုက်တယ်…ပြီးတော့ ၀သန့် လက်ကောက်ဝတ်လေးကို ခင် ဘယ်လက်နဲ့ စုပ်ကိုင်လို့ ၀သန့်ပုခုံးပေါ်ကို ခင် ခေါင်းလေးမှီထားလိုက်မိတယ်။
၀သန်ရုတ်တရက် နဲနဲအံသြသွားပုံရတယ်…မှီထားတဲ့ ခင့် ခေါင်းလေးကို ကြည့်ပြီး …ခဏအကြာမှ ၀သန့်ရဲ့ ဘယ်လက်ကလေးက ခင်ပုခုံးပေါ်ကို ရောက်လာတော့တယ်ရှင်…
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား တိတ်ဆိတ်လို့ ဘာမှဆက်မပြောဖြစ်ကျတော့ဘူး…ခင်လဲ သူ့ပုခုံးလေးကို မှီထားရင်းက သူ့ရင်ခုန်သံတွေကို အတိုင်းသာကြားနေရတယ်…၀သန် တယောက်ရင်ခုန်သံတွေ အရမ်းမြန်နေတယ်လေး…သူ့ရဲ့ ၀င်သက်ထွက်သက်တွေကလဲ ပိုမြန်မြန်လာသလိုပဲ…ခင့် ပုခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ သူ့လက်က ခင့် ပုခုံးကို တချက်တချက် ဖြည်းဖြည်း ညစ်ပေးနေတယ်…ချစ်သူ တယောက်ကို ဖက်လို့ နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးပေါ့…ခင် လဲအရမ်းကို သာယာမိနေတာပေါ့….
အဲလို ပုံစံလေးနဲ့ပဲ နှစ်ယောက်သား ဆိုဖာပေါ်မှာ တိတ်ဆိတ်လို့နေတာ ဘာစကားမှကို မပြောမိကျပဲ တော်တော်ကြာနေလိုက်မိကျတယ်…ဒါနဲ့ခင် ကစလို့ …
“ သား ၀သန် …သွားအိပ်ကျဆို့နော် …ညလဲနက်လပြီ…တီလဲ မနက်ဖြန် ကုမ္မဏီ အစည်းအဝေး တက်ရမယ်..သား လဲကျောင်းတက်ရမယ် မလား”
လို့ ပြောပြီး မှီထားတဲ့ ခင့်ခေါင်းလေးကို သူ့ပုခုံးပေါ်က အသာထလို့ မှတ်တက်ထရပ်လိုက်တယ်…
လို့ ၀သန်ပြန်ဖြေပြီး ခင် လဲ ၀သန်ကို ကျောခိုင်းလို့ ဧည့်ခန်းထဲကနေ ခင့် အခန်းဖက်ကို လျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ခင် အိပ်ရာပေါ်ရောက်တော့ ခင် ရင်ထဲမှာ ဟာသွားသလိုပဲ…လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာကြီးကို ရှေ့ဆက်မတိုးမိအောင် ခင် မသိစိတ်နဲ့ သိစိတ်နှစ်ခုကအပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်နေကျသလိုပဲ ..ခင့် ရင်ဘတ်ကြီးတခုလုံးလဲ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ အရမ်းကို မြန်နေတော့တာပဲ…အဲလိုနဲ့ ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့ ခင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။လူသံတွေ ကားသံတွေကို ခင့် နားထဲမှာကြားနေရတယ် ….အိပ်တ၀က် နိုးတ၀က်နဲ့ပေါ့…။
မျက်လုံးလေးကို မဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင်နဲ့ ဖွင့်ပြီး နာရီကိုလှန်းကြည့်လိုက်တော့ ၇နာရီခွဲနေပြီ…ဒါနဲ့ အိပ်ရာပေါ်က ကုန်းရုန်းထ ၀ရန်တာ လိုက်ကာလေးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ လူတွေ ကားတွေ နဲ့ သက်ဝင်လှုပ်၇ှားနေတဲ့ ရန်ကုန်မြိုကြီးကို တွေ့လိုက်ရတယ်…သာယာတဲ့ မနက်ခင်းလေးပါ။ အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆန်းသစ်တဲ့ မြို့ပြတခုရဲ့ အလှမျိုးမရှိရင်တောင် ခေတ်ပျက်မြို့ဟောင်းသာသာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလှကို ခဏတာ ငေးလို့ ရုစားနေရင်းက နေ ခင့် အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကုမ္မဏီအစီးအဝေးက ၉နာရီစမှာဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့ ဒေါကူမန့်တွေ အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ဖို့ ခင့် တာချီကေ့စ်ထဲက ဖိုင်တွေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေ ကို အစည်းဝေးမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အမြန်ဆုံးထုတ်လို့ ကိုးကားလို့ရအောင် စနစ်တကျလုပ်ပြီး ရေချိုးဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်။ အင် …ရေမချိုးခင် ၀သန့်ကို သွားတွေ့အုံးမှပဲ ဆိုပြီး ခင့် အခန်းထဲကနေ ၀သန့်အခန်းဖက်ကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ၀သန့်အခန်းထဲရောက်တော့ ရေချိုးခန်း အိပ်ရာ ဖက်တွေကို လိုက်ကြည့်တော့ ၀သန်တယောက်မရှိဘူး…ဒီကောင်လေး ထွတ်များသွားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီး မီးဖိုခန်းဖက်ကို သွားလို့ ၀သန့်ကို သွားရှာပါသေးတယ်…မတွေ့ဘူး…။
မီးဖိုခန်းက ထမင်းစားစာပွဲပေါ်မှာတော့ အုပ်စောင်းလေးနဲ့ အုပ်ထားတဲ့ စားစရာတွေကို တွေ့ရတယ်။ အုပ်စောင်းလှန်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းကန်ပြားတချပ်ထဲမှာ ကြက်ဥဟိုက်ဘရိုက်ကြော်တလုံးနဲ့ စတော်ဘယ်ရီဂျမ်းသုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်တချပ်ကို တွေ့တယ်။ ပန်းကန်ဘေးမှာ note လေးတစောင်ကို တွေ့တော့ ကောက်ဖတ်လိုက်မိတာ
“ တီတီ သား training သွားတယ်…၉နာရီခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက်မယ်…တီခင်စားဖို့ ဘရိတ်ဖတ်စ် စီစဉ်ပေးထားခဲ့တယ်”
ဆိုတဲ့ note လေးပါ။ ခင် ပြုံးလိုက်မိတယ်…။
သား ၀သန်တယောက် အိမ်မှာနေတဲ့ ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်တော့ …အရာရာတိုင်းကို အတော် သိတတ်နားလည်နေပြီး တယောက်ထဲ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ အသက်ရှင်နေနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယောကျာ်းရင့်မာကြီးတယောက်တောင်ဖြစ်လို့နေပါလားဆိုပြီး ခင် ကောက်ချက်ချရင်း တူတော်မောင် အချစ်ဆုံးလေးကို ချီမွမ်းမိနေတာပေါ့…အမှတ်တွေလဲ အများကြီးပေးနေမိတယ်။ ဒီပုံစံလေးတာ ၀သန့်ကို မမတင်မြင်ရင် အရမ်းကို ၀မ်းသာသွားမှာပါ။ ဒါနဲ့ ခင်လဲ ခင့်အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီး ထမီ အပေါ်ည၀တ်အိင်္ကျီ အတွင်းခံ နဲ့ ဘော်လီတွေကို အားလုံးချွတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲသွားလို့ ဆင်းပြေနပြေ ရေချိုးပြစ်လိုက်တယ်။ရေချိုးပြီးလို့ အ၀တ်အစားလဲ အလှပြင်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲက ၀သန်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘရိတ်ဖက်စ်ကို သွားစားလိုက်တယ်။ စားပြီးတော့ စားရွက်အလွတ်တရွက်မှာ စာတကြောင်းရေးချလိုက်ပါတယ်…
“သား ၀သန် တီတီ ကုမ္မဏီအစည်းအဝေးသွားပြီနော်…နေ့လည်၂နာရီ ၃နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်မယ်…တီ့အတွက် နေ့လည်စာဘာမှ မလုပ်နဲ့တော့ တီအပြင်မှာပဲစားလာခဲ့မယ်…တီတီ”
ဆိုပြီး note လေးတစောင်ရေးပြီး စာပွဲ ထမင်းအုပ်စောင်းပေါ် ညပ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။
နာရီကြည့်တော့ ၈ခွဲနေပြီ။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုယူ အိမ်ကိုသော့ပိတ်ပြီး ပါကင်ကကားကိုထုတ်ပြီး ကုမ္မဏီရှိရာ လှည်းတန်းဖက်ကို ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ ကုမ္မဏီရောက်တော့ MD ကိုဝင်တွေ့ပြီး မနက်၉နာရီကနေလုပ်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေး ၁၁ခွဲလောက်မှာပြီးသွားပါတယ်။ အစည်းအဝေးပြီးတော့ ရုံးကို မီတင်လာတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေစုပြီး မြို့ထဲမှာပဲ နေ့လည်စာ စားလိုက်ကျတယ်။ ဒါနဲ့ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁နာရီမှပြန်စပြီး ၂နာရီခွဲပြီးသွားတော့ ကုမ္မဏီကနေ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဘဲလ်တီးကြည့်တယ် တံခါးလာမဖွင့်ဘူး ဒါနဲ့ ခင့် စီရှိတဲ့သော့နဲ့ အိမ်ထဲကိုဖွင့်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။
ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲပြီး ကုတင်ပေါ်မှာလဲနေရင်းက ခင့် ဟန်းဖုန်းလေး တုန်ခါလာလို့ သီချင်းသံတွေ အဆက်မပြတ် ထွတ်လာတယ်။ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်ပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တော့ မမတင်ဖြစ်နေတယ်….ဒါနဲ့
“ ဟဲလို..ခင် ”
“ ခင် အဲမှာအစင်ပြေရဲ့လား ညီမလေး…၀သန်ကော်ရှိလား..ဘယ်လိုလဲ…ညည်းတူက လိမ်လိမ်မာမာကောရှိရဲ့လား”
“ ရှိပါ့တော် ..ရှိပါ ..အရမ်းကို လိမ္မာလို့ နေပါတယ်ရှင့်”
“သားက ကျန်းကျန်းမာမာကော ရှိရဲ့လား ခင်”
“အမလေးနော် အဖြစ်သဲနေလိုက်တာ မမသားလေ…ကျန်းကျန်းမာမာလဲရှိတယ်…လိမ်လဲလိမ္မာတယ် ပြောစရာကိုမလိုတာ…သူ့ဟာနဲ့သူ ကျောင်းသွာလိုက် တင်နစ်သွားရိုက်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေစီသွားလိုက်နဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ…ဘာမှကိုပြောစရာမရှိဘူး..ခင် ရောက်ရောက်ချင်းတုန်းကဆို ပိုလို့တောင့်အံသြသေးတယ်…တိုက်ခန်းတခုလုံးလဲ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လို့ ..သူ့အခန်းဆိုလဲ အရင်အိမ်မှာနေတုန်းကလို့မဟုတ်ဘူး….မမသားက အရမ်းတော်နေပြီသိလာ..”
“ အေး..ဟုတ်လား ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့ ခင်ရယ်…ငါတို့လဲ စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့ …လိုအပ်တာရှိရင်လဲ ခင် ကနဲနဲထောက်ပြလိုက်ပေါ့…ခင် တူကဘာပဲပြောပြောငယ်သေးတယ်လေး..ဟုတ်ဘူးလာ”
အမလေး မမတင်မို့လို့ ပြောတယ် …ခင့်တူက ငယ်သေးတယ်တဲ့ …အခုသူ့သားရဲ့ပုံစံနဲ့ သူ့ငယ်ပါကြီးကို မမတင်တွေ့လိုက်လို့ကတော့ အဲဒီစကားထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး…ပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အံသြလို့မဆုံးဖြစ်နေမှာမြင်ယောင်သေးတယ်။
“ စိတ်ချပါမမရယ် ခင် လဲ တပါတ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ နေဖြစ်မယ် …ဒီက အစည်းအဝေးက ၈ရက်၉ရက်လောက်ကြာအုံးမှာ…ခင် ၀သန်နဲ့ပဲနေမှာပါ မမ …၀သန်နဲ့ အတူတူ တပတ်လောက်နေပြီး သူ့အနေအထားဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ မမကိုပြန်ပြီး ရီပို့လုပ်ပါ့မယ်ရှင့်” လို့ ခင် မမတင်ကို ပြန်ဖြေရင်း အပြုံးကောက်လေးတချက် ပြုံးလိုက်တယ်..ဒါကိုတော့ မမတင် တွေ့နိုင်မယ်မထင်ဘူး။
“ ကျေးဇူးပါပဲ ငါ့ညီမလေးရယ် …ခင့် တူကို လိုအပ်တာလေးတွေ လုပ်ပေးလို့ အစည်းအဝေးပြီးတော့ မန္တလေးပြန်လာခဲ့လိုက်ပေါ့ …နော်”
“ဟုတ်ပြီ မမတင် စိတ်ချသိလာ…၀သန့်ကို ခင် ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်ရှင့် ..သူ့သာကို ဖြစ်နေလိုက်တာ ..မမကသာ ၀သန့်ကို ကလေးထင်နေတာ သူကဖြစ်လူကြီးတယောက်လို ဖြစ်နေပြီးမမရေ…”
“ အဲကောင်လေး ရီးစားတွေများရနေလားမသိဘူး….ခင် မမေးကြည့်ဘူးလား”
“မေးကြည့်ပြီးပြီ …မရှိဘူးတဲ့ ..သူ့အလုပ်နဲ့သူတောင်အနိုင်နိုင်တဲ့ ရီးစားထားဖို့ အချိန်မရှိဘူးတဲ့…မမရေ..ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့မသိဘူး”
“ဟုတ်မှာပါအေး…ငါ့သားက အခုမှကလေးကို ..”
အမလေး မမရယ် ကလေးကလေးနဲ့ သူ့သားကို ပြောနေလိုက်တာ နားကြားပျင်းကပ်လာပြီ…ဒီမှာမမရေ မမသားက မမထင်သလိုကလေးကလေးမဟုတ်တော့ဘူး…သူ့ပစ္စည်းကြီးကိုမြင်ရင်ပဲ ဘုရားတသွားအုံးမယ်လို့ ခင့် စိတ်ထဲက မမတင်ကို ပြောပြစ်လိုက်ချင်တယ်…ဒါမေမဲ့ မပြောလိုက်မိပါဘူး…
ဟုတ်ပါတယ်…မမရယ် ၀သန်ကကလေးပဲရှိသေးတာ…ဟုတ်ပါတယ်လို့ “ ခင်လဲ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့လေး မမတင်ကိုပြောပြစ်လိုက်တယ်။
“ဒါဆိုလဲ ..ဒါပဲနော်ခင် …မမ အိမ်အလုပ်တွေရှိသေးတယ်…take careနော်”
“ ok ပါ မမရဲ့ bye နော်”
လို့ မမတင်နဲ့ ဖုန်းပြောပြီးဖုန်းချလိုက်တယ်။
ခင် အိပ်ရာပေါ်ပြန်လဲနေရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးလုပ်လို့ စဉ်းစားနေရင်း …ခင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ အရာတခုကို စဉ်းစားမိသွားတယ်။ အဲဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး ခင်နဲ့ ၀သန်ရဲ့ ကိစ္စပါ…
ဟုတ်တယ် ခင်ပြတ်သားမှဖြစ်တော့မယ်…၀သန့်ရင်ထဲမှာ ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကို ခင် အဆုံးသတ်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ ခင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခင်နဲ့ ၀သန် ဟာ ခဏလေးတွေ့ပြီး သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲရမဲ့ သူစိမ်းတွေမဟုတ်ဘူး …ဒီလို ကိစ္စကြီးမဖြစ်သင့်လို တယောက် နဲ့ တယောက် ခပ်ဝေးဝေးမှာနေပြီး အမြဲရှောင်တိန်းနေလို့ရတဲ့သူတွေလဲမဟုတ်ဘူး…ခင်နဲ့ဝသန်ဟာ တူဝရီးအရင်းခေါက်ခေါက်တွေ …တနည်းမဟုတ်တနည်းကတော့ ပတ်သက်တွေ့ဆုံနေရမှာပဲ …အဲလိုသာရှောင်နေရင် မိသားစုဝင်တွေ ပိုရိတ်မိလို့ ဒီထက်ပိုစိုးသွားနိုင်တယ်လို့ ခင်စဉ်းစာမိလိုက်တယ်။
ခင်ရင်ထဲကဖြစ်နေတာကိုကော ၀သန့်ရင်ထဲကဖြစ်နေတာတွေကိုပါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နှစ်ဦးကြားဖွင့်ပြောတိုင်ပင်မယ်…ဒီစိတ်ကြီးတယောက်အပေါ်တယောက် ဆက်မထားနိုင်အောင် တခုခုနဲ့ အစားထိုးပြီး ပြောင်းလဲပြစ်မှရမယ်လို့ ခင် စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီည ၀သန်ပြန်လာရင် ဒီကိစ္စကိုဖွင့်ပြောလို့ ဆွေးနွေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့။ ဟုတ်တယ် ခင်အဲလိုပဲလုပ်ရမယ်…မဟုတ်ရင် ခင်နဲ့ ၀သန်ကြားမှာရှိတဲ့ မိုင်းဗုံးကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ကွဲလို့ မမှားသင့်တာမှားပြီး လူပုံအလယ်မှာတသက်လုံး အရှက်ရကျလိမ်မယ်။ အဲလိုဖြစ်ခဲရင်တော့ ခင်လဲကို့ကို သတ်သေမိမှာပဲ။
ခင် လေ၀သန်နဲ့ပတ်သက်လာရင် စိတ်ကို အတော်ထိန်းနိုင်တယ်လို့သာပြောသာ…ခင့်အကြောင်းခင်သိတယ်။ ကိုမြင့်နဲ့တုန်းကလဲ မာနအလွန်ကြီးတဲ့ခင် ကိုမြင့်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်ြး့ပီး လိင်ဆွဲဆောင်အားကြီးလွန်တဲ့ ကိုမြင့်ရဲ့ စကားတွေ အပြုအမူတွေကို မရှောင်နိုင်ခဲ့လို့ပဲ မာန်ကျိုးလို့ ယောကျာ်းရခဲ့တာပေါ့…အခု ၀သန်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဆိုတာ ကိုမြင့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလို့ရှိတဲ့သူတယောက်။ ခင် စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ မွန်းကျပ်လာတယ်။ ခင် စိတ်တွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားလိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေစုံမိတ်ထားလိုက်မိတယ်။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော် မတို့ တူဝရီးကြားမှာမှ ဘာလို့ ဒီကံတရားမျိုးရှိနေရတာလဲ ဘုရားလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေမိတယ်။ အင်..ဒီအိမ်မှာနောက်ထပ်လေးငါးခြောက်ရက် ထပ်နေဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါအုံးမလား မိခင် နင်စဉ်းစားအုံးနော်လို့ ကို့ကိုကိုပြောနေမိတယ်…ဒါကြောင့် ကုမ္မဏီကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဟောတဲလ် မှာသွားနေရကောင်းမလားပေါ့စဉ်းစားမိတယ်။ အသိစိတ်ကတာ အဲလိုတွေ စဉ်းစားမိနေတာ အင်းအားကြီးတဲ့ စွမ်းရည်တခုကတော့ ခင် အဲလိုတွေမလုပ်မိအောင် ထိန်းချုပ်ထားသလိုပဲ။ အဲဒါတွေက အပြောသာရှိသလို အရာဝင်လာမယ့် အဖြေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ခင် ဘယ်မှလဲမသွားချင်ဘူးကွာ ၀သန်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ မိသားစူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ နှစ်ယောက်ထဲ နေရဖို့ အခွင့်အရေးဆိုတာကလဲ အကြားကြီးမှတခါဖြစ်နိုင်မဲ့ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အခွင့်အရေးမျိုး။
ခင့် စိတ်တွေအရမ်းထွေပြားနေတော့တာပဲ…လုပ်ပြစ်မယ် ..ဟာ…မလုပ်ဘူးကွား ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာဆိုတဲ့ စိတ်နှစ်ခုက ခင့် ရင်ထဲမှာ လွန်ဆွဲနေကျသလိုပဲ။ ခင် ဒါမျိုးပြင်းထန်တဲ့ အရာတခုခုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို ကိုမြင့်နဲ့တုန်းကတောင် မခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ အခု တူတော်မောင် ၀သန်နဲ့မှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်မှန်းမသိတောဘူး။ အခု ၀သန်နဲ့ အတူနေတာ တရက်ပဲရှိသေးတယ် ကိုမြင့်နဲ့ ကွဲပြီးကတဲ့က မရရှိသေးတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရရှိနေသလိုပဲ။ ခင် ဘာလုပ်ရမလဲ …ခင်တကယ်ရူးချင်တယ် သိလာ။ ခင် သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကို အပြစ်မပြောပဲ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေပေးပေးနေတယ် ဆိုတာကိုလဲ ၀သန်သိမှာပါ။ အခုအခြေအနေက တယောက်ကိုတယောက် ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိနေကျပေမဲ့လဲ တရားဝင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဇွတ်မိုက်လိုက်ကျဖို့ဆို တာ သူလဲမရဲ ကိုလဲမရဲ လိပ်ခဲတည်းလဲ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ အခြေအနေမျိုးလေးပေါ့။
လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လဲ ဘယ်တော့မှ နောက်ကြောင်းပြန်လဲ့လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပဲ။ အရင်လို ဖြူစင်တဲ့ အဒေါ်နဲ့ တူတယောက်ရဲ့ ချစ်ချင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကိုတော့ လုံးဝပြန်ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံး ဘယ်သူကမှလက်ခံလို့ မရတဲ့ အပြစ်ကို ကျူးလွန်လို့ အပူဆုံးငရဲမှာ အစဉ်းအမြဲ ခံစားစံစားသွားရမယ်ဆိုတာတော့ နှစ်ယောက်လုံးသိထားကျရမှာ အမှန်ပဲ။ အခု ခင် စဉ်းစားနေတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ရိုးရိုးအချစ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူး။ လုံးဝမလုပ်ရလို့ လူတွေ ပညတ်ထားတဲ့ ပညတ်ချက်ကြီး…
ခင်ဘာလုပ်ရမလဲ ခင် နဲ့ ၀သန်ဒီတိုင်းနေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ခင် စဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ စိတ်တွေအရမ်းရှုပ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ အိပ်ရာပေါ်ကထ ဧည့်ခန်းထဲကိုသွားပြီး ဂြိုလ်တုကလာတဲ့ တီဗီင်္ွအစီအစဉ်တွေကို စိတ်မပါတပါနဲ့ တလိုင်းပြီးတလိုင်းပြောင်းကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
တီဗွီကိုသာကြည့်နေတာ ခေါင်းထဲမှာတော့ ခုနက အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ စဉ်းစာမိနေတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုဖာပေါ်ကထ ၀သန့်အခန်းထဲကိုသွားပြီး ဟိုဟာကိုင်ကြည့်ဒီဟာကိုင်ကြည့်လိုက်လုပ်နေမိတယ်။ ၀သန့် အ၀တ်အစားတွေ ချိတ်ထားတဲ့ အ၀တ်တန်းလေးနားသွားပြီး အိင်္ကျီတွေကို မျက်နှာမှာအုပ်လို့ ၀သန့်ကိုသင်းနံ့ကို နမ်းကြည့်နေမိတယ်။ သား ၀သန်ရဲ့ ဘော်ဒီအနံ့ကတော်တော်မွေးတယ် ချွေးနံ့ တွေ တခြားအနံ့တွေဘာမှမရှိဘူး ကိုယ်သင်းနံ့နဲ့ သား ၀သန်သုံးတဲ့ ရေမွေးနံ့လေးတွေပဲ ခင့် နာခေါင်းထဲမှာ သင်းပျံ့နေတာပဲ။ ခင် အရမ်းကို ကြည်နူးသလိုခံစားမိတယ်။ ခုနကခင် စဉ်းစားနေတာ ၀သန်နဲ့ ခင်တို့ရဲ့ကြားက ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကြီးကို ရပ်တန့်ပြစ်ဖို့စဉ်းစားနေရာကနေ အခု သား ၀သန်ရဲ့အခန်းထဲကိုလာပြီး ၀သန့် ခန္ဓာကိုယ်အနံ့တွေကို ရှူရှိုက်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည်နူးမိနေတာကို သတိပြန်ဝင်လာပြီး သားအခန်းထဲကနေ ပြန်ထွတ်ခဲ့မိပါရော ခင် ဘယ်လိုလုပ်ရမနော်…အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတာပဲ…။ဒါနဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ် ပြန်လာထိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်…ခင် တယောက်ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလဲ ကို့ဟာကို တောင်မရှင်းပြတတ် မပြောပြတတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဟိုတွေးဒီတွေး စဉ်းစားရင်း အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားတာ နာရီကြည့်တော့ ၄နာရီခွဲ ၅နာရီတောင်ထိုးခံနီးနေပြီ သား ၀သန်တောင်ပြန်လာတော့မယ် လို့တွေးမိပြီး တီဗွီကိုပိတ် လို့ ခင့် အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်လာလိုက်မိတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ မှန်တင်ခုံရှေ့မှာထိုင် ခင့် ဆံနွယ်တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖီးလိမ်းလို့ မျက်နှာမှာ အိမ်နေရင်းမိတ်ကပ်ပါးပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ ကြက်သွေးရောင် ပါးပါးလေးကို လိမ်းချယ်ထားလိုက်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခင် အိမ်မှာနေရင် ပုခုံးအောက်ကို ပျော့ပြီးဖြာဆင်းနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ဒီတိုင်းဖားလျားချထားတတ်တယ်…မျက်နှာမှာလဲ ဘာဆိုဘာမှ မလိမ်းဘူး တခါတလေတော့ သနပ်ခါး ရေကျဲလိမ်းထားတယ်…။ အ၀တ်အစားကတော့ အိမ်နေရင်းဝတ်ထမီနဲ့ မိန်းမ၀တ် စပေါ့ရှပ် ကိုကျပ်လေးကို ၀တ်ထားလေ့ရှိတယ်။ အခုလဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ ၀တ်ထားတယ်…ထူးခြားတာဆိုလို့ မိတ်ကပ်ပါးပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီပါးပါး လိမ်းချယ်ထားတာတခုပဲ။ ထမီကို ချေမျက်စိဖုံးအောင်ဝတ်ပြီး ခင့် တင်ပါက အတွင်းခံ သရေကြိုးလေးတွေ ထင်းနေတဲ့ထိအောင် ထမီကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ကျပ်နေအောင်ဝတ်လေ့ရှိတယ်။ မှန်တင်ခုံမှာထိုင်နေရာကနေထ ထမီကိုပြန်ပြင်ဝတ်လို့ ဟိုလဲ့ ဒီလဲ့နဲ့ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပေါ်တဲ့ မှန်ရှေ့မှာခင့် ရဲ့ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်ရဲ့ နှစ်လိုဖွယ် အလှတရားကို အရှေ့ရောအနောက်ရော ဘေး အပေါ်အောက် နေရာမကျန်အောင် စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်ကို ရှာနေမိတယ်။
မရှိဘူး အားလုံးကွက်တိပဲ အသက်၃၅နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်လို့ တခုလပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ခင့် ရဲ့အလှတရားဟာ အသက်၁၆နှစ်အရွယ် အပျိုဖြန်းလေးတယောက်ရဲ့ ပျိုဂုဏ်တင့်တယ်မှုကို မရှင်နိုင်ပေမဲ့လဲ သာမန် အလှမျိုးသာရှိတဲ့ အပျိုသိုးလေးများရဲ့ အလှတရားထက်တော့ အများကြီးသာပါတယ်။ ဒါကိုခင့်ကိုခင်လဲသိတယ်..ဒါကြောင့်ပဲ ကုမ္မဏီက ယောကျာ်းကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေရဲ့ ခိုးကြည့် ပေါ်တင်ကြည့် အကြည့်မျိုးဆုံးနဲ့ ကြည့်ခြင်းကို ခံနေရတာပေါ့။ ဒီ့အတွက်လဲ ခင့် အလှတရာကို ဂုဏ်ယူတယ်။ ကိုမြင့်နဲ့ကွဲပြီး နောက် လေးလ ငါးလတောင်မကြာဘူး ခင့် အလှကို ဘယ်အချိန်ကတဲ့က ကျိတ်ကျန်နေမှန်းမသိတဲ့ ယောကျာ်း ကြီးကြီးငယ်ငယ်များ ဒဲ့ မဟုတ်ရင်တောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့ နီးတွေနဲ့ ခင့် ကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြောင်း ကမ်းလှမ်း တဲ့ သူများကလဲမနဲဘူး…။ ခင် ယောကျာ်းတွေကို ကျောင်းကတဲ့ကအထင်မကြီးခဲ့တာပါ..ဒါတောင် ကိုမြင့်နဲ့ ရေစက်ပါလို့ အိမ်ထောက်သည်ဖြစ်ခဲ့ ရတာ…မဟုတ်ရင် အပျိုကြီး တသက်လုံးလုပ်ဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ။ ဒီလိုအနေအထားရှိတဲ့ ခင့်ကို ဘယ်သူကမှ ထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး…ကိုမြင့် တယောက်ထဲနဲ့တောင် တော်တော် အီသွားပါပြီ…ဒါကြောင့် အားလုံးကို ခေါင်းခါခဲ့မိတယ်။
ခင် တယောက်ထဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေရာက တင်း..ဒေါင်…တင်း..ဒေါင် တင်း..ဒေါင် ဆိုပြီး လူခေါ်ဘဲလ်ကနေ အသံထွတ်လာပါတယ်။ ခင် လဲ ဘယ်သူများလဲပေါ့ …ဘဲလ်တီးတယ်ဆိုတော့ ၀သန်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ၀သန့် သူငယ်ချင်းများလားပေါ့။ အိမ်ရှေ့တံခါးနှားသွားလိုပ တံခါးမှန်ဘီလူးအပေါက်လေးကနေ အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တာ …ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူး ကိုတော်ချော မောင်ဝသန်ပါ။ ဒီနေ့မှထူးဆန်းလို့ ဘဲလ်တီးပြီးခင့်ကို တံခါးလာဖွင့်ခိုင်ရတယ်လို့။ ဒါနဲ့ ခင်လဲ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်…
“ သား ၀သန် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ …အိမ်သော့မေ့ခဲလို့လား…”
“မဟုတ်ပါဘူး တီတီရယ် သား သော့ဖွင့်ပြီးဝင်လာရင် တီတီ မနေ့ကလိုလှန့်သွားမှာစိုးလို့ ဘဲလ်တီးပြီးခေါ်လိုက်တာ”
“ အမလေး ..ဖြစ်ရမယ်…” “မလှန့်ပါဘူးသားရယ် ….တီတီ ကအခန်းထဲမှာ ကုမ္မဏီက ကိစ္စလေးတချို့ ပြန်ကြည့်နေတာ…” လို့ ညာလိုက်တယ်သိလာ…တကယ်ကမဟုတ်ဘူး တယောက်ထဲ ပဲများနေတာ..ဟီ..ဟီး
ဒါနဲ့ ၀သန်နဲ့ခင် အိမ်ခန်းထဲကို အတူတူပြန်ဝင်လာကျတယ်။ ၀သန့်လက်ထဲမှာလဲ အထုပ်တွေနဲ့ ဟင်းတွေစားစရာတွေ နဲ့။
“ သား ဟင်းတွေကလဲ အများကြီးပါလား… သား စားနိုင်လို့လား….”
“ သားစားဖို့မဟုတ်ဘူးလေ တီတီ …တီခင် စားဖို့ ၀ယ်လာတာ”
“ တော်ရုံဆို ရပါပြီ သား ရယ် တီခင် အများကြီး မစားနိုင်ပါဘူး ဗိုက်လဲ သိပ်မစာသေးဘူး..သားကကောစားပြီးပြီလာ…ပြီးတော့ ထမင်းတယောက်ထဲမစားချင်ဘူး…သား စားမှတီလဲစားမှာ “လို့ ခင်လဲ လူကြီးစိုးလို့ခေါ်မလား ကလေးစိုးလို့ခေါ်မလား မသိတဲ့ ချွဲပျစ်အမှူအရာလေးနဲ့ တူတော်မောင်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ အော်..တီတီရယ်…တီအများကြီးမစားနိုင်လဲ စားနိုင်သလောက်စားပေါ့…သားကတော့ အပြင်မှာစားလာတယ်…အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး နဲနဲလေးပဲ အခုတောင်ပြန်စာလာပြီ..ဟီ..ဟီ”
“ ဟင့်… တီကဖြစ် အတူတူစားဖို့ စောင့်နေတဲ့ ဟာ.. ကို” ခင် ၀သန့်ကို မျက်စောင်းလေး တချက်ထိုးပြစ်လိုက်တယ်
“တီတီကလဲ …စိတ်မဆိုးပါနဲ့ သား လျှောက်ပြောတာ …သား ကတီတီနဲ့ အတူစားဖို့ ဒီလောက်အများကြီးဝယ်လာတာပေါ့လို့…စိတ်မဆိုးပါနဲ့ တီခင်ရယ်…သားနဲ့တူတူစားမယ်နော်..”
“ ဒါဆိုလဲပြီးရော…တီတီ ထမင်းဟင်းတွေပြင်ထားလိုက်မယ်…သားရေမိုးချိုးအ၀တ် အစားလဲလိုက်အုံးနော်…”
“ဟုတ်ကဲ့ တီတီ” လို့ ပြောပြီး ၀သန် သူ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့တယ်…
ခင်လဲ ဟင်းတွေကို မီးဖိုခန်းထဲ ယူလာပြီး ပန်းကန်တွေထဲထည့် ဇွန်းတက် ထမင်းခူး နဲ့ စားဖို့ အစင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်စင်နေလိုက်တယ်။
သား ၀သန် ရေချိုးအ၀တ်စားလဲပြီးလို့ …မီးဖိုခန်ထဲက၀င်လာပါတယ်..သူဝတ်နေကျ တီရှပ်အဖြူ ဘောကန်ဘောင်းဘီ အမဲနဲ့ …တကယ့်ကို ယောကျာ်းကောင်းတယောက်ရဲ့အတွင်သဏ္ဍာန်ကိုပေါက်လို့…
အရင်က ခပ်ငယ်ငယ်ချာတိတ်တယောက်လိုမဟုတ်တော့ဘူး…မိန်းကလေးတိုင်း အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်ချင်စရာ ယောကျာ်းသားတယောက်ရဲ့ အစင်းနဲ့ ပျိုပြစ်နုနယ်မှုတွေဟာ ခင့် မျက်လုံးထဲမှာတော့ တခြားယောကျာ်းသားများနဲ့ ဘယ်လိုမှနိုင်းယှဉ်လို့ မရအောင်ပဲ။ လူချောလေး လမ်းလျှောက်လာပုံကို ထိုင်နေရင်းငေးကြည့်နေမိတယ်။
“တီတီ…သားရေချိုးပြီးပြီ …စားကျဆို့….” သားဝသန်က ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခင့် ဘေးနားက ကုလထိုင်ကိုဆွဲယူပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်…ခင်လဲ သူ့ကြည့်နေရာက မှင်သက်မိနေတော့ ၀သန်ခင့်ကို တချက်ပြန်ကြည့်ပြီး
“တီတီ..ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာ တုန်း…”
လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ လုပ်ပြီးပြောမှ ခင်သတိပြန်ဝင်လာလို့
“အော်….အင်…ဘာမှဟုတ်ပါဘူးသား ရယ် …ဒီလိုပဲ ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးမိသွားတာ”
လို့ ၀သန့် ကို မကြည့်ပဲ ပြန်ပြောရင်းက ထမင်းပန်းကန်တချက်ကိုလန်းဆွဲလိုက်တယ်…
ပန်းကန်ထဲ ထမင်းထည့် ပြီး ၀သန့်ကို ပေးလိုက်တယ်…၀သန်ကလက်တဖက်ကယူပြီး ခင့် အမူအရာကို အကဲခတ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြုံးပြီးကြည့်နေတာပေါ့…။ ခင်လဲ ခင့် ပန်းကန်ထဲကို ထမင်းထည့်လို့ ၀သန်နဲ့ခင် ထမင်း စစားကျတယ်.။ ဘာစကားမှ မပြောပဲ စားနေရင်းက
“ တီ ဒီလိုပဲ အိမ်မှာ နေ့တိုင်းထမင်းစားနေရင် ပျင်းလာမှာပေါ့…နောက်ရပ်တွေ ၀သန်တို့ အပြင်ထွတ်စားကြရအောင်လေး”
“ တီခင်မပျင်းပါဘူး ၀သန်ရယ် …နေတတ်ပါတယ်…အပြင်မှာသွားမစားချင်ဘူး သားရယ်…တီဒီလိုပဲ သားနဲ့ လက်စုံ..စားချင်တယ်”
၀သန် ခင့် ကို ပြုံးရင်က
“ ဒါဆိုလဲ တီ့သဘောပါဗျာ …၀သန်က တီအပြင်မထွက်ဘာမထွက်နဲ့ ပျင်းမှာစိုးလို့ပါ”
“ မပျင်းပါဘူး သားရယ် …နေ့လယ်ဆိုလဲ ကုမ္မဏီက အုပ်စုတွေနဲ့ …အစည်းအဝေးနားချိန်ဆို ဟိုသွားဒီသွားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်… အဲဒါတောင်မကောင်းတတ်လို့ လိုက်ပေးတာ…တီခင်က ဘယ်မှသွားချင်တာမဟုတ်ဘူး..ကုမ္မဏီကပြန်ရင် အိမ်ပဲတန်းလာချင်တယ်”
ဒီလိုနဲ့ စကားအနဲငယ်ပြောပြီး ထမင်းအတူစားလိုက်ကျတယ်…စားပြီးတော့
“ သား ၀သန်”
“ ဒီညကော သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတာရှိလာ”
“ အင်..အင် အဲဒါလဲကောင်းတာပဲ”
“အော်…အဲလိုညတိုင်းထွက်တတ်လား တီခင်ကသိချင်တာပါ..ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး..သားတယောက်ထဲနေတယ်ဆိုတော့ ညပိုင်းတွေ အိမ်ကိုဒီအတိုင်းပြစ်ပြစ်မသွားစေချင်ဘူး…ဒီမြို့ကြီးထဲမှာက သူခိုးဂျပိုးက ပေါကပေါနဲ့”
“ သားလဲ အမြဲမသွားပါဘူး တီရယ်..သွားရင်လဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုင်တဆိုင်ထိုင်မယ်…တခုခုစားမယ်…စကားပြောမယ်…ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်…တခါတလေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးလေကန်မယ်..၇နာရီခွဲ ဂနာရီလောက်ဆိုရင် အိမ်ပြန် စာကြည့် အိပ်..ဒီလောက်ပါပဲ..ဘယ်မှကိုမသွားဘူး” “ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် သား အဲလိုအချိန်လေးနဲ့ထွက် အချိန်လေးနဲ့ပြန်လာ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ နေတာကောင်းတယ်…ဘယ်တော့မှ ညနက်တံခေါင်ထိလယ်တာတို့ ကလပ် တက်တာတို့ ဟိုဟာလုပ်ဒီဟာလုပ်တာတို့ …မလုပ်နဲ့နော်..လုပ်ရင်တော့ အသိပဲ”
ဆိုပြီး သား ၀သန်ကို ဆုံးမနေမိတယ်..။ သူ့ကို ဒီလိုတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး …သား ၀သန်ကလိမ္မာပြီးသား လူငယ်လေးတယောက်ပါ။ ပြောတာကတော့ ကို့တာဝန်ပဲလေ..ဒါကြောင့် သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ပြောရတာပေါ့..
“ တီတီ …ဒါဆိုသား စာခဏသွားဖတ်လိုက်အုံးမယ်…တီခင်လိုတာရှိရင် သားကိုပြောနော်…”
“ ဟုတ်ပြီ ..ဟုတ်ပြီ သား စာသွားလုပ်လိုက်အုံး …တီကတော့ အပျင်းပြေ တီဗွီကြည့်နေမယ်…တခြားတော့ဘာမှ မလိုပါဘူး သား”
“ သားစာဖတ်ပြီးရင် တီ့စီလာခဲ့မယ်…တီမအိပ်သေးနဲ့နော်…တီနဲ့ သားစကားတွေ ပြောချင်သေးတယ်”
“ အင်းပါ တီစောင့်နေမယ်နော်”
“ ဒါဆို ၀သန်သွားပြီနော်”
လို့ပြောရင်း သား ၀သန် သူ့အခန်းထဲကို ၀င်သွားပါရော…ခင်လဲ မီးဖိုခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပန်းကန်တွေဆေးပြီး ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်လာထိုင်ရင်း တီဗွီ က လွင့်နေတဲ့ ပြင်သစ်ကားလေး တကားကို ထိုင်ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။ ပြင်သစ်စကားတော့ နားမလဲပါဘူး ….ဒါပေမဲ့ အောက်မှာ စပ်တိုင်တယ်လ် မြန်မာစာတန်းလေးတွေ ထိုးပေးထားတယ်။ တခန်းနှစ်ခန်းလောက်တော့ ကျော်သွားပြီထင်ပါရဲ့ …ခင် လာထိုင်ကြည့်တဲ့ အချိန် ဇာတ်လမ်းကတော်တော်တော့စနေပြီထင်တယ်…သိပ်အဆက်အဆက် မရှိပဲ တ၀က်တပြတ်ကနေ စကြည့်သလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့် သူတို့ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကျတယ်ဆိုတာကိုတော့ခင် လဲမသိတော့ဘူး…။ သတိထားမိတာက အဓိကသရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက နဲနဲ လွဲနေသလိုပဲ
ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး ….အဲဒီကားထဲမှာလေ သိလာ မင်းသမီးက အသက် ၃၉ ၄၀ ၀န်းကျင်အပျိုကြီး တယောက်ဖြစ်ပြီး မင်းသားက အသက် ၂၄ ၂၅ လောက်ရှိတဲ့ ရုပ်ရည်ခပ်သန့်သန့် ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ ပျင်းလို့ ဖွင့်ကြည့်မိပါတယ် အဲလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီက လျှော့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား မတော်တဆပဲလားတော့မသိဘူး…နဲနဲတော့ ထူးနေသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး …ကံကြမ္မာကြီးက အဲလိုစိတ်တွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်လှုံ့ဆော်နေသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ ခင်လဲ တခြားလိုင်းတလိုင်းပြောင်းပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်း ကြည့်နေပေမဲ့လဲ … နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ ပြင်သစ်ကား လွင့်နေတဲ့ လှိုင်းလေးကို ပဲ ပြန်သွားန်ိတ်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ကို့ဘေးမှာလည် ၀သန်မှမရှိတာ အခုဒီကားကိုကြည့်နေရင်း သူရုတ်တရက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်လဲ တခြားလှိုင်းပြောင်းလိုက်ရုံပဲ ဟုတ်ဘူးလား..ဟီဟီ။ ဇာတ်ကားရဲ့ လပ်ဖ်ဆန်က တော်တော်ကြမ်းတဲ့အခန်းတွေပါတယ်…ခင် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်နေမိတာ …သိလာ။ ဖတ်ရမ်းနမ်းရှုံ့နေကျတာလဲ အသက်ပါလိုက်တာ .. ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ကိုဝင်ပြီး မင်းသမီးနေရာ ၀င်သရုပ်ဆောင်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာသလိုပဲ။ မင်းသားကလဲ ငယ်ငယ်ဖြူဖြူချောချောလေး ဆွဲဆောင်မှုကလဲ အလွန်ရှိတဲ့ ရူပါလေးနဲ့ မင်းသမီးကလဲ အသက် ၄၀ ၀န်းကျင် လုံးကြီးပေါက်လှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အပျိုကြီးဒီဇိုင်း …ရုပ်ကနုပြီး အရွယ်တင်လို့ လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သက်လတ်မိန်းမတယောက်ရဲ့စတိုင်…အရမ်းကို ကြည့်လိုကောင်းတာပဲသိလာ…။ ကိုရီးယား ကားထက်တောင် ကြည့်ကောင်းသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ကျောရိုးပုံစံလေးက ဒီလို...ကို့ထက်အသက်ကြီးလွန်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ရဲ့အကြောင်း…သူ့ကို သူ့မိဘတွေ သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေက တာမြစ်နေတဲ့ ကြားက စိတ်ရှိတိုင်း အားရပါးရလွတ်လွတ်လပ်လပ် မိုက်ရူးရဲချစ်နေကျတဲ့ မမ နဲ့မောင်လေးဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေမိတာ အချိန်တောင် တော်တော်ကြာသွားတယ်။ နာရီကြည့်တော့ ၈နာရီ ခွဲကျော်နေပြီ…..
ဇာတ်လမ်းထဲက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်တွေကို ကြည့်ပြီး…အော်.. အသက်ကွာလွန်းရင် လူတွေကအမျိုးမျိုး ယူဆပြီးတော့ ပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်ကျတာ တားစီးပိတ်ပင်တတ်ကျတာ လူ့သဘာဝပါလားလို့ ခင် စဉ်းစားရင်း ခင့်ရဲ့ ဖြစ်အင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့နေမိတယ်။ အခုဇာတ်လမ်းလေးက ရိုက်ချက်တွေအဆင့်မြင့်သလောက် ပါဝင်သူ မင်းသား မင်းသမီးတွေရဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်ပန်တွေကလဲ အရမ်းကို ပီပြင်အသက်ဝင်လွန်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ပုံကတော့ အရမ်းဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကောင်လေးကို သူ့ထက်အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့ မိန်းမကို ကောင်လေးမိဘတွေက ကောင်လေးနဲ့ လုံးဝသဘောမတူပဲ လိုက်လိုက်ဖျက်စီးနှောက်ယှက်ကျတယ်။ နောက်ဆုံးကောင်လေးကို အဲဒီမိန်းမနဲ့ ဝေးရာကို ပို့လို့ အပြင်းအထန်တားစီးကျတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကောင်လေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အကြီးအကျယ်ကျ မတွေ့ရမနေနိုင်ရောဂါဖြစ်ပြီး မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး မီးပြတိုက်တခုပေါ်ကို တက်ပြီး ခုချလို့ ကို့ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ရှာတယ်။
အခုဇာတ်ကားလေးက တကယ့် စတိုရီလိုင်းတွေကို အခြေခံပြီး ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားတကားနော်…သူတို့ ဥရောပမှာ အရွယ်တင်ပြီးနုပျိုတဲ့ မိန်းမလှကြီးတွေ ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ အနေအထားတခုကို ချပြသွားတဲ့သဘော။ ခင်တို့ စီမှာကောမဖြစ်နိုင်ကျဘူးလာ…သိပ်ဖြစ်တာပေါ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ…။ အဲလို မိန်းမကြီးတွေနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ခိုးစားနေကျတဲ့ သိုက်သမားလေးတွေများ ရိုက်သတ်လို့မကုန်ဘူး ခင့် သူငယ်ချင်း မမများထဲမှာတောင် အများကြီး ။ သူတို့ ကြည့်ရတာ စိတ်တော်တော်ပင်ပန်းတယ် သိလာ …သူတို့ အိမ်က အဖိုးကြီးတွေက မစွမ်းတော့ ပုန်းရှိုးကွက်ရှိုး ခိုးစားနေကျရတာလေ…လူမိလို့က တကယ်ကို မလွယ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ ။ ဒါပေမဲ့ ဖိုမသဘာဝမို့ ဒီလိုတွေ ကျူးလွန်ကျတာမဆန်းပါဘူး…သွေးရင်းသားရင်းတွေမှမဟုတ်တာ။ အခု ခင် အဖြစ်က သူတို့ ထက်စိုးတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ….။လောကကြီးကမတရားဘူး …မလုပ်ရလို့ ပညတ်ထားတဲ့ အရာတွေကို လူအများကြီးကိုကျတော့ မပေးပဲ တစ်ဦးတယောက်ထဲကိုပဲ ကွပ်လို့ ကြမမ္မာငင်စေတယ် ..။သာမန် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေအပေါ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်လို့ သာယာခံစားရတာထက်….ကို့ သွေးအစစ်ကို စိတ်ကူးယဉ်လို့ သာယာခံစားရတာက ပိုပြီး အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံမှုတွေပိုပြီးရရှိခံစားရသလိုပဲ…ခင့် အတွက်တော့ အခုအချိန်မှာ အဲဒီလိုပဲခံစားနေရတယ်…။ ၀သန်ကရောခင့်လိုပဲလာ။ ဒီဇာတ်လမ်းသူကစတာ….သူစလို့ ခင် လဲတွေးရင်းတွေးရင်းက …သူ့အပေါ်ဒီလို ယိုင်နဲလဲပြိုခဲ့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီစိတ်ကို ဘယ်သူမှ မသိအောင် ခင် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ၀သန် တောင်အနည်းငယ်မျှရိတ်မိမယ်မထင်ဘူး….။ ခင် ကအရမ်းလဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်နော်။
အဲလိုပြောလိုက်လို့လဲ ခင့် ကိုအထင်မသေးသွားကျပါနဲ့အုံး…ခင် ကလူရှေ့ ကိုအမှားလုပ်ထားတာကို မရိတ်မိအောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာကိုပြောတာ…အချစ်နဲ့သစ္စာအပေါ်မှာတော့ ဘယ်တော့မှဟန်မဆောင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ခင် တယောက်ထဲ စိတ်ကူးယဉ်အတွေးကမ္ဘာလေးထဲမှာ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြောနေတဲ့အချိန်..
“ တီး..တီး…” ဆိုပြီး သား ၀သန် ခင့်အနောက်ကနေ လှမ်းနောက်လိုက်တာ
“အမလေး…သားရယ် တီကို လန့်သွားတာပဲ…အမလေး..”
ခင် အရမ်းကို လန့်သွားတာပါ…..တကယ်စိုးတဲ့ကလေးပဲ
“ အင် …စစ နော် ခဏ တီခင် အသက်ပါ ပါသွားအုံးမယ်…စာကြည့်ပြီးသွားပြီလာ..”
“ ဟုတ်တယ်…တီ…၀သန်စာကြည့်ပြီးပြီ ဒါကြောင့် တီ့စီထွတ်လာတာ”
လို့ပြောရင်း ၀သန် ခင့် ဘေးမှာလာထိုင်လိုက်တယ်…
“တီ..ဘာကားတွေကြည့်နေတာလဲ…တယောက်ထဲ အရမ်းကို ဈန်ဝင်နေလိုက်တာ…သား လာတာတောင် နဲနဲမှသတိ မထားမိဘူးမလား….” လို့ ၀သန်က ပြောတော့
ခင်လဲ ရိမုတ်က ချယ်နဲ လိုင်းတခုကို ဖျတ်ကနဲ နိတ်ပြောင်းလိုက်တယ်…၀သန် သတိမထားမိလိုက်ဘူး ..သိလာ..ခစ်ခစ်
“ ဘာ..ကားမှမဟုတ်ပါဘူး သားရယ် ..ဟိုလိုင်းပြောင်းကြည့် ဒီလိုင်းပြောင်းကြည့်နဲ့ ဘာတွေမှန်းကိုမသိပါဘူး..”လူကြီးတယောက်က ခလေး တယောက်ကို ခဏခဏလိမ်နေရတဲ့ ခင့် အဖြစ်ပါ။
မလိမ်လို့မရဘူးလေ..ဒီကားကသူကြည့်ပြီးသား ကားဆိုရင် …ကြည့်အုံး တီတီခင် တို့များ ဒီလိုကားတွေကြည့်ပြီး အရမ်းကို ဈန်ဝင်နေပါလား…ဒါဆို တီခင်လဲ ဒီလိုစိတ်မျိုးခံစားတတ်တဲသဘော ရှိလောက်မယ်ဆိုပြီး ခင့် ကိုဝသန် အပိုင်တွက်လို့ အခွင့်အရေးတွေယူ အတင့်ပိုရဲလာမှာပေါ့…။
ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သား စကားအဆက်အသွယ်ခဏပြတ်သွားလို့ ..တိတ်ဆိတ်နေပါရော..
ခင် ထိုင်နေတဲ့ ဖက်ကို ၀သန် တချက်ရွေ.လိုက်ပြီး သူ့ဘယ်လက်ကလေးက ခင့် အနောက်ကနေ ပုခုံးပေါ်ကို အသာလေးလာ တင်ထားတယ်….ရုတ်တရက် ခင် ၀သန့်မျက်နှာကို တချက်ကြည့်လိုက်တယ်..တမျိုးလေးလဲဖြစ်သွားလို့ပါ။ ၀သန်တယောက်ခင့် ကို ပြုံးဖီးဖီးနဲ့ ပြန်ကြည့်လို့ သူမဟုတ်သလိုပဲသိလာ…ဒါနဲ့ခင်လဲ ဘာမှဆက်မပြောတော့ ပဲ အဖက်ခံနေလိုက်မိတယ်။ သူ ဖက်ထားတာ ကဖွဖွလေးပါ အရမ်းဖက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး…ခင့် ရင်ထဲမှာတော့ နွေထွေးနေသလို ကြည်နူးမှုတွေရရှိနေသလို ခင် ခံစားနေရတယ်။ တယောက်ကို တယောက်ဘာမှမပြောပဲ ခင် တို့နှစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်နေရင်းက…၀သန်ကစလို့
“တီခင် …ဒီလိုပဲ တသက်လုံးနေသွားတော့မှာ လား…အခု အရွယ်ရှိတုန်း ကို့ကို တကယ်ချစ်ပြီး
တသက်လုံး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ စောင့်ရှောက်နိုင်မဲ့ ယောကျာ်းသားတယောက်တော့ တီ ဘ၀မှာလိုအပ်မယ်လို့ ၀သန်ထင်တယ်”
“ဟား..ဟား..ဟာ….အမလေး ကိုတော်ချောက ဘာများလဲလို့ သူ့အဒေါ်ကို ယောကျာ်းယူခိုင်းနေတာကို”
သူမလို့ အဲဒီစကားထွတ်ရက်တယ်…မင်းကတကယ်ပဲ တီခင့် ကို ယောကျာ်းယူစေချင်တာကောသေချာလို့လားလို့…ခင် မေးလိုက်ချင်တယ်သိလာ မေးတော့မမေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး…သူ့အမေးကို ဟာသတခုလိုသဘောထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ခင် ပြုံးလိုက်မိပါတယ်
“ဟုတ်တယ်လေး တီခင် ….၀သန်စိတ်ထဲမှာ တီခင် ယောကျာ်းထက်မယူဘူးဆိုရင်တောင် ပိုလို့ ၀မ်းသာသေးတယ်…ဒါမှ ကို့ အဒေါ်တယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေရမှာ ပေါ့…ဟုတ်ဘူးလာ… မယူစေချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ တသက်လုံး ဖြတ်တန်းရမဲ့ ဘ၀လမ်းခရီးအတွက် ဖေးမပေးမဲ့ အဖော်ကောင်းတယောက်တော့ လိုတာပေါ့….ကိုမြင့် နဲ့တုန်းက တီ ဘယ်လောက် ယောကျာ်းတွေကို စိတ်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာ ၀သန်နားလည်ပါတယ်။ တီခင် ယောကျာ်းမယူဘူးဆိုရင်တောင် ၀သန်က တီခင် အိုတဲ့ အထိစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်မယ်…ကို့အဒေါ်ကို”
လို့ ၀သန်က ခင့် ပုခုံးလေးကို စုပ်ကိုင်ထားရင် ပြောရှာတယ်..သိလာ..သူ့ ပါစပ်က အဲလိုစကားမျိုးထွက်လာတာ..ခင် အရမ်းပျော်မိတယ်…အရမ်းကို ပျော်မိတာပါ…သူ့ ကိုလဲ ပြုံးလို့ ခင် ငေးကြည့်နေမိတယ်…ကြည့်နေရင်းက ခင့်ခေါင်းလေးကို သူ့ ရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးပေါ်မှာ အသာလေးမှီထားလိုက်တယ်
“တီခင် ..၀သန့် ကိုဘာကြည့်တာလဲ ၀သန်က တီခင့်ကို အတည်ပြောနေတာဗျ”
“မဟုတ်ပါဘူး ငါ့တူ လူချောလေးရယ်…သားရဲ့ စကားကြောင့် တီတီ အားအရမ်းရှိသွားသလို ခံစားလိုက်ရလို့ပါ..
ကျေးဇူးပါပဲ သားရယ်…တီခင်မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…အဲဒီစကားလေးနဲ့တင် တီခင် အရမ်းကို ပီတိတွေဖြစ်ရတယ်..သိလာ….ယောကျာ်းထပ်ယူဖို့ဆိုတာတော့ တီခင် မစဉ်းစားတော့ဘူးကွာ…တသက်လုံး တီခင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ တယောက်ထဲပဲနေချင်တော့တယ်…ကိုမြင့် တယောက်ထဲနဲ့တင် ယောကျာ်းယူရတဲ့ အရသာကို အီသွားပါပြီ…အဲဒီလို စိတ်ဒုက္ခတွေ တီမလိုချင်တော့ဘူး ၀သန်”
လို့ ခင်ကပြောလိုက်တော့ ၀သန် ခင့် ပုခုံးလေးကို အားပါပါလေး တချက်ညစ်လိုက်ပြီး နှစ်သိမ့်မှုပေးနေတယ်လေ …သူ့ လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ခင့် လက်မောင်းတလျှောက် အပေါ်အောက် ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်သိလာ…၀သန့် ရဲ့ အဲလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကြားမှာ ခင် တယောက် အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေမိတယ်။ ဒါနဲ့ ခင် က
“သားတို့ရှိနေတာပဲ ခင့် ဘ၀မှာ တခြား ယောကျာ်းတွေမလိုတော့ပါဘူး….သား တီကိုတသက်လုံးစောင့်ရှောက်မှာ မဟုတ်လား”
လို့ …၀သန့်ရင်ဘတ်ထဲ အသာမှီထားရင်း က ခင် ၀သန့်ကို ခပ်တိုးတိုးမေးလိုက်မိတယ်
“ဒါပေါ့ တီခင်ရယ် …တီတာမယူနဲ့ ၀သန် တီခင့်နားမှာပဲ တသက်လုံးနေပေးမယ်ဆိုတာယုံ”
ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ သား ၀သန်ရယ်လို့ ခင့် ရင်ထဲပြောလိုက်မိတယ်
“ဒါနဲ့နေပါအုံး …သားကတာ ယောကျာ်းမယူဖို့ တီခင့်ကို ပြောနေတာ …သားကကော ဘယ်အချိန်မိန်းမယူမှာလဲ”
ဆိုပြီး မှီထားတဲ ခေါင်းလေးကို အသာထလို့ ၀သန့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့မေးလိုက်မိတယ်
ဒါနဲ့ ၀သန်က …
“ သားလဲ မိန်းမမယူဘူးပေါ့..ဟုတ်ဘူးလာလို့”
ခင့် ကိုပြုံးဖီးဖီးနဲ့ တူတော်မောင်က ပြန်ဖြေလေရဲ့…အမလေး မယုံပါဘူးတော်
“လျှောက်မပြောပါနဲ့ ၀သန်ရယ်…တီခင် မယုံပါဘူး ..သားလို လူတယောက်ကမိန်းမ မယူဘူးဆိုတာ”
“တကယ်ပြောတာတီခင်…သား တကယ်မယူဘူးဆိုတာ တီခင် စောင့်ကြည့်လေး.”
လို့ ခင့်ကို ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ထက်ပြောပြန်တယ်..ဒါနဲ့ ခင်လဲ
ဆိုပြီး ခင့် ခေါင်းလေးကို ၀သန့် ရင်ခွင်ပေါ် ဖြည်းဖြည်းလေး ပြန်မှီထားလိုက်မိတယ်…
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဘာမှ မပြောဖြစ်တော့ ပဲ အတန်ကြာ တိတ်ဆိတ်နေမိကျတယ်
ခင်..ခေါင်းလေးမှီထားတဲ့ ၀သန့် ရင်ဘတ်ကြီးက လိုထာထက် ပိုခုန်နေသလိုပဲ…သူ့ အသက်ရူသံတွေကလေ နဲနဲပြင်းလာသလိုပဲ…ခင် သဘောပေါက်တယ်…ကောင်လေးတယောက် ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ…
ခင့် ရင်ဘတ်လေးကို သူအဲလိုမှီပြီးနားထောင်မယ် ဆိုရင်လဲ …ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ရင်ခုန်သံမျိုး ၀သန် ကြားရမှာ အမှန်ပဲ ..သိလာ
ခင် ၀သန့်ကို မေးခွန်းတခုမေးလိုက်မိတယ်
“ သား ကိုမေးစရာ တခုရှိလို့”
“ဘာ…မေးမှာလဲ တီတီ…မနေ့ကလို ရီးစားမရှိဘူးလာပဲ မေးမလို့လာ”
“ တီကလဲဗျာ ..သား ပြောပြီးပြီပဲ သားမှာ ရီးစားတကယ် မရှိပါဘူးဆို”
ခင် သူ့မျက်နှာကို လက်နဲ့ ဆွဲလည့်ပြီး ခင့်မျက်နှာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်… “တီ့ကိုမညာနဲ့ အမှန်တိုင်းပြော ..ရီးစားရှိရင် ရှိတယ်လို့ပြောတာ ရှက်စရာလာ..သားလဲ အရွယ်ရောက်ပြီပဲ..တီ နားလည်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ တီခင်က လေးလေးနက်နက်မေးနေတာပါ…၀သန်…တီ အရမ်းသိချင်လို့ပေါ့”
လို့ ၀သန့် ကို ဆိုက်ကြည့်လို့ ပြောလိုက်တယ်..
၀သန် လဲ ခင် စကားပြောပြီးတာနဲ့ တီဗွီဘက်ကို မျက်နှာပြန်လည့် ပြီးဆက်ကြည့်နေတယ်…ခင့် ကိုတော့ ဘာအဖြေမှ မပေးသေးဘူး…ခင် လဲ တီဗွီကို ကြည့်ရင်း
“ ၀သန်…မင်း …ဘာလို့ တီခင့်ကို ညာနေရတာလဲ..”
“ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး တီ….၀သန် ….၀သန့်မှာ ရီးစားကတော့ ရှိပါတယ် ရှိတာကလဲ တယောက်နှစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်ဘူး…၀သန် ကောင်းမလေး တော်တော်များများနဲ့ရီးစားဖြစ်ဖူးတယ်…တွဲတယ်….တီ…ဒါပေမဲ့…”
“ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လဲ ၀သန်”
“ဒါပေမဲ့ …၀သန်တွဲခဲ့တဲ့ ရီးစားတွေထဲမှာ ၀သန့်ရင်ထဲက လာတဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်မျိုးနဲ့ တယောက်ကိုမှချစ်လို့မရဘူး…၀သန် တီခင့် ကို မနေ့က ပြောပြပြီးပါပြီ….အဲဒီမိန်းမတယောက်ကလွဲပြီး သား တခြားမိန်းကလေးတွေကို ဘယ်လိုမှချစ်လို့မရဘူး…..တီရယ်”
လို့ ခင့် ကို ၀သန်ဖြေတော့ ခင်လေ သူ့ကို ဖက်ထားပြစ်လိုက်ချင်တယ်သိလာ…၀မ်းသာလွန်းလို့လေ…
ဒါပေမဲ့ ခင် အမူအရာပျက်မသွားအောင်ပြန်ထိန်းလိုက်တယ်
ခင် ၀သန့်နာမည် တချက်ခေါ်လိုက်တာ ၀သန်ပြန်ထူးပြီး နှစ်ယောက်လုံး ပြန် တိတ်ဆိတ်သွားကျတယ်…
တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ၀သန့် ပါစပ်က ဘာစကားတလုံးမှထွတ်မလာဘူး…ခင် တဖြည်းဖြည်းစိတ်တိုလာတယ်
ဒီလိုအခြေအနေ ရောက်နေတာတောင် သူက ဘာမှမပြောဘူးတဲ့ ..ခင် အံသြမိတယ်…
ခင် နဲ့ ၀သန် အခုလို အနေအထားရောက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်နဲ့မဖြစ်နိုင်မှန်းလဲ သူသိရက်သားနဲ့ သူ့ရင်ထဲက စကားတခွန်းလောက် ခင့် ကို အမှန်အတိုင်းဝင်ခံစေချင်တယ်
သူပြောမှ ခင့် ဖက်က ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကို တခုခုပြန်ပြောလို့ရမှာပေါ့ …နင့်နဲ့ ကို့အဒေါ် အရင်းခေါက်ခေါက်ကို ပြန်ကြိုက်စရာလားလို့တော့ ခင် သူ့ကိုအပြစ်တင်မှာလဲမဟုတ်ဘူး…ဆဲစူမှာလဲမဟုတ်ဘူး…ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ၀သန့်ကို ခင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အဲဒီလိုစကားမျိုးတွေ ပြောမှာလဲ…၀သန် နင် မစဉ်းစားမိဘူးလားလို့ သူ့ကို ခင် အားမလို အားမရဖြစ်ပြီး စိတ်တွေအရမ်းတိုမိတယ်
ကို့ဖက်ကတောင် ဒီလောက် ရေလာမြှောင်းပေးလုပ်နေတာကို…သူ ဘာမှမပြောတော့ ခင် ဘယ်လောက်အနေရခက်သွားမယ်ဆိုတာ သူမစဉ်းစားမိဘူးလာ..ခင်အရမ်းဒေါသထွက်မိတယ်သိလာ…ဒါနဲ့
၀သန် မင်းတသက်လုံးပဲ ဒီလိုမပြောပဲနေတော့မှာလာ…
မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်အရာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ..ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဘာမှခက်ခဲနေမှာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်လာမှာပဲလို့ ခင့် ရင်ထဲမှာတွေးလိုက်မိပြီး ခင် တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကို လျှော့ချလိုက်မိတယ်
အင်..သူအဲလိုမပြောပဲနေတာကောင်းပါတယ်….အခုဘာမှမဖြစ်ခင် အသိတရားလေးဝင်တုန် ကို့ကိုထိန်းမှဖြစ်မယ်လေ…ဒါကြောင့်ခင် သူ့စကားတွေ စောင်မနေတော့ဘူး…ဆိုဖာပေါ်ကနေ မှတ်တက်ထရပ်ပြီး…၀သန်ဖက်ကိုလည့်လိုက်တယ်
“ ၀သန်…ဘာမှလဲ မင်းမပြောပါနဲ့တော့ ..အဲလိုပဲစိတ်ထဲမှာ တသက်လုံးသိမ်းထာတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ တီခင်ထင်တယ်…တီ သွားအိပ်တော့မယ်…ကောင်းသောညပါ ၀သန်”
ခင် ၀သန်ကို အဲလိုပြောလို့ ခင့် အခန်းဖက်ကို သွားခဲ့လိုက်တယ်….
၀သန် ခင့် ကိုတချက်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်…ခင် လမ်းလျှောက်နေရာကနေ တုံ့ကနဲရပ်သွားပြီး ..၀သန့် အသံကို နားစွန့် နေလိုက်မိတယ်…တော်တော်ကြာ ဘာအသံမှထွတ်မလာဘူး…
“ခဏနေပါအုံး တီခင်…တီခင် အဲလို့ပြောပြီး မှပဲ ၀သန့်ကိုလျှောင်သွားတော့မှာလာ … ဒီကိစ္စကို ၀သန့်ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိခက်ခက်ခဲခဲထိန်းချုပ်ထားရတယ်ဆိုတာ …တီခင်သိလာ။ အခု အစပြုလို့ မေးခဲ့တာကလဲ တီတီကအရင်ပါ.. ၀သန့်ဘက်ကစခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး …ကျနော်မေးပါအုံးမယ် တီခင် ကကော တနေ့တနေ့ အဲဒီ စ်ိတ်ကြီးကို ထိန်းချုပ်ထားရတာ တော်တော်လွဲရဲ့လား …သက်တောင့်သက်သာရှိရဲ့လား တီခင်.. ဘာလို့ကို့ကိုယ်ကို ညာနေရတာလဲ… ကျနော်ရင်ထဲမှာ တီခင့်ကို ပြောချင်တာမှ တပိုင်းကိုသေလို့..၀သန့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကအစပြုလို့ ဒီလိုစကားတွေကို ကို့အဒေါ်အရင်းကြီးကို ပြောထွက်မှာလဲ တီခင် ၀သန့်ကို ကိုယ်ချင်းစာပေးပါအုံး တီခင်ရယ်”
ခင် လဲဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိနိုင်တော့လောက်အောင်ကို ထူပူသွားတယ်… ညကလဲ တိတ်ဆိတ်လို့ အရာရာတိုင်းက ခင် နဲ့ ၀သန်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ စကားသံတွေကို တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူလို့ နားစွန့်နေကျသလိုပဲ…ခင် ဘာပြောရမလဲ …ဒီနေရာမှာ ၀သန်ဟာ တခြားသူစိမ်းတယောက်တာဆို ခင် ပြေးဖတ်ပြီး သူ့ရင်ထဲမှာ အားရအောင်ငိုပြစ်လိုက်ပြီး ….ရှုင့်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် အရမ်းအရမ်းကို ချစ်ပါတယ်ရှင်လို့ မျက်ရည်စတွေနဲ့ ချွဲပြစ်လိုက်မိမှာ ပြောပြစ်လိုက်မိမှာ အမှန်ပဲ…ဒါပေမဲ့ ခင့် အသိစိတ်ကတော့ …မိ ခင် နင်မလုပ်ရဘူး အဲဒါနင့် တူအရင်းဟဲ့လို့ …သတိတွေပေးနေတယ်။ ဒီစိတ်နှစ်ခုက ခင့် ရင်ထဲမှာ အကြီးအကျယ်ကို တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေကျတယ်ဆိုတာ ၀သန်သိမယ်မထင်ဘူး…ဒီလိုနဲ့ ရင်ထဲကတိုက်ပွဲကြီးမှာ ခင့် အချစ်စိတ်တွေ ကျရှုံးခဲ့ရပါတယ် ရှင်….ဒါနဲ့
တကဲတန်းသူပြောတာတွေကို ကြားရတာခင်အရမ်းပျော်ခဲ့ပေမဲ့ …ခင် ရှက်ရမ်းရမ်းခဲ့မိတယ်…
“ တော်ပြီး ၀သန်!! … မင်းပါစပ်ကို ပိတ်ထားလိုက်တော့…ငါနောက်ထပ်ဘာမှ မကြားချင်တော့ဘူး”
လို့ ပြောပြီ ခင့် အခန်းထဲကို ပြေးလို့ဝင်သွားမိတယ် …၀သန် ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြီး ကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုတာကိုတော့ ခင် လဲမမြင်နိုင်တော့ပေမယ့် … ၀သန် ဘယ်လိုကြေကွဲမှုမျိုးတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့မှာကို ခင် နှလုံးသားထဲမှာတော့ …ကောင်းကောင်းကြီးသိနေမိတယ်။
ခင့် အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အိပ်ရာပေါ်ကိုတက် မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးလေးမှာ အပ်လို့ ရင်ထဲကခံစားချက်ကြောင့် ခင့် ခန္ဓာကိုယ်က ပြင်းစွာပဲ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပေးလိုက်ပါတယ်…ခင့်မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်တွေဟာ ခေါင်းအုံးလေးပေါ်ကို မြစ်ချောင်းတဖွယ် ဒလဟောကို စီးကျလို့ပေါ့…ခင် အရမ်းခံစားရတယ် သိလာ…တီခင် ကမင်းထက်တောင်ပိုလို့ ခံစားရပါတယ် ၀သန်ရယ်။ မင်း အဲဒါကို သိလား လို့ ရင်ထဲမှာလဲ မေးနေမိတယ်….
ခင့် ရဲ့ ကြေကွဲ ဆို့နင့်ခြင်းတွေ မစဲနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ ခင့် မျက်ရည်မိုးတွေ ရွာသွန်းမှုအရှိန်ကြောင့်၊ ကြီးစွာသော စိတ်ရဲ့ထုထောင်းခြင်းကို လူးလိမ့်နေအောင် ခံစားလိုက်ရတာတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ အိပ်ပျော်လို့ သွားမှန်းမသိ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခင် အိပ်နေရင်းကနေရာတခုကို ဘယ်လိုလုပ်ရောက်သွားတာလဲ …ဒီနေရာကို အရင်က တခါမှလဲ မရောက်ဖူးဘူး …တွေ့နေရတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကလဲ တခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့ အရာတွေ..ဘာတွေလဲ ဘယ်ကမ္ဘာကိုခင်ရောက်နေတာလဲ…ကြောက်လဲကြောက်လာပြီ ခန္ဓာကိုမှာလဲ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့ တယောက်ထဲယောက်ယက်ခက်လို့ ပြေးနေမိတယ်…ပြေးရင်းပြေးရင်းကနေ တချက်ခလုတ်တိုက်ချောလဲသွားပြီး အမောတကောနဲ့ ကုန်းထလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခင် အိပ်ရာပေါ်ပြန်ရောက်နေပါပြီ…ခင် အိပ်မက်စိုးတွေမက်နေတာပဲ..ဘုရားဘုရား လို့ စိတ်က ဘုရားတမိရင်း ကုတင်ဘေး စာကြည့် စာပွဲပေါ်က မီးအိမ်လေးကို ခလုန်ိပ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်..မီးအိမ် ဘေးက နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ည၂နာရီပဲရှိသေးတယ်။ ဘယ်အချိန်လောက်က ၀သန်နဲ့ စကားတွေပြောခဲ့ကျလို့ ဘယ်အချိန်မှာအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတာကို ပြန်ခန့်မှန်းလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ အဲလိုတွေးလိုက်ရင်းကပဲ ၀သန်နဲ့ ခင့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ခေါင်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြန်ပါရော….စာပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ ရေဘူးကို ဖွင့်သောက်ပြီး မီးအိမ်လေးကို ပိတ်လို့ အိပ်ရာပေါ်ပြန်လဲနေလိုက်တယ်…မျက်လုံးကို စုံမိတ်ပြီး အိပ်ပျော်လို့ မနက်ဖြန်ကို အမြန်ရောက်ချင်နေမိတယ်…မအိပ်လို့ မရဘူးလေ မနက်ဖြန် အစည်းအဝေကရှိနေတော့ အိပ်ရေးဝမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ကြိုးစား အိပ်မိတာပါ….မရဘူး ဘယ်လိုမှ ပြန်အိပ်မပျော်တော့ဘူး ခင် အရမ်းကို စိတ်ညစ်မိတယ်…ခေါင်းထဲမှာလဲ ခင်နဲ့ ၀သန့် အကြောင်းပဲရှိတယ် ..ဒါတွေပဲ ထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစား နေမိတယ်။ဒါကြောင့် အိပ်လို့ မရတာနဲ့ မထူးဘူးဆိုပြီး ကုတင်အောက်ဆင်း အခန်းရဲ့ ၀ရန်တာဘက်ကို ထွက်ရပ်နေလိုက်တယ်…ရပ်နေရင်းက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မီးရောင်စုံ ညပိုင်းအလှကို ခံစားရင်းပေါ့… အထပ်မြင့် ကွန်ဒိုဖြစ်လို့ ညလေပြေလေးတွေကလဲ ၀ရန်တာကို တဖြူးဖြူးနဲ့ ဖြတ်တိုက်လို့ပေါ့…ခင် စိတ်တွေနဲနဲပေါ့သွားသလိုပဲ…အသက်ကိုလဲ ၀၀ရှူပြစ်လိုက်တယ်။ ၀ရန်တာလက်ကိုင် စတီးကိုင်းလေးကို လက်ထောက်လို့ မြို့ပြရဲ့အလှကို လေညင်းခံရင်း ခံစားနေမိတာ …အနောက်ကနေ လူတစ်ယောက် ခင့် ခါးကို ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ လက်နဲ့ဆွဲဖက်လိုက်တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ခင် ရုတ်တရက်တော့ လှန့်သွားတယ်
ခင် သိလိုက်ပါပြီ ..သူခိုးလဲ မဟုတ် ဓာပြလဲ မဟုတ် ဘူး ….တူတော်မောင် ၀သန်ပါပဲရှင်။
သူ့ လက်ဖ၀ါတွေကို ခင့် ဗိုက်သားလေးတွေပေါ်မှာ အုပ်ကိုင်ထားရင်း ခင့် နောက်ကျောပြင်ကို သူ့ ခန္ဓာကိုနဲ့ ဖိကပ်လို့ထားတယ်။ ခင့် နှုတ်ဖျားက စကားတလုံးမှမထွက်နိုင်ပဲ စွန့်အနေမိတယ်သိလာ။အတန်ကြာတယောက်ကိုတယောက် ဘာစကားမှမပြောမိပဲ ခင့်ကို ၀သန်အနောက်ကနေ သိုင်းဖက်ထားတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ခင်ကပဲစလို့
“သား ၀သန် မအိပ်သေးဘူးလား”
“ကျနော် ဘယ်လိုမှ အိပ်မရဘူး တီတီ …ကျနော် တီတီ့အနားမှာပဲ ရှိနေချင်တဲ့ စိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်လာလို့ …တီခင့် အခန်းထဲ ၀င်လာခဲ့တာပါ…တီ”
ဒါနဲ့ ခင် ဖက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မပြောသေးပဲ သူဖက်တာကို ငြိမ်လို့ပဲခံနေမိတယ်….
၀သန် ခင့် ကို အနောက်ကနေ ခပ်ဖွဖွလေး တချက်ညစ်ဖက်လိုက်ရင်း….
“ ၀သန် တီ့ကို ချစ်တယ်…အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ…တီတယောက်ထဲပဲ ၀သန့်ရင်ထဲမှာရှိတယ်..ကျနော့ကို ခွင့်လွတ်ပါ တီခင် …၀သန့် ရင်ထဲမှာ မျိုသိပ်ထားရတာ အရမ်း မွန်းကျပ်လာလို့ပါ…အရမ်းချစ်တာပဲ တီခင်ရယ်”
ဆိုပြီး ခင့် နားနားကို ကပ်လို့ တီးတိုး ညင်သာစွာစကားပြောလိုက်တိုင်း ထွတ်ကျလာတဲ့ လေလုံးလေးတွေက ခင့် နားအဖြားလေးပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်း ၀င်ဝင်တိုးနေတယ်…အရမ်းကို ကြည်နူးမိတာပဲသိလာ.။
“၀သန် တီခင့်ကို ချစ်တာ တကယ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား ၀သန်ရယ်…သေချာလဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါအုံး..တီထပ်ပြီး ဘာမှမခံစားချင်တော့ဘူးကွာ”
အဲလိုခင်ကပြောလိုက်တော့ ၀သန် ခင့်ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့ဖက်ကို ခင့် ကိုယ်လေးလဲ့ယူလိုက်ပါတယ်…ပြီးတော့ ခင့် မျက်လုံးတွေကို လဲ စူးဆိုက်ကြည့်ပြီး …
“တီခင်…တီခင် ဆက်ပြီး မညာနဲ့တော့ဗျာ…တီခင် ၀သန့်ကို မချစ်ဘူးလာပြော …တီခင့်ရင်ထဲက အမှန်တရားအတိုင်းပဲ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့နော် တီခင်….၀သန်တီခင့်ကို တသက်လုံးချစ်မှာပါ ဟိုးအရင် ကတဲက ၀သန် တီခင့်အပေါ် ပြုမူတဲ့ ပုံတွေကို တီခင်သတိတော့ထားခဲ့မိမှာပါ …၀သန် တီခင့် ကို ချစ်တာ အတော်ကိုကြာနေပါပြီ တီခင်ရယ်… နော်…အမှန်တိုင်းပဲပြောပါ ဒီနေ့တီခင် ၀သန့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ၀သန်တသက်လုံးတီခင်တယောက်ကိုပဲချစ်မယ်…တသက်လုံး ရပ်တန့်မသွားမဲ့ အချစ်တွေနဲ့ချစ်မယ်ဆိုတာယုံ…တီခင်မချစ်ဘူးလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့..မနက်ဖြန်ကစပြီး တီခင် ၀သန့်မျက်နှာကို ဘယ်တော့မှ မမြင်….”
၀သန် စကား မဆုံးမီ ခင့် လက်ညိုးလေးနဲ့ ၀သန့် နှုတ်ဖျားလေးကို ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်…၀သန် စကားတွေ ထပ်မပြောနိုင်အောင်ပေါ့….
၀သန့်မျက်လုံးတွေနီပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ ၀ဲလို့ ခင့်စကားသံတွေ ဘယ်လိုထွတ်လာမယ်ဆိုတာကို …အာရုံစူးဆိုက်လို့ ခင့်ကို ကြည့် နေတယ်…ခင့်မျက်လုံးတွေထဲမှာလဲ မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့ …တယောက်ကိုတယောက် မျက်လုံးချင်းစုံကြည့်ရင်း ….
“တီခင်လဲ မင်းကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ကွယ်”
လို့ ၀သန့်ကို ပြောလိုက်တာနဲ့ ၀သန့် မျက်နှာလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာရှင် သနားဖို့လဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကောင်လေးပဲသိလာ….ခင့် ကိုပြုံးလို့ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေ ၀သန့်ပါးပြင်ထက်ကို စီးကျလာပါရောလား
ခင့် မျက်လုံးထဲကနေလဲ မျက်ရည်တွေ တလိမ့်လိမ့်နဲ့ စီးကျလို့ လာတော့တာပေါ့…၀သန်က
လို့ ငိုသံပါကြီးနဲ့ပြောပြီးခင့်ကို အရမ်းကို တိမ်းကျုံးဖက်ထားတော့တာပဲ….
“ခင် ကလဲ ၀သန့်ကို အရမ်းရမ်းနဲ့ တသက်လုံးချစ်မှာပါတဲ့ ရှင်…”
ဆိုပြီး ခင် လဲ ၀သန့်ကို တအားပြန်ဖက်ထားလိုက်မိတယ်…ခင် တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွင်ခြင်းတွေကို ဘယ်သူတွေရဲ့ ပျော်ရွင်ခြင်းတွေက ရှင်ပြိုင်လို့ နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး….အရမ်းပျော်တာပဲ သိလာ…
တယောက်ကိုတယောက် အချိန်အကြာကြီး မျိုသိပ်ထားရတဲ့ ဒီအချစ်တွေကို ..ဒီညပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောလို့ ၀သန်နဲ့ခင် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကျပါပြီရှင်။
ဒါနဲ့ ခင့် ကို ၀သန် အရမ်းဖက်ထားတာကနေ အနည်းငယ် ခပ်ခွာခွာလေးနေလိုက်ပြီး ခင့်မျက်နှာတခုလုံးကို လိုက်ကြည့်နေလေရဲ့…ခင် ကလဲ ပြုံးလို့ သူ့မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့် ပြန်ကြည့်မိနေတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းက
၀သန့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ ခင့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေနားကို တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာနေတယ်သိလာ..ခင် အရမ်းရင်ခုန်နေပြီ...စိတ်တွေလဲအရမ်းလှုပ်ရှားလို့ပေါ့….အခုမှ ရီးစားစထားဖူးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အပျိုဖြန်းလေးတယောက်လို…ခံစားနေရတယ်သိလာ…
၀သန့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ခင့် နှုတ်ခမ်းနဲ့ ထိကပ်မိသွားချိန်မှာတော့ …၀သန်တယောက် ခင့်ကို အားပါးတရ အနမ်းမိုးတွေရွာတော့တာပါပဲရှင်…ခင်လဲ မျက်လုံးလေးကို မေးထားပြီး ခင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ စုပ်ဆွဲလိုက် လျှာနဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖက်အကွဲကြောင်းလေးထဲကို ထိုးထည့်လို့ ခင့် လျှာလေးကို လာမွေလိုက်နဲ့ …အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင် …၀သန့် နမ်းချက်တွေကတော့ အရမ်းကို ပရိုကျတယ်သိလာ…ဘယ်မှာများ ဒီကောင်လေးသွားသင်ထားလဲ လို့ တွေးနေမိတယ်…တတ်မှာပေါ့လေ သူ့ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရီးစားတွေဆိုတာကလဲ အများကြီးရယ်…ဒီလောက်ကတော့ သူ့အတွက်အပျော့ပေါ့ ..ဟုတ်ဘူးလား…ခင် ကတော့ ၀သန့်ရဲ့ အနမ်းမိုးတွေအောက်မှာ ကမ္ဘာကြီးကိုမေ့လို့နေတာပေါ့….အရမ်းချစ်တာပဲ သားရယ်လို့လဲ စိတ်ထဲက ရေရွတ်နေမိတယ်။ ခင် တို့ နှစ်ယောက် ငါးမိနစ်လောက်ကြာအောင် တယောက်ကိုတယောက် နမ်းနေလိုက်ကျတာ…အသက်ရူသံတွေလဲမြန်လို့ ..တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ ၀င်သက်ထွက်သက်တွေကိုလဲ ထိတွေ့ခံစားနေရတယ် …..ဒါနဲ့ တေ့စုပ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို ခွာလိုက်ပြီး အသက်တွေပြန်ရူရပြန်တယ်..အသက်ရူလို့လဲဝရော ၀သန်က “တီခင် …အပြင်မှာအေးတယ်…အခန်းထဲသွားကျရအောင်နော်”
တဲ့ ခင်ကလဲ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ၀သန်တယောက်ခင့်ကို ခြေထောက်နဲ့ နောက်ကျောကို သိုင်းဖက်ပွေ့ချီလိုက်ပြီး ခင့်အခန်းထဲကို ပွေ့လို့သွားပါတော့တယ်ရှင်…ခင် လဲပွေ့ချီခံထားရာကနေ ၀သန့်ရဲ့တောင့်တင်းခိုင်မှာမှုရှိတဲ့ လက်မောင်းကြွက်သားတွေကို ထိတွေ့ခံစားလို့ ၀သန် ပွေ့ချီခေါ်ဆောင်ရာကို လိုက်ခဲ့မိတော့တာပေါ့။ခင့်အခန်းထဲကို ၀င် အိပ်ရာနားလဲရောက်ရော ၀သန်တယောက် သူ့လက်မောင်းတွေပေါ်မှာပွေ့ချီထားတဲ့ ခင့်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို အိပ်ရာပေါ် အသာလေးချလိုက်တယ်။ခင့်ကို အိပ်ရာပေါ်ချပြီး ခင့်တကိုယ်လုံးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်နေလိုက်တာ ၀သန့်မျက်လုံးတွေကျွတ်ထွက်မတတ်ပဲ။ ခင် လဲရှက်ရှက်နဲ့
လို့ ချွဲသံပျစ်ပျစ်လေးနဲ့ ၀သန့် စိတ်တွေကို အရှိန်တင်ပေးလိုက်မိတယ်
ပြီးတော့ အိပ်ရာပေါ်ကို သူလဲ လိုက်တက်လာတယ်….ခင် ရင်တွေအရမ်းခုန်နေပြီ ..ဒီကောင်လေ အိမ်ရာပေါ်ရောက်ရင်ဖြင့် ခင့် ကိုဘယ်လိုတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကို တွေးရင်း …ရှက်စိတ်တွေလဲဖြစ်နေမိတယ်သိလာ
၀သန့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကြည့်လိုက်ရင် တောင့်တင်းခိုင်မှာလွန်းလို့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ကြမ်းတမ်းမယ်လို့ထင်ထားတာ …တွေးထားတာနဲ့ အလွဲကြီးလွဲတော့တာပဲ…။ အိပ်ရာပေါ်ရောက်တာနဲ့ ခင့် ဘေးနားမှာတဇောင်းလေး လဲလို့ ခင့်မျက်နှာကို သူ့လက်ဖ၀ါးလေးတွေနဲ့ ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်သပ် လို့နေတယ်သိလာ…ခင့် မျက်နှာလေးကို လဲ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကြည့်လို့ပေါ့…ခင်ကလဲ အကြင်နာတွေ ဂရုဏာတွေ အချစ်တွေ အပြည့် ပါတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ၀သန့် ရဲ့ ယောကျာ်းပီသတဲ့ မျက်နှာလေးကို ဆိုက်လို့ကြည့်နေမိတယ်။
အိပ်ရာပေါ်မှာ တယောက်ကို တယောက် အကြည့်ဆိုက်လို့ ကြည့်နေရင်းက …ခင့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေ ပေါ်ကို ၀သန့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တခါပြန်ရောက်လာပြီူး့ စိတ်ရှိတိုင်း အနမ်းမိုးတွေ ဆက်သွန်းဖြိုးနေလေရဲ့…ခင် ရင်တွေအရမ်းခုန်မိတယ်သိလာ….အနမ်းတွေခဏရပ်လို့ ၀သန့်မျက်လုံးတွေထဲကို ဆိုက်ကြည့်ပြီး…ခင် ဒီလိုမေးလိုက်မိတယ်
“ခင့် ကို ၀သန် တသက်လုံးချစ်မှာလား ဟင်” လို့
“ တီခင်ရယ် …ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲ…တီခင့်ကို တသက်လုံးမကဘူး နှောင်သံသရာ အဆက်ဆက်ပါချစ်အုံးမှာသိလာ” တဲ့
၀သန့် နှုတ်ခမ်းလေးကို အောက်ကနေ မော့ပြီး အားရပါးရ တချက်ဖိနမ်းပြစ်လိုက်တယ်
“ အဲလောက်ထိတောင်ပဲလား သားရယ်…တီခင့်ကို…အို သား”
“နောက်ဆို တီတီ့ကို တီခင်လို့ မခေါ်တော့နဲ့ ကွာ…”
“ ဒါဆိုဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲ …ပြော”
“ဟုတ်ပါဘူး တီခင်ရယ်…အော် ရောင်လို့….ဟုတ်ပါဘူး မ ရယ် …ကျနော် ကလဲ အဲလိုလေးပဲ ခေါ်ချင်ခဲ့တာပါ…မ ကို ၀သန့် ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတော့ …မ လို့ ခဏခဏခေါ်နေကျပဲ..”
ဆိုပြီး ၀သန့်ကို ချွဲပြစ်ပြစ်လေး စူလိုက်မိတယ်
“အင်…ဒါဆို မ ကအခုချိန်ထိ ၀သန့် အဒေါ်ပဲပေါ့ ..မ လို့လဲခေါ်ခိုင်းသေးတယ်”
လို့ ၀သန်က စောဒကတက်လိုက်သေးတယ်…သိလာ
“ ၀သန်က မ ကို တမထဲ မနေရင် မမတင်ရှေ့ ၀သန့် ဖွားဖွားရှေ့ လူရှေ့သူရှေ့ဆိုရင် အကျင့်ပါပြီး အဲလိုခေါ်လိုက်ရင် …မ ကော ၀သန်ကော လုံးဝကယ်နိုင်လို့ မရအောင်သွားပြီလို့သာမှတ်ထားလိုက် ..နားလည်လား..ကိုတော်ချောရဲ့…မ ကို ၀သန်နဲ့ မတို့ နှစ်ယောက် ရှိတဲ့ အချိန်ပဲခေါ် ..ကျန်တဲ့ ချိန် တီခင်လို့ပဲခေါ်ရမယ်နော်…မဟုတ်ရင် အားလုံး ငါးပါးမောက်ကုန်လိမ့်မယ်..သိလာ”
“ဟုတ်ကဲပါ မရယ်…အဲဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ အခု မ ကို ၀သန်အရမ်းချစ်ချင်တယ်ကွား…”
“အမယ်..ကို့ အဒေါ်ကိုနှော် ငရဲကြီးမှာ မကြောက်ဘူးလာ…ခစ်..ခစ်…”
“ငရဲကြီးလဲ ကြီးပါစေတော့ ၀သန်မနေနိုင်တော့ဘူး”
ဆိုပြီး ထမီအပေါ်ကနေ ခင့် ပေါင်သားတွေကို ပွတ်ပေးလို့နေတယ်သိလာ…ခင် လဲဘာမှမပြောပဲ ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်လုံးတွေစုံမိတ်ထားလိုက်မိတယ်…ပေါင်တွေ ပွတ်ရင်းပွတ်ရင်းနဲ့ တူတော်မောင် ၀သန် တယောက် အပေါ် ကို တဖြည်းဖြည်းပွတ်လို့လာနေတယ်…ခင် လဲမျက်လုံးပဲမိတ်ထားမိတယ်…ကြောက်လဲကြောက်ရှက်လဲရှက်နေသလိုပဲ….အပေါ်တဖြည်းဖြည်းတက်လာရင်းက ခင့် ရဲ့ ဟိုဟာနား…ဟီဟီ…
“ဒီကောင်လေးကွာ ဘာတွေ လျှောက်ကိုင်နေလဲမသိဘူး “
လို့ ခင့် ရဲ့ပါစပ်ကထွက်သွားမိတယ်….
“ဘာမှမကိုင်ပါဘူး မ ရယ် ….မျက်လုံးလေးသာမိတ်ထားပါ”
လို့ ၀သန် ခင့် မျက်နှာနားကပ်ပြီး တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်…သူ့ လက်တွေက အခုဆိုရင် ခင့် ဟိုဟာရဲ့…ခင့် အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး အပေါ်ကို ရောက်လို့ နေပြီ …ထမီကတော့ ကြားခံနေသေးတယ်…အဲလို ထမီကြားခံနေရင်း ထမီအပေါ်ကနေပဲ ခင့် အဖုတ်လေးကို အပေါ်အောက် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပွတ် နေလေရဲ့..
ခင် မနေတတ်တော့ဘူး..အောက်ကနေ အင်း..အင်း..နဲ့ အနည်းငယ်တွန့်လိမ်းနေတာပေါ့….အရမ်းကြီးတော့ အရှိန် မတက်သေးဘူး…တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ တက်လို့ လာနေပြီ
“သား…ရှီးးးးးးးး….သားလို့ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်…မ မနေတတ်တော့ဘူး…ရှီးးး”
ထမီအပေါ်က ပွတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ ခင် ထမီအောက်မှာ အတွင်းခံဝတ်မထားတော့  မသိသာဘူး..ထမီလှန်ပြီးကိုင်နေသလိုပါပဲ …ခင့် အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကလဲ အရည်တွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်ဒ ရွှဲလို့ လာပြီသိလာ..ခင် နေလို့ အရမ်းကိုကောင်းတာပါပဲရှင်…
၀သန် ခင့်အဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေရင်းက လက်ကလေးကို ဖယ်လိုက်ပြီး ခင့် ခြေရင်းကထမီစကို ခါးထိဆွဲလန်လိုက်တယ်…ခင် လဲ ရုတ်တရက် လန့်သွားပြီး..
“မ ရှက်ပါနဲ့ မရယ် …၀သန် လုပ်ပေးတာကို နောက်ဆိုရင် မရှက်တဲ့အပြင် ပိုပိုလို့တောင်လုပ်ခိုင်နေမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်…”
လို့ ခင် ပြန်ပြောချိန်မှာတော့ ခင့် ထမီလေးဟာ ခင့် ခါးအထိ ဆွဲလှန်ပြီးသားလေးကိုဖြစ်လို့..ခင့် အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကလဲ ၀သန့်ရှေ့မှာပဲ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတော့တာပေါ့
၀သန့် မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခင့် အဖုတ်ကို အခုပဲ ၀ါးစားတော့မဲ့ပုံနဲ့ ..ခစ်ခစ်…တူတော်မောင်တယောက် ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါကတဲ့က သူ့ အဒေါ် အဖုတ်ကို မြင်ချင်နေလဲမသိဘူး….ကြည့်နေရင်းက ခင့် အဖုတ်လေးကို သူ့ လက်ဖ၀ါးနဲ့ အုပ်ပြီး အပ်ါအောက် ထပ်ပွတ်လို့နေတာပေါ့…အဖုတ်ထဲက အရည်တွေနဲ့ ၀သန့် လက်တခုလုံး ရွှဲလို့ နေပါရောလား…အဖုတ်ကိုပွတ်နေတာကို ရပ်ပြီး မပြောမဆိုနဲ့ ခင့် စပေါ့ရှပ်လေးကို အနားစကလှန်ပြီး ဆွဲချွတ်တော့တယ်…ခင်လဲ မျက်လုံးဖွင့်လို့ ဘာမှပြန်မပြောပဲ ..လက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်ဆန့်ပေးရင်း အိင်္ကျီကို လွဲလွဲချွတ်လို့ရအောင် ကူပေးလိုက်တယ်…ခင့် ကိုယ်ပေါါ်မှာအခုဆိုရင် ပန်းရောင် ဘော်လီလေးနဲ့ ခါးထိဆွဲတင်ထားတဲ့ ထမီတွေပဲရှိတော့တယ်…အဖုတ်ကတော့ ၀သန့်ရှေ့မှာ မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေး အရည်တွေကလဲ ထွက်လို့ ၀င့်ဝင့်ထွားထွားကြီးကို ပေါ်နေတာပေါ့…အဖုတ်ကိုတောက်လက်နဲ့ အားရှိပါးရှိအနှိက်ခံရပြီးမှတော့ ဒီနို့လေးလှန်တာလောက်တော့ မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး…
ဘော်လီဖုံးထားတဲ့ နို့အုံကြီးကို ၀သန့်လက်နှစ်ဖက်စလုံး ရောက်လပါတော့တယ်…ဘော်လီအပေါ်ကနေ နို့တွေကို သူ့လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ညစ်လိုက် ခြေလိုက်နဲ့ ..ခင့် ပါစပ်က..အ..အ…ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေသာထွက်နိုင်တော့တယ်….နို့တွေကို ဘော်လီအပေါ်က နေကိုင်နေရတာ အားမရဖြစ်လာတဲ့ ၀သန်တယောက် …ခင့် ဘော်လီကို ချွတ်ဖို့ ခင့် ခေါင်းလေးကို ခေါင်းအုံးပေါ်က အသာလေး မထူပေးပြီး…ခင့် ကျောနောက်က ဘော်လီချိတ်ကို လက်နဲ့ လှမ်းဖြုတ်တော့တယ်…ချိတ်က တော်တော်နဲ့ မပြုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာနဲ့
“ သား ၀သန် ခဏလေး…မ ဖြုတ်ပေးမယ်…”
ဆိုပြီး ခင့် လက်တွေကို နှောက်ပြန်ပစ်လိုက်ပြီး ချိတ်တွေကို ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်…ချိတ်တွေဖြုတ်နေတဲ့အချိန် သား ၀သန် တယောက်အ ငြိမ်မနေဘူး…ခင့် ပါးတွေကို အဆက်မပြတ်နမ်းနေတော့တာပဲ…
ဘော်လီချွတ်လိုက်တာနဲ့ ခင့် ဖြူဖြူဖွေး နို့နစ်လုံးက ပြူးထွတ်လာပါရော…ခင် လဲ ခေါင်းအုံးပေါ်ပြန်လဲအိပ်လိုက်တာနဲ့ ၀သန့်လက်တွေက နို့တွေကို စုံညစ်လို့ ခင့် မျက်နှာတခုလုံးကိုလဲ ရစရာမရှိအောင် နေရာမကျန် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ လိုက်နမ်းလို့နေတာ..ခင် လေ ရင်ထဲမှာ အရမ်းပြည့်စုံမှု ရှိနေသလိုပဲ။ နမ်းလိုက် နို့တွေ ဆွဲညစ်လိုက်နဲ့ ၀သန်တယောက် ခင့် အပေါ်ကနေပြီး အလုပ်တွေကို ရှုပ်လို့ပေါ့။
အဲလို အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ ကိုတော်ချော မောင်ဝသန်တယောက် …အလုပ်ရှုပ်နေတာကို ခဏရပ်ပြီး သူ့ တီရှပ်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါရော…ကြွက်သားအမျှင်မျှင်နဲ့ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ၀သန့် အပေါ်ပိုင်း ကိုဗလာကျင်းလေးပေါ်လို့ လာတာပေါ့ …ခင် လဲ ခင့်လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ သူ့ ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း အောက်ကနေ ပြုံးလို့ ၀သန့်ကို ကြည့်နေမိတယ်…အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှု၇ှိတာပဲ သားရယ်လို့ စိတ်ထဲမှာလဲ ရေရွတ်နေမိတယ်…အိင်္ကျီချွတ်ပြီးတော့ ခင့်ကို ငုံ့ကြည်နေရာကနေ ခင့် နှုတ်ခမ်းပါးတွေကို ထပ်ပြီး နမ်းလို့နေပြန်တယ်…နို့တွေကိုလဲ ဆွဲညစ်လိုက် အောက်က အဖုတ်လေးကို သွားပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ ခင့် အပေါ်ကနေပြီး ခင့် တကိုလုံးကို လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတယ်သိလာ…အဲလိုသူကလဲ လုပ် ခင် ကလဲ မျက်လုံးလေးမေးပြီး ဆက်လို့ ဖီလင်ယူနေတာနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ပြီး နူးနပ်နေမိကျတယ်။ ခဏကြာတော့ ၀သန် တယောက် သူဝတ်ထားတဲ့ ဘောကန်ဘောင်းဘီလေးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဒူးခေါင်းလောက်ဘောင်းဘီရောက်သွားတာနဲ့ တဖက် ခြေဖျားနဲ့ ဘောင်းဘီ မြော့ကြိုးကို ချိတ်ပြီး အောက်ထိ ဆွဲချွတ်ပြစ်လိုက်ပါရော…သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက အနမ်းမပျက်သလို လက်တဖက်ကလဲ ခင့် တကိုလုံးကို ညစ်လိုက် ပွတ်သပ်လိုက် ဖွဖွလေး အပေါ်အောက်ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ အလုပ်မပျက်ဘူး…..သူ့ ဘောင်းဘီ ကျွတ်သွားတာနဲ့ သူ့ ငယ်ပါကြီးက အကာအကွယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ခင့် ပေါင်သားပေါ်ကို လာထောက်လို့ နေတယ်ရှင်….ခင် တကိုယ်လုံးကျက်သီးတွေထသွားမိတယ်…။ နှုတ်ခမ်းခြင်းဖိကပ်လို့ အနမ်းမိုးရွာနေတဲ့အပြင် ခင့် နို့ တွေကိုလဲ ညစ်ပေးနေလိုက်တာ အရမ်းပဲ…ခင်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရူသံတွေကလဲ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းလာတယ်…
ဒါပေမဲ့လောကကြီးတခုလုံးကတော့ အိပ်မောကျလို့ …အဒေါ်နဲ့ တူ အရင်းခေါက်ခေါက် ဖိုမနှစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညကြီးထဲမှာ ရမ္မက်ဆိုတဲ့ မီးရထားကြီး ကို စီးရင်း တရူးရူှး တရှဲရှဲနဲ့ ကာမအမောင် ညဥသြသံကိုနားစွန့်ရင်း …ချစ်ရည်လူးနေကျတာကိုတော့ တလောကလုံး ဘယ်သူမှသိနိုင်မယ်မထင်ဘူး…ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတားမြစ်လို့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ ငရဲပဲကျပါစေ စိုးတူ ကောင်းတူ ခံမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး ဖုံးကွယ်ထားတိုင်းမကောင်းတဲ့ အချစ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြလို့ …အချိုတကာထက်ချိုမြိန်လွန်းတဲ့ ကာမအမှောင် ပျားရည်ဂိုထောင်ကို ခင်နဲ့ ၀သန် ဖောက်သောက်လို့ နေကျတာပေါ့။
မပြောမဆိုနဲ့ ၀သန် ခင့် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို သူ့လက်တွေနဲ့ ဖြဲကားလိုက်ပြီး ခင့် အိပ်ရာခြေရင်းအစွန်းမှာ ဒူးလေးထောက်လို့ နေရာယူထားတယ်….ခင် လဲ မျက်လုံးလေး အသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ…အမလေး နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး….ကိုမြင့် ပစ္စည်ထက်တောင်နှစ်ဆသုံးဆလောက်ကြီးတဲ့ ၀သန့် လိင်တန် ….ကြီးက ခင့် ပေါင်ကြားမှာ ဘယ်ညာယိမ်းထိုးလို့ ခိုနားဖို့ နေရာတခုကို သဲကြီးမဲကြီး ရှာဖွေနေသလိုပဲ…အရှည်က ခြောက်လက်မကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီး လုံးပတ်က ၃လက်မလောက်ရှိတဲ့ အကြောဖြိုင်းဖြိုင်းထနေတဲ့ ၀သန့် လိင်တန်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာ ခင့် အဖုတ်လေးတောင် တချက် ကြုံ့သွားမိတယ်။ သူ့ လက်နှစ်ဖက်က ခင့် ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးကို ဘယ်ညာကိုင်ထားပြီး အပေါ်ကို တွန်းဖြဲထားတယ်…ခင့် အဖုတ်လေးက သူ့ လိင်တန်ရဲ့ အရှေ့မှာ အစားခံရတော့မဲ့ ယုန်သူငယ်လို ခပ်ဟဟလေး ပွင့်နေတယ်။
၀သန် ဒူထောက်ပြီး အရှေ့ကို တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်…သူ့ ဟာကြီးကို လက်တဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး ခင့် အဖုတ်ဝကို တေ့ထားလိုက်တယ်…တေ့ပြီး အဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် လိင်တန်ထိပ် ဒစ်ကြီးကို ပေါ်အောက်ဖိဆွဲနေတယ်သိလာ…ခင့်မျက်လုံးတွေ ပြူးထွက်မတတ် သူ့ ပစ္စည်းကြီးရဲ့ လုပ်ရှားနေပုံအစအဆုံးကို ကြည့်နေမိတယ်။ လူတကိုယ်လုံးလဲ ကျက်သီးမွေးညင်းထလို့….ကြောက်လဲကြောက် ရင်တွေလဲ အရမ်းခုန်လို့နေတာပေါ့….သူ့ပစ္စည်းကြီးက မနဲမနော် မဟုတ်ဘူး အကြီးကြီးရယ်…ခင် က အိမ်ထောက် ပြုဖူးခဲ့ ပေမယ့် ကလေးမမွေးဖူးဘူး ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ယောကျာ်းတန်ဆာကြီးနဲ့ ကာမ မဆက်ရက်ဖူးဘူးး…ဒါကြောင့် သူ့ဟာကြီးကြည့်ပြီး ခင် နဲနဲတော့ ကြောက်မိတာပေါ့….
၀သန် အကွဲကြောင်းရာတလျှောက်အပေါ်အောက် ဆွဲပွတ်နေရင်းက သူ့ ဒစ်လုံးကြီးကို ခင့် အဖုတ်ထဲ တချက် စောင့်သွင်းလိုက်တယ်….
“အမေ့…သား…ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွယ်…မ ဒီလိုလိင်မဆက်ဆံတာ တနှစ်ကျော်နေပြီး…ပြီးတော့”
“ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လဲ မ “
“ပြီးတော့ မင်းပစ္စည်းကြီးက အကြီးကြီး မ ကြောက်တယ်…”
“မကြောက်ပါနဲ့ မရယ် ၀သန် ဖြည်းဖြည်းချင်းတွင်းပါ့မယ်နော်”
လို့ ခင်လဲပြန်ဖြေပြီးတာနဲ့ ခင် အဖုတ်ထဲ မြုတ်ဝင်နေတဲ့ ဒစ်လုံးကြီးကို ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတော့တယ်….အဲလို ဒစ်လေးကို ထုတ်တွင်းလုပ်နေရင်း ခင် သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့ လိင်တန် တချောင်းလုံးကို ခင့် အဖုတ်ဂလိုင်ထဲ ဖိပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး အဆုံးတွင်းချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်…
“ အ…အအ….အ..အ..သား…..အ…အ.ားးးးးးးးးးးးးး .သားရယ် နာလိုက်တာ…ဖြည်းဖြည်းလို့”
အဆုံးထိုဝင်သွားတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို အဆုံးထိ ပြန်ဆွဲထုတ်ပြန်တယ်….ခင့် အဖုတ်ထဲမှာလဲ အရည်တွေက ရွဲနေတော့ သူ့ဟာကြီးတချောင်းလုံး ၀င်သွားပေမဲ့ ခင့် အဖုတ်ထဲမှာတော့ ၀သန် လိင်ချောင်းကြီးက ပြည့်ကျပ်လို့နေတာပဲ…ခင့် အဖုတ် ဂလိုင်ခေါင်းရဲ့ ဆွဲဆန့်နိုင်မှု အတိုင်းအဆထက်တောင်ကျော်လွန်နေသလားအောင့်မေ့ရလောက်အောင် ခင့် အဖုတ်ထဲမှာ ၀သန့် လိင်တန်ကြီးက ပြည့်ကျပ်နေတာပေါ့
“သားရယ်…သား ဟာက ကြီးလိုက်တာကွယ်…မ အဖုတ်ထဲမှာတောင် နေရာလွတ်မရှိအောင်ကို ပြည့်ကျပ်နေတယ်…”
“မ နောက်ဆို အဲလိုကျပ်တာလေးကို ပဲအသဲခိုက်သွားမှာ”ဆိုပြီး ..
ခင့် အဖုတ်ထဲ ပြန်ထိုးတွင်းလိုက်ပြန်ပါရော..ခင့် ပါစပ်ကလဲ ….”အအ”ဆိုတဲ့ အသံကလွဲပြီး ဘာမှကိုမထွက်နိုင်ဘူး
အဲလိုနဲ့ ခင့် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ဖြဲပြီး သူ့ ပစ္စည်းကြီးကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ထုတ်သွင်းလုပ်နေပါတော့တယ်….
ဆိုတဲ့ အကြင်နာစကားတွေ မိုးမွန်အောင်ထွက်လို့လာတော့တယ်….ခင့် အဖုတ်ထဲ သူ့ပစ္စည်းထိုးထဲ့လိုက်တိုင်း အဖုတ်ချော်ဆီ တွေနဲ့ ယော်ပြီး ပွတ်သပ်မိနေတော့…တ ဗြွတ်..ဗြွတ်..နဲ့ အခန်းတခုလုံး ထွက်လို့
သူ့ပါစပ်ကလဲ “ အ..အ……ကောင်းလိုက်တာ မ ရယ် …မ ကို အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ”
လို့ တတွတ်တွတ်ပြော၇င်း အောက်က သူ့ငယ်ပါကြီးကလဲ ခင့် အဖုတ်ထဲ တဗျြွတ် ဗြွတ်နဲ့ တ ပျပ်..ပျပ် နဲ့ စောင့်လိုက် ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ လိုးတော့တာပေါ့…..ခင့် မျက်လုံးတွေကိုလဲ သား ၀သန်ရဲ့ အကြင်နာမျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ရင်းပေါ့….ခင့် စိတ်ထဲမှာလေ အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပဲ ခင် ဒီဖီလင်မျိုး ကိုမြင့်နဲ့တုန်းက လုံးဝမရခဲ့ ဖူးဘူး…ကြည့်ပါအုံး …ခင့် အဖုတ် အပြင်နှုတ်ခမ်းသား အဖတ်လေးတွေ …၀သန့် လိင်တန်ကြီး ခင့် အဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင် ကပ်ကပ်ပါသွားလိုက် ထိုးထည့်လိုက်ရင်လိပ်ပြီး ပြန်ဝင်လာလိုက်နဲ့ …ပြောမပြတတ်အောင် ခင် အရမ်းခံလို့ကောင်းနေမိတယ်သိလာ…
“ အားး…ရှီးး….သားး…..၀သန်…..လုပ်ပါ….မ ကို အားရပါးရလုပ်ပါ….နော်…”
အောက်ကနေ အစောင့် အညောင့်ခံရင်း ပြစ်ချွဲနှစ်ချွဲ လေသံလေးနဲ့ ၀သန့် ကို ပူစာနေမိတယ်…
“အ…အ…အ..အာ…..အာဒးးးးးးးးးးးး….၀သန်…မောင်…ကောင်လိုက်တာ မောင်ရယ်….မ ကို တသက်လုံးချစ်ရမယ်နော်…နော်လို့…အမလေး…အားးးအားးးး”
၀သန့်စောင့်ချက်တွေ အရမ်းပြင်းလာတယ်….သူအားမရတော့ဘူးထင်တယ်…ခင့် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို လွတ်ပြီး သူ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခင့် ခါးလေးကို ဆွဲကိုင်လိုက်တယ်…ပြီးတာနဲ့ အားရပါးရ စိတ်ရှိလက်ရှိ သူ့အဒေါ်ကို လိုးနေလိုက်တာကြည့်ပါအုံး…မသိရင် ပြည့်တန်ဆာမ တယောက်ကို ခေါ်လုပ်နေတလားအောင့်မေ့ရတယ်….
“ အင်…မောင်…မောင်…ပြီးချင်ရင် ….မ…အထဲ..မှာပဲ…ပြီး..လိုက်…အ..အ…အားး..အ…”
တခန်းလုံးလဲ တပြွတ်ပြွတ် တပျပ်ပျပ်နှင့် လိုးစောင့်သံများ အသားချင်းပွတ်တိုက် သံများနဲ့ ခင့်အိပ်ရာလေး ပေါ်မှာ ကာမဆန္ဒ အထွတ်အထိပ်ကို တူဝရီးနှစ်ယောက် အရောက်လှမ်းနေကျတာပေါ့…
ဆိုပြီး ၀သန် သုတ်ရည်တွေ ခင့် အဖုတ်ထဲကို ဒလဟောပန်းထည့်လိုက်တာ..အဖုတ်အထဲမှာနွေကနဲဖြစ်သွားတာပဲ…ခင် လဲအရမ်းပြီးချင်နေပြီ….
“ ၀သန်…သား……မ…ကို စောင့်အုံး…စောင့်ပါ….နာနာစောင့်…အင်…ဟုတ်တယ်….အင်…အား…အ…အ..အ….အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး….သာ..၀သန်………ကောင်းလိုက်တာ…..ရှီ….”
ခင်လဲ ခင့် အဖုတ်ထဲမှာပဲ သုတ်ကန်ကြီး ဖွင့်ချလိုက်တော့တယ်…
ခင်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးချွေးတွေကလဲ ရေချိုးထားသလို ရွဲလို့ ….
၀သန့် ပစ္စည်းကြီးကတော့ ခင့် အပေါက်ထဲမှာ ထိုးထည့်ထားတုန်ပဲ မထုတ်သေးဘူး….ခင့် အပေါ်ကို ၀သန်ဖိချလိုက်ပြီး ခင့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်ပါရော…ခင်လဲ သူ့အနမ်းတွေကို ..ခမ်ရင်း…
“ သား ၀သန်….တီခင့် ကို လုပ်ရတာ ကောင်းရဲ့လား..ဟင်..”
“ ကောင်းတာပေါ့ တီခင်ရယ်……မ…ရယ်…”
“ ၀သန်…မ ကို တီခင်လို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်…အခုလိုလုပ်နေတုန်း တီခင်လို့ ခေါ်ပြီးလုပ်ရင်….တီခင့် ရင်ထဲမှာ ပိုပြီးအရသာရှိသလိုပဲ”
“ တီခင်….က သားကြောဖြတ်ထားသာလား..ဟင်…”
“ ကောင်လေးနဲ့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မဖြတ်ပါဘူး”
“ ဒါဆို တီခင် ဘာလို့ တီခင့် အဖုတ်ထဲမှာ ပြီးခိုင်းတာလဲ…ဗိုက်ကြီးမှာ မကြောက်ဘူးလား..ဟင်…”
“ တီခင်သိပါတယ် ၀သန်ရယ်…အဲလို အထဲကို သား ရဲ့ အရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ အရသာကို တီခင် ခံစားကြည့်ချင်လို့ ..တမင်သက်သက် အထဲမှာပြီးခိုင်းလိုက်တာ…သိပြီလာ…ဗိုက်ကြီးမှာတော့မပူနဲ့ တီခင် ဆေးသောက်လိုက်ရင် ရပြီ…မကြီးတော့ဘူး…ပေါ့…ဘာလဲ…သား က တီခင့်ကို လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး…ကလေးရမှာတော့ ကြောက်နေတာလာ…ပြောလို့…”
နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ၀သန့်ကို ချွဲလိုက်တော့
“အို…တီခင်ကလဲ…ဘာလို့ ကြောက်ရမှာလဲ…တီခင်က အခုဆိုရင် ကျနော့ မိန်းမတောင်ဖြစ်နေပြီပဲ….”
“ ဘယ်သူပြောလဲ တီခင်က မင်းမိန်းမဖြစ်သွားပြီလို့…ကောင်လေးတယောက် ရှက်လဲမရှက်ဘူး…ခစ်..ခစ်”
လို့ အိပ်ရာပေါ်မှာ ခင်နဲ့ ၀သန် တယောက်ကိုတယောက်ဖက်လို့ အမော်ဖြေရင်း ကြည်နူးနေမိကျတာပေါ့။
“ ၀သန်နဲ့ပဲ အတူတူနေပါလား”
“နေချင်ရင်နေလေး…မန္တေလး မပြန်တော့နဲ့ “
“ အင်….တီခင် အခု အစည်းအဝေးပြီးရင်တော့ မန်းလေးခဏပြန်မယ်…ဟိုမှာ တလလောက် လုပ်ပြီး တီခင် …ရန်ကုန်ကို အပြီး အလုပ်ပြောင်းလာခဲ့လိုက်မယ်…ကောင်းလာ”
“ ဟာ…တီခင်ကလဲ ကောင်းတာပေါ့ …ဒါဆိုရင် တီခင်လဲ ရန်ကုန်ခဏခဏလာစရာမလိုတော့ဘူး…၀သန်လဲ မန္တလေးကို ခဏခဏစင်းစရာမလိုတော့ဘူး…မဟုတ်ရင် အကြောင်းမရှိပဲ သွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေလို့ မေမေတို့ ဖွားဖွားတို့ ရိတ်မိသွားနိုင်တယ်….”
“အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ်သား…တီမင်းစီမှာလာနေလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ.”
“ သား..နဲ့ တသက်လုံးနေရမှာနော်…”
“နေမှာပေါ့ သားရဲ့…တရက်လောက် ခွဲနေရရင်တောင်…တီခင် အရမ်းလွမ်းနေမိမှာသိလာ…ဒီက လူချောလေးကို….ခစ်ခစ်…”
အဲလိုပြောလိုက်တော့ ၀သန် ခင့် ကို ဖက်ပြီး နမ်းလို့ ဇာတ်လမ်းကထပ်စလာပြန်ပါတယ်…ခင့် အပေါက်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ သူ့ညီလေးကလဲ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ မာတောင်လာပြီး သုခဘုံကို အလည်တခေါက် ထပ်သွားဖို့ အစင်သင့် ဖြစ်လို့နေပါရောလား…ဒီလိုနဲ့ တညလုံး မိုးလင်းတဲ့ အထိ ၀သန်နဲ့ခင် လိုးပွဲကြီးဆင်နွဲလိုက်တာ မနက်၆နာရီလောက်ရောက်မှ နှစ်ယောက်သား အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်ရှုင်။
ခင်လဲ ရန်ကုန်က အစည်းအဝေးကို ပြီးအောင်တက်ပြီး မန္တလေးကို ပြန်သွားလိုက်ပါတယ်…ပြန်သွားပြီးတလလောက်ကြာတော့ ရန်ကုန်ကို ကုမ္မဏီအလုပ်အပြီးရွေ့ခဲလိုက်ပါတော့တယ်…၀သန်လဲ ခင်နဲ့ အတူနေလာရင်က ကျောင်းပြီးလို့ သွားပါတော့တယ်…ဒါပေမဲ့ ခင့် ချစ်လင်လေးက နိုင်ငံခြားကို သွားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ ဖျက်လိုက်ပြီး ခင် နဲ့ သူ့ တိုက်ခန်းလေးထဲမှာ လင်မယားလိုနေတာ အခုအချိန်ထိပါပဲရှင်………………………………………….။
Posted by bluegyi at 04:03
Minhtet Ko 18 March 2013 at 08:44
download swal chin loh......bal lol swal ya ma lal pyaw pya par ohm
min mon7October 2013 at 09:20
Sanjit Sulaiman 24 September 2014 at 23:01
Aung Myo Minn 1 March 2016 at 14:40
MYAN HAU JOHN6October 2018 at 05:59
Good Romantic drama ended in erotica sexual portion.Deeply supported to
write this type of sexual copulation.